ကျမချစ်သူဟာ မင်းသား ( ပညာပေး ဇာတ်လမ်းလေးပါ ) | OKKALA STORE
မာစတာဘရိန်း ကောင်းပြည့် ၀တ်မှုန်ရွှေရည်
The series of Shocks I had ( အချစ်ဝတ္ထု ချိုချိုလေး...
I Like sexy women3(Korean 2015 Love Movie )
ကြုံတွေ့ခဲ့ရ ကျွန်တော့်ဘဝအထွေထွေ (မှော်ဝန်းသားဦးခ...
ရင်ကို ၀ုန်းဆန်စေသာ မေပန်းချီ ၏ Photo များ
မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ကန်တော်ကြီး၊ မျှော်စင်က...
ဟိုဘက်ဒီဘက်မှတ်စု zaypya နေတိုး မိုးဟေကို ခင်ဝင့်ဝ...
အယုဒ္ဓယက အပြန် ( မြန်မာ့ နန်းတွင်း အချစ်ဇာတ်လမ်းကြီ...
Wyne Su Khine Thein's One Lady Show In Yangon
My Girlfriend is Robot (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Imitation Game (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဟတ်ထိတယ်၂ ရန်အောင် ရဲအောင် သူထူးစံ မိုးအောင်ရင် ထွ...
ဘီကီနီ မ၀တ်ရဲလို့ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေ မ၀င်ခဲ့ရတဲ့ သ...
The GiGOLO 2015 ( Hong Kong Movie ဇာတ်ကားသစ်)
တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာ (စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သူရိယ ခင်ဝ...
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ် -ဇာတ်သိမ်းပိုင်...
Perfume (မြန်မာစာတန်းထိုး) HD
မာလာဆောင်ရဲ့ချစ်ပုံပြင် နေတိုး ဖွေးဖွေး
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ် - အပိုင်း - ၁ (...
Who Slept with Her / Hot for Teacher မြန်မာစာတန်းထ...
The Flash Season 1 EP 1 English Subttile
အာရွှီးတဲ့ကိုကို လူမင်း Bobby Soxer
မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction Square Mall မှ...
Dead Sign 2013 (မြန်မာစာတန်းထိုး) Mobile Version
ကျမချစ်သူဟာ မင်းသား ( ပညာပေး ဇာတ်လမ်းလေးပါ )
Fiestar - You are PITIFUL ô
ယောက်ျားလို့ဆို ဇေရဲထက် ယုသန္တာတင်
ပူပူနွေးနွေး ဂရမ်မီဆု ၄ ဆုရထားတဲ့ Sam Smith - Lay ...
မျက်နှာသစ်မော်ဒယ် အိနုဝေ နှင့် နွေရာသီ ဖက်ရှင် ဓာတ...
The Housemaid 2014 ( China Love Story ) ဇာတ်ကားလေး...
လင်းလင်း + ချစ်သုဝေ ( မီးအိမ်ကဗျာ ) VCD Album ထွက်...
The Fox Lover (မြန်မာစာတန်းထိုး)
၁၈နှစ်အထက်သာ ကြည့်ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ ဂ...
RONAL BARBAREN (မြန်မာစာတန်းထိုး)
လူသား နှင့် စက်ရုပ်တို့၏ ချစ်ခြင်းဖွဲ့ ဇာတ်ကား
မတ်လ (၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Junction Square Center မ...
အမျိုးသားထုကြီး အတွက်ပါ ♥♥♥♥
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Royal Green Rive...
ဒီညနေ ဆိုင်ကို ရောက်တော့ လူတွေ တဆိုင်လုံး အပြည့် ဖြစ်နေသည် ။
သူဇာအောင် စိတ်ညစ်သွားသည် ။ အရင်လိုနေပါတယ် ဆိုမှ စက်တလုံးမှ မအားဘူး ..။
ဒီဆိုင် က အိမ်နဲ့ နီးလို့ သူဇာအောင် ပို သဘောကျ သည် ။ အရေးအကြောင်းဆို ဒီဆိုင်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ အမ မခင်သန်း လဲ သိလို့ ပြေးလာခေါ်နိုင် သည်လေ ။ အရေးအကြောင်းဆိုတာက အမေက သိပ်စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး ..။ ရောဂါ ဖေါက်ဖေါက်လာတတ်သည် ။
သူဇာအောင် ခေတ်မှီရောဂါ ရနေသည် ..။ ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေသည် ..။ ညနေတိုင်း အင်တာနက်ဆိုင်ကို မထိုင်ရရင် နေလို့ထိုင်လို့ မကောင်းဘူး ။ အခု ပိုဆိုးတာက အွန်လိုင်းမှာကိုသားထွေး ဆိုတဲ့ လူနဲ့ ညိနေတော့ အင်တာနက် မ၀င်ရရင် သူဇာအောင် ရူးမတတ်ဘဲ ။
ကိုသားထွေး နဲ့ ချပ်တင်းလုပ်ရင်း သူနဲ့ ညိနေရပြီ ။ သူပေါ်မလာရင် သူဇာအောင် ကတုန်ကရင် ဖြစ်လာသည် ..။
သူအွန်လိုင်း တက်လာတာ မြင်ရင် သူဇာအောင် ၀မ်းသာပျော်ရွှင်ရတာ အရမ်းဘဲ ..။ သူနဲ့ ချပ်တင်း လုပ်နေတာ နှစ်လကျော်လာတော့ သူက သူဇာအောင့်ကို မြင်ဘူးချင်သည်..ကင်မရာနဲ့ပြပါ လို့ တောင်းဆိုလာ သည် ..။ သူဇာအောင် လဲ ကိုသားထွေး ကို တွေ့ဘူးမြင်ဘူးချင်တာပါဘဲ ..။ ဒီတော့ သူလဲပြ..ကိုယ်လဲပြ ကင်မရာ နဲ့ ပြကြ ကြည့်
ကြ သည် ..။ ကိုသားထွေး က သူဇာအောင်ကို သိပ်ချောတာဘဲ သိပ်လှတာဘဲ တဖွဖွ ပြောနေလို့ သူဇာအောင် ရှက်လဲ ရှက် ပီတိတွေ လဲ ဖြစ်နေ သည် ..။ ကိုသားထွေး သည် လဲ ကြည့်ကောင်းတဲ့ လူတယောက် လို့ သူဇာအောင် ထင်မိ သည် ..။
ညနေတိုင်း ကိုသားထွေး နဲ့ ကင်မရာ နဲ့ ချပ်တင်း လုပ်ကြ သည် ။ ကိုသားထွေး က တဆင့်တက်လာ သည် ။ လူချင်းတွေ့ချင်သည် တဲ့ ။သူဇာအောင် နဲ့ အစား တခုခု သွားစားပါရစေ ..
လို့ ပြော သည် ။ သူဇာအောင် လဲ အခု အသက်၁၉နှစ် ပြည့်ပြီးသည် အထိ ရီးစားလဲ မရှိခဲ့တာ နဲ့ ရီးစား ထားကြည့်ချင်နေမိတော့ ကိုသားထွေး လို ရုပ်ရည်သနားကမား လူတယောက် နဲ့ ရီစား ထားလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြးတ်လိုက် သည် ..။ အမြဲတွဲသော အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်း အေးအေးရွှေ ရီးစားထားတာ ကို သူဇာအောင် အားကျနေခဲ့တာ ကြာပြီ လေ ။
အေးအေးရွှေ က သူ့ရီးစား လွင်မိုးကို နဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ သူ့ရီးစား က သူ့ကို ဘယ်လို နမ်းတယ်..ဘယ်လိုကိုင်တယ် ..ဆိုတာတွေ ကို အသေးစိတ် ပြောပြောပြခဲ့တော့ သူလဲ အေးအေးရွှေ လို ရီးစားထားချင်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်နေခဲ့လို့ ကိုသားထွေး က လူချင်း တွေ့ဆုံချင်သည် ပြောတော့သူဇာအောင် မငြင်းတော့ဘူး ။သူနဲ့ တွေ့မည်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည် ..။ ဒီနေ့ညနေ ..ကိုသားထွေး ကို လူချင်းတွေ့မည် လို့ အဖြေပေးရမည် ..။
အင်တာနက်ဆိုင် က စက်တွေက တလုံးမှ မအားဘူး ..။ အင်း..တခြား ရပ်ကွက် ကို သွားရမှာထက်စာရင် ဒီဆိုင်မှာဘဲ ထိုင်စောင့်ရင် ကောင်းမည် လို့ ထင်မိသည် ..။ ဆိုင် က ကောင်လေး ကို ပြောပြီး ဆိုင်ဝ က ကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်စောင့်လိုက် သည် ..။ ဆိုင်ခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေး မှာ လူတွေ ပြည့်ကျပ်နေအောင် ရှိနေလို့ ချွေးစော် တအားနံနေ သည် ။
လူစော်တွေ မတရားကြီး နံနေ သည် ။ စက်တလုံး နဲ့ တလုံးကလည်း တအား ကပ်နေသည် ..။ စက်တွေကလဲ လူတကာ တယောက်ပြီးတယောက် သုံးနေလို့ ..ဈေးအိမ်သာ လိုဘဲ ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်နေ သည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ဖြစ်ရင် ပြီးတာဘဲ လေ ..။
ကိုသားထွေးနဲ့ မတွေ့ခင် က နိုင်ငံခြား က ကိုရဲ ဆိုတဲ့ အကိုကြီး တယောက် နဲ့ ချပ်လိုင်း မှာ တွေ့ပြီး ခင်မင်ကြရ သည် ..။ ကိုရဲ က သူဇာအောင့်ကို နေ့တိုင်း ချပ်တင်း လုပ် သည် ။
ကိုရဲ နဲ့ ခင်မင်သွားတော့ သူဇာအောင် ကင်မရာကနေ ရုပ်ကို ပြလိုက် သည် ..။ ကိုရဲ ကတော့ သူ့ရုပ်ကို မပြဘူး ..။ သူဇာအောင် က ကိုယ့် လက်ရှိဘ၀မှန် ကို ကိုရဲကို အားလုံး ပြောပြ
သည် ..။ ကိုရဲက သူဇာအောင် ကို သနားသွားသည် ။ ကိုရဲ က သူဇာအောင့်ကို စိတ်ဓါတ် မကျဖို့ အားပေး သည် ..။ သူ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီမည် လို့ ပြော သည် ..။ တကယ်လဲ ကိုရဲ ကူညီ သည် ..။
တရက် သူဇာအောင် ဆိုင်မှာ စက်ရှေ့ ထိုင်နေခိုက် အိမ်က အမ မခင်သန်း ပြေးလာခေါ်သည် ..။ သူဇာအောင့်ကို လူတယောက် အိမ်မှာ လာရှာ သည်တဲ့ ..။ သူဇာအောင် လဲ အိမ်ကို
ပြန်သွားကြည့်တော့ လူတယောက် သူ့ကို ရပ်စောင့်နေတာ တွေ့ရ သည် ..။
“ ဘာကိစ္စပါလဲ ...”
“ သူဇာအောင် လား ..”
“ ဟုတ်ပါတယ် ...”
“ ကျနော့်ကို နိုင်ငံခြား က ကိုရဲ က လွှတ်လိုက်လို့ပါ ...”
“ အော်..အကို က နိုင်ငံခြား က ပြန်လာတာလားဟင် ..”
“ အာ..မဟုတ်ပါဘူး ...နိုင်ငံခြား ကနေ ဖုန်းဆက်ပြီး သူဇာအောင် ရဲ့ လိပ်စာ ပေးပြီး ငွေလာပို့ခိုင်းလို့ပါ ..”
“ အော်..ဟုတ်ကဲ့ ..”
သူဇာအောင် စိတ်ထဲ ထ်ိတ်ကနဲ ၀မ်းသာသွားသည် ..။
ငွေ...ငွေ..ဆိုပါလား . . ။
ဟယ်တော့ ...ကိုရဲ တကယ် ပို့တယ် ...။
သူဇာအောင် ဆိုင်မှာ ထိုင်ရကျိုး နပ်သွားပြီ ..။ သနားတတ်သော ကိုရဲက ငွေတကယ်ပို့ပေးလိုက်သည် ..။
“ ဒီမှာ ညီမ..ငွေ တသိန်း ..ရေကြည့်လိုက်အုံး ...”
တုန်ရီတဲ့ လက်အစုံ နဲ့ သူဇာအောင် ငွေတွေကို လှမ်းယူလိုက် သည် ..။
“ မရေတော့ပါဘူး အကို ရယ် ..ကျမ ယုံပါတယ် ..လာပို့ပေးတာ ကျေးဇူးပါဘဲရှင် ..”
“ ရပါတယ်ဗျာ..ကဲ သွားလိုက်အုံးမယ် ...”
ငွေတသိန်းထုပ် ကို ကိုင်ရင်း သူဇာအောင် အံ့သြနေဆဲ ...။
ကိုရဲ..ကိုရဲ..သူ တကယ် စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ လူ ..။ အပြင်မှာ တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် ကို ချပ်လိုင်းမှာ ငိုပြရုံနဲ့ သနားသွားပြီး ငွေတသိန်း ကို ရက်ရက် ရောရော ပို့
ပေး သည် ။
သူဇာအောင် အမ မခင်သန်း လက်ထဲကို ငွေတွေ ထည့်ပြီး အမေ့ကို အားရှိတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွေးခိုင်းသလို မနက်ဖန်ကျရင် အမေ့ကို ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်လို့ သွားမပြနိုင်တဲ့
လမ်းထိပ် က ဆေးခန်းကို ပြမည် ..။
ညနေပိုင်း ဆိုင်ကို ပြန်ပြီး ချပ်လိုင်းကနေ ကိုရဲကို စောင့် သည် ..။ ကိုရဲ တက်လာတော့ သူဇာအောင် ကိုရဲကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထပ်ထပ် ပြောမိရ သည် ။ ကိုရဲက စိတ်မပူနဲ့..နောက်လဲ ပို့ပေးနိုင်သေးသည် ..လို့ ပြောသည် ..။
“ အမ ...အမ ..စက်အားပြီ .....”
ဆိုင်က ကောင်လေး ရဲ့ အသံကြောင့် သူဇာအောင် ကိုရဲ အကြောင်း တွေးနေတာ ရပ်ဆိုင်းသွား သည် ..။
“ အမ..တနာရီ သုံးမှာလား ...”
“ အေး..အေး ...”
၀မ်းသာအားရ လွတ်သွားတဲ့ စက်မှာ ၀င်ထိုင်လိုက်သည် ..။
ကိုသားထွေး နဲ့ ချိန်းထားပေမဲ့ သူ ရှိမနေဘူး ..။ သူဇာအောင် စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ စောင့် သည် ..။ ဆယ့်ငါးမိနစ် ကြာမှ သူ တက်လာ သည် ..။
“ ဟိတ် ..အကို ...စောင့်နေတာကြာပြီ ....”
“ ဆောရီး ..သူဇာ ..အကို ..လမ်းမှာ ထရက်ဖစ် ဂျမ်း ဖြစ်နေလို့ ...”
“ ရပါတယ် ..အကို ..”
“ သူဇာ ..ကင်မရာ ဖွင့်လိုက်လေ ...”
“ ဘာလို့လဲ ..”
“ သူဇာ့ကို တွေ့ချင်တာပေါ့ ..”
“ အင်း ..အကိုလဲ ဖွင့်လိုက် ..အကို့ကိုလဲ တွေ့ချင်တယ် ..”
ကင်မရာ ကနေ ကိုသားထွေး ရဲ့ ရုပ်ကို သူဇာအောင် တွေ့နေရပြီ ...။
ဒီနေ့ ကိုသားထွေးပုံ၇ အရင်တွေ့ဘူးခဲ့တာတွေထက် ပို ရှင်းလင်းပြတ်သားသည် ..။
ကိုသားထွေး သည် နှာတန်ပေါ်ပေါ် နဲ့ ကုလားကပြား လို ရုပ်မျိုး ..။ ရုပ်ဖြောင့်.. ကြည့်ကောင်းသည် လို့ သူဇာအောင် သူ့ပုံကို စတွေ့ဘူးထဲက ထင် သည် ..။
“ သူဇာ ..ဒီနေ့ ပါးကွက်ကလေး နဲ့ သိပ် မိုက်တာဘဲ ...”
“ ဟွန်း ..ဟုတ်ပါဘူး ...”
“ ဟုတ်တယ် ...သနပ်ခါးနံ့လေး မွှေးနေမှာဘဲ ...”
“ အင်း..မွှေးတယ် ...”
“ နမ်းကြည့်ချင်လိုက်တာ ...”
“ အိုး ...အကိုနော်..မကဲနဲ့ ....”
“ သိပ်လှတာဘဲကွာ..သူဇာလေး ရယ် ...ဟင်း ...”
“ ဘာလဲ..ဟင်း...ဆိုတာက ...”
“ အင်း ..သူဇာ့ပါးလေးကို အာဘွား ပေးချင်လို့ ..”
“ အကို...ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲကွာ ...”
“ ချစ်တယ် ..သူဇာရယ် ....”
“ တကယ်လား ..”
“ တကယ်ပေါ့ ...သူဇာ နဲ့ တွေ့ချင်တယ် ...”
“ မတွေ့ရဲပါဘူး...ကြောက်တယ် ....”
“ ဘာကို ကြောက်တာလဲ ..”
“ အကို့ကို ကြောက်တာ ...”
“ မကြောက်ပါနဲ့ ..ကိုက်မစားပါဘူး ...”
“ ကြောက်ပါတယ် ဆို ....”
“ ဘယ်တော့ တွေ့ကြမှာ လဲ ....”
“ ဘာလုပ်ဖို့ တွေ့မှာလဲ ...”
“ အပြင်မှာ မြင်ဘူးချင်လို့ပေါ့ ...”
“ အခုလဲ မြင်နေရတာဘဲ လို့ ...”
“ သူဇာ နဲ့ တခုခု အတူတူ စားကြမယ် လေ ...”
“ အင်းလေ ..တွေ့တာပေါ့ ...ခဏဘဲ နော် ...”
“ အင်း ...ခဏ ဘဲ ပေါ့”
“ ကောင်းပြီ လေ ...ဒါဆို ..အကို လာခဲ့ ....”
“ ဘယ်ကို လာရမလဲ ...”
သူဇာအောင် က အိမ် နဲ့ မနီးမဝေး က အအေးဆိုင် တခု ကို ချိန်းလိုက် သည် ..။
သူ့ကို တွေ့ချင်နေမိတာ ကြာပြီ ။
တွေ့ကြရမည်ဆိုတော့လဲ ရင်ခုံမိသား ။
“ သမီး ..ဇာဇာ..မအိပ်သေးဘူးလား ..ညဉ့်နက်နေပြီ ...ဒီ်..အင်တာနက်မှာဘဲ တနေကုန် ဖြစ်နေတယ် ..အိပ်တော့”
မေမေ့အော်သံကြောင့် ဇာဇာ မျက်နှာကျက် က မီးကို ချောက်ကနဲ ခလုပ်နှိပ်ခါ ပိတ်လိုက်သည်။ လက်တော့ပ်
ကအရောင်က တအားလင်းနေဆဲဘဲ ။ ကုတင်ခြေရင်းက ဂွမ်းစောင်ကို ယူသည် ။ လက်တော့ပ်ကို ပေါင်ပေါ်တင်
စောင်ကို ခေါင်းပေါ် အုပ်ခြုံလိုက်သည် ။
ဇာဇာ အိပ်လို့မဖြစ်သေးဘူး ။ သူနဲ့ ချိန်းထားသည် ။
သူနဲ့တွေ့ဖို့က ညအချိန်ကို စောင့်ရသည် ။ သူက နိုင်ငံခြားကလေ ။ သူနဲ့ ချပ်တင်းလုပ်ရင်း ဇာဇာ ညိသွား
သည်။ ဘိန်းစွဲသလိုဘဲ ။ အချိန်တန်လို့ သူနဲ့ မချပ်ရရင် ဇာဇာ မနေတတ် ။ အင်တာနက်ကလဲ မမှန်ချင် ။ကွန်
ကျတယ် ဆိုရင် ဇာဇာပြာပြီ ။သူနဲ့ ချပ်လိုက်ရမှ ဇာဇာ စိတ်ထဲ ကျေနပ်မှုရသည် ။
သူ...သူဆိုတာက ကိုသားထွေး ။ အမေရိကန် မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူ ။တဦးတည်းသောသား ..တချိန်က မဆလခေတ် စစ်ဘက်အရာရှိကြီးတယောက်ရဲ့ သား ။အရပ်မြင့်မြင့် အသားလတ်လတ် ဘိုက်ချပ်ချပ် ..ဆံပင်တိုတို နဲ့ ။ ဒါတွေက အကိုပြောပြတာတွေ လေ ..။ အကို ပြောပြတာတွေဟာ အမှန်လို့ ဇာဇာ ယုံသည် ..။ အကို့ရုပ်ကိုကြည့်တာနဲ့ အကိုဟာ လူကြီးလူကောင်းတယောက်ရဲ့သား..ပညာတတ်တယောက် ဆိုတာ သိသာ သည် ..။
ဇာဇာလဲ ဇာဇာ့အကြောင်းတွေ အကုန် ပြောပြသည် ..။
ဇာဇာ သူ့ကို ခိုက်နေပြီ ။ စိတ်ကူးထဲက ရွှေမင်းသား ။
ဇာဇာ အွန်လိုင်းမှာ ဘလိုင်းကြီး ချစ်သူရနေပြီ ။ ပဒိုင်းသီးစားမိသလိုဘဲလား ။ဇာဇာ့အွန်လိုင်းရီးစားက ရေလည် လန်းသည် ..။ သူငယ်ချင်း ယမုန်နာ့ကို ကိုသားထွေးအကြောင်း ပြောပြမိ
သည် ..။ ယမုန်နာတွေ့ဖူးချင်လို့ တနေ့ ယမုန်နာ အိမ်မှာလာအိပ်တော့ ကိုသားထွေးပုံကို ပြလိုက်သည် ..။
ကိုသားထွေး က သူ့ပုံတွေကိုပြသည် ။ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ နောက်ခံနဲ့ နယူးရောက်မြို့ မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ..။ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့ သိပ်ခန့်ငြားတာဘဲ ။ ကိုသားထွေးပုံက ကုလားဆင် ။နှာတန်ပေါ်ပေါ် မျက်ခုံးကောင်းကောင်းနဲ့ ။ ၀တ်တာစားတာက ရေလည်သားနားသည် ။ သားနားမှာပေါ့ ။ သူက အင်ဂျင်နီယာလေ ။ လခကောင်း ရာထူးကလဲ မြင့်သည် ။
သူ့ကန်ပနီမှာ စီအီးအို ဆိုလား ..။
ချပ်ထဲမှာ ဇာဇာ သူ့ကို စောင့်နေသည် ။
သူက ပေါ်မလာသေး ။ အိပ်ပျက်ခံပြီး ကိုသားထွေးကို စောင့်ရ သည် ။ ကိုသားထွေး ပူဆာလွန်းလို့ ကင်မရာ
ဖွင့်ပြီး ဇာဇာ သူ့ပုံကို ပြရသည် ။ ကိုသားထွေးကလဲ သူ့ပုံကိုပြသည် .။
ဟော..ပြောရင်းဆိုရင်း သူ ရောက်လာပြီ ။
( အကို ...။ )
( အကို့ကို စောင့်နေတာ ကြာလှပြီ ..။ )
ဆောရီး ဇာလေး ..အလုပ်များနေလို့ ..။
( အကို ဇာ့ကို လွမ်းလား ..။ )
( ဇာလဲ အကို့ကို သိပ်လွမ်းတယ် ..အကို့ကို အပြင်မှာ တွေ့ချင်လာတယ် ..။ )
အကိုလဲ တွေ့ချင်တယ်..ဇာလေးကို ..။
( အကို ဘယ်တော့ မြန်မာပြည်ကို လာလည်မှာလဲဟင် ...။)
အကို လာလည်မှာ..ဇာလေးနဲ့တွေ့ဖို့ ..။
( တကယ်လား..အကို ...။)
( ဘယ်တော့လဲ ..အကို ...။)
နောက်အပတ် ..ဇာလေး ...။
( ဟယ် ...တကယ်လား..အကို...ဇာ....ပျော်လိုက်တာ ...။)
ဇာဇာ အရမ်းပျော်သည် ။ ကိုသားထွေး လာတော့မည် ။
အို ...အကိုနဲ့ အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ရတော့မည် ..။
အကိုနဲ့တွေ့ရမှာ ရင်တော့ခုန်မိသည် ..။ အကိုက ရီးစားဖြစ်ကြပြီးနောက်ပိုင်း ကဲတက်လာသည် ..။ ဇာဇာက ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲ ကုတင်ပေါ်မှာ ညဖက်ကြီး ချပ်တင်းလုပ်နေတာ သူသိတော့
တခါတခါ ဖေါက်လာသည် ..။ အပေါ်ဆုံးကြယ်သီးလေး ဖြုတ်ပြပါ..တောင်းဆိုလာတတ်သည် ..။ များသောအားဖြင့် ဇာဇာက ညအိပ်ရင်း ဘရာခံမ၀တ်တတ်ဘူးလေ ..။ သူက ဇာဇာ့ရင်
အပေါ်ပိုင်းတွေက လှလွန်းလို့ တဲ့ ..။ အင်း..။ အကို့ကို အလိုလိုက်မိတာ နောက်တော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ တောင်းဆိုလာတာတွေက ခြေသလုံးလေး တွေ့ဖူးချင်တယ် ..ပြပါ ဘာညာတွေ ဖြစ်
ဇာဇာ အကိုနဲ့တွေ့ရမှာတောင် ကြောက်သည် ..။တွေ့ရင် ဘာတွေ ပြခိုင်းအုံးမလဲ မသိဘူး ..။
“ အမိန့်ရှိပါရှင် ...မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကပါ ...”
“ ကျမ ..လူယုတ်မာတယောက် အကြောင်းကို သတင်းပို့ချင်လို့ပါ ...”
“ ဟုတ်ကဲ့ ..ပြောပါ ရှင် ..ဒီကညီမ နံမည်လေး သိပါရစေ ...”
“ ကျမနံမည် ..ခင်အေးမြင့်ရီ ...ပါ ..ကျမ မိန်းကလေးတွေ ကို အင်တာနက်ပေါ်က ချပ်လိုင်းမှာ ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီး ဖျက်ဆီးနေတဲ့ လူယုတ်မာ ကို တိုင်ချင်လို့ပါ ...”
“ ကောင်းပြီညီမ ...ဘာမှစိတ်မပူနဲ့..အားလုံး အဆင်ပြေစေရမယ် ”
မျက်လုံးရွဲကြီးတွေထဲက မျက်ရေပေါက်ကြီးတွေ ကျလာသည် ။
နက်ပြောင်ဖြောင့်တန်းတဲ့ ဆံပင်တွေ ..ဖြူဖွေးနုနယ်ချစ်စဖွယ် မျက်နှာသွယ်သွယ်လေး ..တဆတ်ဆတ် တုန်
နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ နဲ့ ခင်အေးမြင့်ရီ ကို ဒုရဲမှူး စစ်ငြိမ်းမေ သနားမိ သည် ။
“ ညီမလေး ..မမတို့ ညီမလေး ပြောတဲ့ လူယုတ်မာကို ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ် ..သူ့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ ညီမလေး
ရဲ့ အကူအညီကို မမတို့ လိုအပ်မှာမို့ ညီမလေးက မမတို့ကို ကူညီစေချင်တယ် ..”
“ ဟုတ် ...”
ဒုရဲမှူး စစ်ငြိမ်းမေ သည် ခင်အေးမြင့်ရီ ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်နေသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတော် အဖက်ဖက်က တိုးတက်လာသလို အင်တာနက် အသုံးပြုမှုကလဲ တရှိန်ထိုး တိုးတက် များပြား ကျယ်ပြန့်လာခဲ့တော့ လူငယ်တွေ အင်တာနက်ကတဆင့် ဆက်သွယ်တာတွေ အလွန်များပြားလာသည် ။
အင်တာနက်ဆိုင်များမှာ လူတွေပြည့်နေသည် ။ ကောင်မလေးတွေ ကောင်လေးတွေ ချပ်တင်းလုပ်
ကြပြီး အပြင်မှာ တွေ့ဆုံဖို့ ချိန်းဆိုကြသည် ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ချစ်ကြိုက်ကြပြီး လက်ထပ်ယူသွားကြသော စုံ
တွဲတွေ များစွာရှိသလို မိန်းကလေးတွေ ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ..ကာမသက်သက်ရယူဖို့ ချပ်တင်းကို အသုံးပြုနေကြ
တဲ့ လူသားစားကျားသတ္တ၀ါတွေကလဲ များပြားစွာရှိနေကြသည် ။ အင်တာနက်ကို အသုံးချပြီး မိန်းကလေးတွေကို လှည့်ဖျားအနိုင်ကျင့် ဖျက်ဆီးသော ကိစ္စတွေ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ သည် အိုင်အက်စ်စီယူ လို့ အတိုကောက် ခေါ်ဆိုသော အင်တာနက် ဆက်စ်
ခရိုင်းမ်ယူနစ် ကို ဖွင့်လှစ်ခါ အင်တာနက်မှ ဆက်နွယ်နေသော လိင်ကိစ္စမှုခင်းများ ကို စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်နေပြီ ဖြစ်သည် ။
ဒုရဲမှူး စစ်ငြိမ်းမေ သည် ဒီယူနစ်ရဲ့ တာဝန်ခံ တယောက်ဖြစ်သည် ။
ခင်အေးမြင့်ရီ လို အရှေ့ထွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဖွင့်ချသော မိန်းကလေး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်
လူယုတ်မာများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီး အရေးယူနိုင်တာဖြစ်သည် ။ များသောအားဖြင့် မြန်မာမိန်းက
လေးများသည် အရှက်အကြောက်ကြီးကြသူတွေ ဖြစ်သလို ပတ်ဝန်းကျင် ကို ရင်မဆိုင်ရဲကြတာကြောင့် မိမိတို့
နစ်နာတာတွေကို မြိုသိပ်ထားလိုက်ကြလို့ လူဆိုးများ ..မုဒိန်းကောင်များ ကို အရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ ။
စစ်ငြိမ်းမေ ရဲ့ ဖုန်းမြည်လာ သည် ..။
သူ့အထက် က ဒုရဲမှူးကြီးက စစ်ငြိမ်းမေကို ခင်အေးမြင့်ရီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးခေါ်တာ ..။ စစ်ငြိမ်းမေ က ဒုရဲ
မှူးကြီးကို ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ တင်ပြလိုက်သည် ။
ခင်အေးမြင့်ရီ ရဲ့ ဖွင့်ဟချက် ..။
ကျမနံမည် ခင်အေးမြင့်ရီပါ ။
ကျမ ကွန်ပြူတာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုနိုင်လာပြီးနောက် အင်တာနက်အွန်လိုင်းမှာကျင်လည်ခဲ့ပါတယ် ..။ ပထမတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချပ်လိုင်းတွေမှာ ချပ်တင်းလုပ်ပါတယ် ။နောက်တော့ ရဲတင်းလာပြီး ကိုယ့်ကို သိတာမှ မဟုတ်တာ ဆိုပြီး လူစိမ်းတွေနဲ့ပါ ချပ်တင်းလုပ်လာပါတယ် ။
ဒီမှာ ကိုကိုချစ်၁၂၃ ဆိုတဲ့ တယောက် နဲ့ ကျမတွေ့ပါတယ် ။ ကိုကိုချစ်၁၂၃ နဲ့ နေ့တိုင်း ချပ်တင်းလုပ်ပါတယ် ။ ကြာလာတော့ ချပ်ထဲမှာ နေ့စဉ်စာရိုက်စကားပြောတော့ တယောက်နဲ့တယောက် ရင်းနှီးခင်မင်လာကြပါတယ် ။ သူက သူ့ပုံကို ပြပါတယ် ။ ကျမပုံကိုလဲ တောင်းကြည့်ပါတယ် ။ သူက ကြည့်ကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားပီသတဲ့လူတယောက်မို့ ကျမ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ် ။ တဖြေးဖြေးနဲ့ သူက ကျမကို ချစ်ရေးဆိုလာပါတယ် ။ အွန်လိုင်းဘဲ ဖြစ်တာကြောင့် အပြင်မှာထက် လွယ်လွယ်ကူကူဘဲ ကျမ သူ့ကို
လဲ စိတ်ဝင်စားနေတာနဲ့ ပြန်ချစ်လိုက်ပါတယ် ။
ကျမတို့အွန်လိုင်းချစ်သူတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ် ။ စစချင်း ကျမကို ပါးလေးနမ်းချင်တယ် ..လက်လေးကိုင်ထားချင်တယ်ကနေ စပါတယ် ။ ကျမလဲ ဒါဟာ တကယ်မှ မဟုတ်တာ ..စိတ်ကူးနဲ့ဘဲ..ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင် မော်နီတာပေါ်မှာသာဘဲလေ ဆိုပြီး အပျော်သဘော သူ့ကို အလိုလိုက်မိခဲ့ပါတယ် ။
ကျမလဲ အသက်၁၆နှစ်အရွယ်မို့ စိတ်တွေ က လှုပ်ရှားလွန်းနေပြီး ဘိန်းစွဲသလိုဘဲ အင်တာနက်ဆိုင်ကို မသွား
ရရင် မနေနိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
တဖြေးဖြေးနဲ့ ကိုကိုချစ်၁၂၃ ဆိုတဲ့ ကိုအောင်မှိုင်း( ခေါ် )မှိုင်းလုံး ဟာ ကျမကို ချပ်တင်းမှာ လိင်ကိစ္စတွေ ပြောဆိုလာပါတယ် ။ ကျမလဲ စောစောက ပြောသလိုဘဲ ဘယ်သူမှလဲ မသိ..သူနဲ့လဲ လူချင်းတွေ့နေတာ မဟုတ်တာကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူးဆိုပြီး သူနဲ့ အပြန်အလှန်တွေ ပြောဆိုမိရပါတယ် ..။ ဒီလို နဲ့ သူ
တဖြေးဖြေး ထပ်တိုးလာတာက ကျမ ရဲ့ ရင်သားကို ကင်မရာမှာ ပြခိုင်းတာ..ကျမရဲ့ ကိုယ် အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပါရစေ တောင်းဆိုလာတာတွေ လုပ်လာပါတယ် ။
ကျမလဲ သူ့ကို အလိုလိုက်ပြီး လူသူသိပ်မရှိတဲ့ အချိန် အင်တာနက်ဆိုင်ကနေဘဲ ပြသခဲ့ပါတယ် ။သူကလဲ ကျမကို သူ့လိင်တန်ဆာ ကို ပြသခဲ့ပါတယ် ..။ ကျမအတွက် သူနဲ့ ဒီလို လိင်
ကိစ္စတွေ ပြောဆိုရတာ တယောက် ကိုယ်အင်္ဂါတွေကို တယောက်ကြည့်ရတာ အလွန်ဘဲ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘဲ ..။
နောက်တော့ သူက အပြင်မှာတွေ့ဖို့ ချိန်းပါတယ် ။ ကျမကိုယ်တိုင်လဲ နေ့စဉ် သူနဲ့ လိင်ကိစ္စတွေ ချပ်တင်းလုပ်နေတော့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်ပြီး သူနဲ့ တွေ့ချင်မိခဲ့လို့ သူချိန်းတဲ့ဆီကို သွားခဲ့ပါတယ် ။
သူနဲ့ ဟိုတယ်လေးတခုမှာ တွေ့ကြတာပါ ။ သူက ကျမကို အရမ်းချစ်တယ် ဆိုတာ အထပ်ထပ်ပြောပြီး နမ်းပါတယ် ။ ကျမလဲ ယောင်္ကျားနဲ့တခါဘူးမှ မကြုံတွေ့ဘူးသေးပါဘူး ။ စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး သူ့အနမ်းတွေမှာ သာယာမိန်းမူးသွားခဲ့ပါတယ် ။
သူက ကျမ ကို တကိုယ်လုံးကို နမ်းပါတယ် ..။ ကျမ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ခွာပစ်ပါတယ် ။ကျမလဲ တုန်ရီကြောက်လန့်နေပြီး သူ့ကို မလုပ်ဖို့ တောင်းပန်ပေမဲ့ မရပါဘူး ။ ကျမ တကိုယ်လုံးကို သူကိုင်တွယ်ပြီးနမ်းစုတ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ကျမကို ကာမစပ်ရှက်ပါတယ် ။တကြိမ်မက အကြိမ်ကြိမ် စပ်၇ှက်ပါတယ် ။ အဲဒီနေ့
ကတော့ ကျမလဲ ချစ်သူတွေ ဒီလိုလုပ်တာ ဓမ္မတာဘဲ ဆိုပြီး သူ့အပေါ် အပြစ်မတင်မိခဲ့ပါဘူး ။
နောက်ပိုင်းတွေလဲ ကျမကို ဟိုတယ် ခေါ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် ကာမစပ်ရှက်ပါတယ် ။ တကြိမ်မှာ သူ ကျမရဲ့ ၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ် ကိုရော သူနဲ့ စပ်ရှက်နေတဲ့ဟာကိုရော ဓါတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်နေတာကို ကျမတွေ့လိုက်ရပါတယ် ။ကျမ သူ့ကို ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတော့ သူက ဖျက်ပြီးပြီ လို့ ပြောပါတယ် ။ ကျမဟာ သူသင်ပေးလို့ သူလုပ်ခိုင်းလို့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုး ကို သူ့အတွက် လုပ်ပေးနေပေးခဲ့ရပါတယ် ။
တနေ့မှာ သူ အရမ်းဒုက္ခရောက်လာတယ်..ထောင်ကျတော့မယ် ..လို့ ပြောပါတယ် ။ကျမလဲ ချစ်သူ ကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီလိုတာကြောင့် ထောင်မကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ မေးတော့ သူ့ကို ဖမ်းဆီးမဲ့သူကို လပ်ထိုးရမည် လို့ ပြောပါတယ် ။ အဲဒီ အရာရှိဆိုတဲ့လူကြီးနဲ့ ကျမကို ပေးတွေ့ပါတယ်..။ ဒီလူကြီးကို
ကျမရှေ့မှာဘဲ သူက ဘယ်လိုပေးဆပ်ရမလဲ မေးပါတယ် ..။ဒီလူကြီးက ငွေလက်မခံဘူး ..ကျမ နဲ့ အိပ်ချင်တယ်လို့ တောင်းဆိုပါတယ် ။ ကျမလဲ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းပါတယ် ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ငြင်းပါတယ် ။ ကျမဟာ ဖါသည်မ မဟုတ်ကြောင်းလဲ ပြောပါတယ် ။ ဒီမှာဘဲ ဒီလူကြီးက ကိုအောင်မှိုင်း ရဲ့ ဖုန်းကို ဖျတ်ကနဲ ဆွဲယူပြီး
ဖုန်းထဲက ကျမရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးပုံတွေ နဲ့ ကျမတို့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ပုံတွေကို ဖွင့်ပြပါတယ် ။
ကျမက ကိုအောင်မှိုင်း လုပ်ခိုင်းလို့ သူ့လိင်တန်ကို စုတ်ပေးခဲ့တာတို့ ကျမရဲ့ ( မရိုမသေ ပါရှင်) ဖင်စအိုပေါက်ထဲကို သူ့ကို ဆက်ဆံခဲ့စေတာတွေ ကို ပြပြီး...“ ဘာကညာစစ်နေတာလဲ..နင်က ဆားဗစ်ရင့်နေပြီဘဲ..ငါ့ကို ကုန်းလို့ နင် အပျိုပြန်မဖြစ်သွားပါဘူး ...” လို့ ပြောဆိုပြီး ကျမကို ကြမ်းတမ်းစွာ အတင်း ကျင့်ကြံ
စပ်ရှက်ပါတယ် ။ ကျမလဲ ဒီလူကြီး စပ်ရှက်တာကို အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရပါတယ် ။ သူကျေနပ်အောင်လဲ သူခိုင်းတာတွေ အကုန် လုပ်ပေးရပါတယ် ။ သူ့လိင်တန်ကို စုတ်ပေးတာတို့ ကျမရဲ့ စအိုကို သူ့ကို ဆက်ဆံစေတာတို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
အစရှိသွားတော့ ဒီလူကြီးက သူ့အပေါင်းအသင်းတွေ ခေါ်လာပြီး ကျမ နဲ့ လွှတ်ပေးပါတယ် ။ ကျမ ကို တယောက်ပြီးတယောက် စပ်ရှက်ကြပါတယ် ။ တနေ့ ကျမ သူတို့ ချိန်းဆိုတဲ့နေရာကို မသွားဘဲ နေတာကြောင့် ကိုအောင်မှိုင်း ဟာ ကျမကို ပညာပေးမယ် ဆိုပြီး အင်တာနက်ထဲ ကျမရဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးပုံကို ထည့်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီပုံဟာ တကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့နေပါပြီ.။ ကျမလဲ မိဘမောင်နှမတွေ နဲ့ရင်မဆိုင်ရဲတော့ပါဘူး ။ကျမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပါသေးတယ် ။ ကျမ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရှက်ရ နေပါပြီ ။ ကိုအောင်မှိုင်း က သူတို့ ခေါ်ရာကို လာပြီး ခိုင်းတာမလုပ်ရင် သူ့လက်ထဲရှိနေတဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အပိုင်းတွေကိုပါ အွန်လိုင်းတင်လိုက်မယ် ..ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ် ။
သူဟာ မင်းသားခေါင်းစွပ်ထားတဲ့ ဘီလူးတကောင် ဆိုတာ ကျမ သိရတော့ နောက်ကျနေပါပြီ ။
မထူးတော့တာမို့ ကိုအောင်မှိုင်း ( ခေါ် ) မှိုင်းလုံး ဆိုတဲ့ လူယုတ်မာ ကို အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားလိုပါ
တယ် ။ ကျမလို အဖြစ်မျိုး နောက်ထပ် မိန်းကလေးတွေ ထပ် မခံကြစေချင်ပါဘူး ။
“ ကဲ...ခင်အေးမြင့်ရီ ..မမတို့ ဒီအောင်မှိုင်း ( ခေါ်) မှိုင်းလုံးကို ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ...မင်းကို သူ ဘယ်ကိုလာခိုင်းသလဲ ...”
“ ကျမ ကို သူနဲ့တွေ့နေကျ ဟိုတယ်ကို ချိန်းထားပါတယ် ..မမ ”
“ ကောင်းပြီ ..အချိန် နဲ့ ရက် ..ဟိုတယ် ကို ပြော ...”
“ ထိန်ထိန်သာ စားသောက်ဆိုင် ” မှာ ခင်အေးမြင့်ရီ အအေးတခွက်မှာသောက်ပြီး ထိုင်နေသည် ။
စားပွဲပေါ်ချထားတဲ့ ဟန်းဖုန်း တတန်တန် နဲ့ မြည်လာသည် ..။
ခေါ်ပြီ ..။ အောင်မှိုင်း ခေါ်ပြီ ။
“ ပြော ..”
“ ဟင်းဟင်း ..လေသံက မာလှချည်လား ..မင်း အခု ဘယ်မှာလဲ ...”
“ ရှင်ပြောတဲ့နေရာမှာဘဲပေါ့ ...”
“ ဟိုတယ် မှာလား ..”
“ မဟုတ်ဘူး..ဟိုတယ် ဘေးက စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ ...”
“ အိုကေလေ ..ငါလာခဲ့မယ် ...”
အောင်မှိုင်း ဖုန်းချသွားတော့ ခင်အေးမြင့်ရီ စိတ်ထဲက “ ဖါခေါင်း ” လို့ ကျိန်ဆဲလိုက်သည် ။
သူမကို ဘေးစားပွဲမှာ စားသောက်နေတဲ့ လူသုံးဦး အနက် အသက်ကြီးကြီး ဆံပင်ဖြူဖြူနဲ့ လူကြီးက စိုက်
ကြည့်နေသည် ..။ ခင်အေးမြင့်ရီ ဟန်းဖုန်းကို သူမ ရဲ့ စလင်းဘက်အိတ်လေးထဲ ထည့်လိုက်သည် ။
လူကြီးက သူနဲ့ စားသောက်နေတဲ့ လူငယ်နှစ်ယောက် ကို တစုံတရာ ပြောနေသည် ..။ ခင်အေးမြင့်ရီဘက်ကို
လုံးဝ မကြည့်တော့ ။
အောင်မှိုင်း တက်ဆီ နဲ့ ခင်အေးမြင့်ရီ ဆီကို သွားသည် ..။ သူနဲ့အတူ ဒီနေ့ ခင်အေးမြင့်ရီနဲ့ တွေ့ပေးမဲ့ကပ်စတန်မာ ပါလာသည် ။ မန္တလေးက ဘောစိတယောက် ။ ပစ္စည်းကောင်း ၀ါးချင်တဲ့ ငွေပေါတဲ့ ဘောစိ ။
ကားပေါ်မှာ အောင်မှိုင်း သူထိန်းထားတဲ့ ပစ္စည်း ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း ရေရေလည်လည် ညွှန်းလာသည် ။ ခင်အေးမြင့်ရီ ရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ သူ့ဖုန်းထဲက ပုံကိုတောင် ထုတ်ပြလိုက်သည် ။
“ ပစ္စည်းက ရေလည်ကောင်းတယ် ...လိုင်းမဟုတ်ဘူး ..ကျနော် တယောက်ထဲ ထိန်းထားတာ ...”
“ထိန်ထိန်သာ စားသောက်ဆိုင် ” ...။
သူ ခင်အေးမြင့်ရီနဲ့ ချိန်းတွေ့နေကျ “ ရွှေနဂါးဟိုတယ် ” ရဲ့ ဘေးကပ်ရက်က ဆိုင် ..။
ခင်အေးမြင့်ရီ ထိုင်နေတဲ့ စားပွဲကို အောင်မှိုင်းနဲ့ ဧည့်သည်ကြီး ၀င်ထိုင်လိုက်ကြသည် ။ ခင်အေးမြင့်ရီ က
အောင်မှိုင်းကို ..“ ဒါက ဘယ်သူလဲ ...နင်ငါ့ကို သူနဲ့ လွှတ်ပေးအုံးမလို့လား ..” လို့ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ မေး
လိုက်လို့ အောင်မှိုင်း မျက်စိမျက်နှာပျက်သွားသည် ..။
“ ရှူး ..တိုးတိုး ....”
အောင်မှိုင်း က ခင်အေးမြင့်ရီ ကို မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။
ဧည့်သည်ကြီးလဲ ခင်အေးမြင့်ရီ ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ လေသံကြောင့်..“ ဖြစ်ပါ့မလား ..ညီလေး ..” လို့ မေးလိုက်
သည် ။ “ ဖြစ်တယ်အကိုကြီး ..နဲနဲ စိတ်ကောက်နေတာ...ဟဲဟဲ ...အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ..အကိုကြီး ..”
လို့ ပြာပြာသလဲ ပြောလိုက်သည် ။
“ ခင်အေးမြင့်ရီ ..နင်ငါခိုင်းတာကိုလုပ်နော် ..မလုပ်ရင် နာမယ် ..ငါပြောပြီသားနော် ..ငါ့ဖုန်းထဲက ဗီဒီယိုတွေ
အင်တာနက်ပေါ် ပြန့်သွားမယ် ..ဟွန်း ..” အောင်မှိုင်း က ခင်အေးမြင့်ရီကို ခြိမ်းခြောက်နေတုံး ..သူ့ပုခုံးကို တစုံတယောက် က ခပ်ဆတ်ဆတ် လာပုတ်လိုက်တာကြောင့် လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။
ဘေးစားပွဲက ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့ အသက်ကြီးကြီးလူကြီး ဖြစ်နေသည် ။
“ အောင်မှိုင်း ..ဒို့နဲ့လိုက်ခဲ့ ..ငါတို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကဘဲ ...”
“ ဗျာ...ကျုပ် ဘာလုပ်လို့လဲ ..ဘာဖြစ်လို့လဲ ....”
“ မင်း ..ဒီက ကလေးမ ခင်အေးမြင့်ရီ ကို ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ဒို့အားလုံး သိထားနေပြီ ..ကဲ..သူ့ကို
လက်ထိပ်ခတ်ဟေ့ ..ဟိုလူကိုလဲ ခတ် ...”
“ နောက်မှရှင်း.....ကဲ..သွားစို့ ...”
ခေါင်းဖြူကြီးက အောင်မှိုင်း လက်မောင်းကနေ ဆုတ်ကိုင်ကာ ဆွဲခေါ်သည် ..။
သူ့ကို စူးစိုက်ကြည့်ကာ မျက်ရေတွေ ကျနေတဲ့ ခင်အေးမြင့်ရီ ကို အံ့သြသလိုကြည့်ရင်း အောင်မှိုင်း လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ ရဲတွေနောက်ကို ပါသွားရပြီ ။ အမှန်အကန်လေး စားသုံးလိုတဲ့ ဘောစိ လဲ လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ အောင်မှိုင်းနဲ့တွဲရက် ပါသွားရပြီ ..။
ခင်အေးမြင့်ရီ မျက်ရေတွေကျနေပေမဲ့ ကျေနပ်နေသည် ..။
လူယုတ်မာ ကို ရဲလက်အပ်လိုက်နိုင်ပြီ ...။
ကိုသားထွေး ကို သူဇာအောင် စောင့်နေသည် ။ နိုင်ငံခြားကနေ ကိုရဲက လူချင်းမဆုံဘူးဘဲနဲ့တောင်သူဇာအောင်ကို ငွေတွေ လူကြုံနဲ့ ပို့ခိုင်းလိုက်တော့ သူဇာအောင် အခက်အခဲတွေ တော်တော် ပြေလည်သွားခဲ့တော့ ကိုသားထွေးကိုလဲ ကိုရဲလိုဘဲ လူကောင်းတယောက်လို့ ထင်ပြန်သည် ။ ကိုရဲလိုဘဲ သူ့အပေါ်ကောင်း
လိမ့်မည်လို့ ထင်လိုက်မိသည် ။ ကိုသားထွေး နဲ့ ချပ်တင်းလုပ်ရင်း သူ့ကို သူဇာအောင် ချစ်မိသွားရ သည် ..။ ကိုသားထွေး က သူဇာအောင့်ကို မှော်ဆရာတယောက်လိုဘဲ ဖမ်းစားထား
သည် ။ သူဇာအောင် သူ့ကို တွေ့ဖို့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို အမြဲ မပျက်မကွက် သွားသွားနေခဲ့ရ သည် ..။ ဘိန်းစားတယောက် အချိန်တန်ရင် ယင်းထသလိုမျိုးပေါ့ ..။
ချိန်းတဲ့နေရာကို ကိုသားထွေးရောက်လာသည် ။
အွန်လိုင်း ကင်မရာနဲ့တွေ့တုံးကထက်တောင် ကိုသားထွေးက ကြည့်ကောင်းသည်လို့ သူဇာအောင် ထင်သည် ။
အရပ်မြင့်မြင့် အသားဖြူဖြူ နဲ့ ယောက်ျားပီသတဲ့လူ လို့ ထင်သည် ။ သူဇာအောင် ရင်တွေ ခုံတာ တအားဘဲ ..။ အအေးဆိုင်ထဲ လူတွေကလဲ များ သည် ..။
“ ကိုသားထွေး ..လား ...”
“ ဟုတ်တယ်..သူဇာအောင် ....နော် .....”
“ ဟုတ် ....”
“ အပြင်မှာက ပိုလှနေတယ် ...”
သူ့ကို စိုက်ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်လို့ သူဇာအောင် ရှက်သွားသည် ..။
“အို ..ဟုတ်ပါဘူး ...”
“ တကယ်ပါ ..သူဇာအောင် အရမ်းလှတယ် .....”
“ တော်..အကို ...မဟုတ်တာတွေ..ပြောနေတယ် ...ဟင့်ဟင့် ....”
“ အိုး..အကိုက ဘယ်တော့မှ မုသား မပြောဘူး..သူဇာအောင် က တကယ်လှတယ် ..အကို အွန်လိုင်းမှာ ပြောသားဘဲ..အကို့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ နှလုံးသားကို သူဇာအောင် က လှုပ်နှိုး
လိုက်တာပါလို့ ..အကို သူဇာအောင့်ကို အရမ်းအရမ်း ချစ်တယ်..သိလား ...”
သူဇာအောင် ရှက်နေသည် ..။ သူချစ်စကားတွေ ပြောနေတာက လဲ ရပ်ကွက်ထဲက အအေးဆိုင်မှာ မဟုတ်လား ...။
“ အကိုရယ်..လူတွေကြားထဲ ဒါတွေ မပြောပါနဲ့လား ...”လို့ သူဇာအောင် ပြောလိုက်တော့ ကိုသားထွေး က ..“ အင်း..ဟုတ်သားဘဲ ..အကိုက သူဇာအောင့်ကို ချစ်တဲ့စိတ်တွေများ
ပြီး ဒီလိုနေရာမှာ ပြောမိတယ် .. တကယ်တော့ အကို့ ရဲ့ လေးနက်တဲ့ မေတ္တာစကားတွေက ဒီလို လူတွေ ဆူညံနေတဲ့ အအေးဆိုင်လေးမှာ ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး ..တနရာရာ မှာ အေးအေး
ဆေးဆေး ထိုင်ပြီး ပြောကြရင် ပိုကောင်းတာပေါ့..” လို့ ပြောသည် ..။
“သူဇာအောင် အချိန်ရတယ်မဟုတ်လား ..အကိုတို့ တနေရာကို သွားကြရင် မကောင်းဘူးလား ...”
ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေကလဲ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့မို့ ကောင်းတယ်အကို လို့ သူဇာအောင် ဖြေလိုက်မိသည် ..။
သူဇာအောင် က အအေးဆိုင်ထဲက အရင်ဆုံး ထွက်သွားလိုက်ပြီး ခဏကြာတော့ ကိုသားထွေး လိုက်လာ သည် . ။လမ်းထိပ် ကနေ တက်ဆီကား တားလိုက်ပြီး အကိုသားထွေး သွားနေကျဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တခုကို သွားလိုက်ကြသည် ။
ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေ တနေ့တခြား များပြားလာတဲ့ အင်တာနက်ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ ကို ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီး သွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီး သားမယားပြုကျင့် ..ပြည့်တန်ဆာဘ၀ကို ပို့ဆောင်တာတွေ..နိုင်ငံခြား ကို ရောင်းစားတာတွေ ဖြစ်ပွားနေတာကို ထိထိရောက်ရောက် ဖေါ်ထုတ်အရေးယူဖို့ မှုခင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က ရဲမှူးနဲ့ တိုင်ပင်ကာ သူတို့ဌာနခွဲက ရဲမေများကို အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေ အဖြစ် ဟန်ဆောင်ခိုင်းကာ အွန်လိုင်းချပ်ခန်းတွေမှာ လွှတ်ထား ပြီ ..။ ဒီလိုအမှုတွေ
ကျူးလွန်နေတဲ့ လူတွေ ကြားထဲကို ထိုးဖေါက် ၀င်ရောက် စုံစမ်းဖို့ အစီအစဉ်တွေ ပြုလုပ်နေသည် ။
လုပ်နေကျ နံမည်ပျက်ရှိနေသူ ယခင်ကျူးလွန်ဘူးသူတွေကိုကတော့ အထူး မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်စေသည် ..။
ကျောင်းဆင်းခါစ အသက်နှစ်ဆယ်စွန်းစွန်း ဘဲ ရှိသေးတဲ့ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း ကလဲ မိန်းကလေးတွေ ကို လိင်ဆက်ဆံပြီး ဗီဒီယို ရိုက်ထားတာတွေကို အင်တာနက်ထဲ ဖြန့်ပစ်တဲ့ အောင်မှိုင်းလိုလူတွေအကြောင်းကို လူငယ်ထုတွေထဲ ထိုးဖေါက်ပြီး စုံစမ်းလျက်ရှိ သည် ။ ထင်ထက်ထွန်းက လူငယ်ကျောင်းသားပုံစံနဲ့ ခေတ်ဆန်ဆန် လူငယ်လေးတယောက်လို ၀တ်စားဆင်ယင်ထားလို့ ရဲအရာရှိတယောက် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မရိပ်မိကြဘူး ..။လူကုန်ကူးတဲ့ ဂိုဏ်းတွေကို ထောက်လှမ်းနေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စစ်ငြိမ်း
မေ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နေသည် ..။
ထင်ထက်ထွန်းကို နယ်မြေခံ လူဆိုးထိန်း တယောက်က သတင်းတခု ပေးသည် ..။ ကုက္ကိုရိပ်ဒီဗီဒီအငှားအရောင်းဆိုင်မှာ အွန်လိုင်းမှာ တင်ထားသော မြန်မာမလေးတွေ ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့
၀တ်လစ်စလစ် ဗီစီဒီချပ်တွေ ရနိုင်သည် ..ဆိုတဲ့ သတင်း ပေးသည် ။ထင်ထက်ထွန်း ဒီဆိုင်လေးကို ငှားနေကျ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တယောက် နဲ့ ရောက်သွားသည် ။ ဆိုင်ရှင်က အသက်သုံးဆယ်ခန့် လူရွယ်တယောက် ဖြစ်သည် ။သူ့မှာရှိတာတွေ ထုတ်ပြသည် ..။ ထင်ထက်ထွန်းက ဘာတွေကောင်းလဲ ..အသစ်ဘာတွေ ထွက်လဲ မေးသည် ။ ဆိုင်ရှင် က ခုတလော
ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေကို ရအောင်ဖန်ပြီး အတင်းကျင့်ကြံတာတွေကို ရိုက်ဖြန့်တဲ့“ မင်းသား” ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ ဖြုတ်ကားတွေ ခေတ်စားနေတာ ပြောပြသည် ။
ထင်ထက်ထွန်းလဲ ဒီနံမည်ကြီးနေတဲ့ “ မင်းသား ” ဆိုတဲ့ ဟာ ပေးဗျာ..ဆိုပြီး သူ့မှာ ရှိနေတာတွေ ၀ယ်ခဲ့သည် ..။
“ လုပ်ကြံရိုက်တာ မဟုတ်ဘူး..ကင်မရာထောင်ထားပြီး တကယ့်အမှန်အကန်လေးတွေ ကို ဖြုတ်တာတွေ ရိုက်ထားတာ ...” လို့ လည်း ရှင်းပြသည် ။ “မင်းသား” ဟာတွေက မကြာ
ခဏထွက်တတ်လား ..လို့ မေးတော့ ဆိုင်ရှင်က သူက “ကျား” ..ဒါလုပ်စားနေတာ..ပါကင်တွေလဲ ဖွင့်ရတယ် ...စော်တွေကိုလဲ လိုင်းသွင်းတယ်...လူကုန်ကူးတဲ့ ဂိုဏ်းနဲ့လဲ အဆက်
ရှိတော့ ထိုင်းဖက်..တရုတ်ပြည် ရွှေလီ ဖက် ကိုမိန်းမတွေ ရောင်းစားပြီး ဟန်ကျနေတဲ့ကောင် ..”လို့ ရှင်းပြလေ သည် ..။
ထင်ထက်ထွန်း လဲ ဗီစီဒီအချပ်တွေကို အိမ်ယူလာပြီး ကြည့်လေသည် ..။
“ မင်းသား” ဆိုတဲ့ ကောင်ကိုသူတွေ့ပြီ ...။
ဒီကောင်က မြန်မာပွန်းစတား လုပ်နေတာ ..။ သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတာတွေက ပွန်းမင်းသမီးတွေ မဟုတ်ဘဲ ယုံမိလို့ ပုံမိတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ..အရိုးခံလေးတွေ..အမှန်အကန်လေးတွေ..။
ခက်တာက ဒီ ကောင် က လူလည် ..။ သူ့မျက်ခွက်ကို မပေါ်အောင် ရိုက်ထားသည် .။ ပေါ်ရင်လဲ ပြန်ဝါးထားသည် ..။ ထင်ထက်ထွန်း သေသေချာချာ ပြန်ရစ်လိုက် ကြည့်လိုက် သဲလွန်စ
ရှာသည် ..။ ဒုရဲမှူးကို ဖုန်းနဲ့ သတင်းပို့သည်..။ ဒုရဲမှူး က သေသေချာချာ သဲလွန်စရှာဖို့ ညွှန်ကြားသည် ။
“မင်းသား”ရဲ့ပုံကို သေသေချာချာ ကြည့်သည် ။ ညာဘက်လက်မောင်းမှာ နဂါးတက်တူး ရှိသည် ..။ တရုတ်နဂါး ..။ ဆေးမှင် အစိမ်း..အနီ ..အနက် နဲ့ နဂါးပတ် တက်တူး ..။ “မင်းသား”
သည် မုဒိန်းကျင့်ပြသည် ။ လုပ်ကြံဖန်တီးတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ့်မုဒိန်းစစ်စစ် ဖြစ်နေသည် ။ ငိုယိုတောင်းပန်နေတဲ့ကောင်မလေး ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို မင်းသားဆိုတဲ့ကောင် က စုတ်ဖြဲ
ပစ်နေတာကို ဥပဒေဘက်တော်သား ရဲအရာရှိတယောက်အနေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်း ကြည့်နေရတာ ဒေါသအမျက်တွေ ထွက်နေသည် ။
ကောင်မလေး ၀တ်လစ်စားလစ် ဖြစ်သွားချိန် မင်းသား သူ့ကိုယ်ပေါ်က တီရှပ်နဲ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ “မင်းသား ” ရဲ့ သာမန်ထက် ကြီးမားတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီး ကို အနီး
ကပ်ရိုက်ပြသည် ။ တောက် ...။ သူမဟာ မိန်းမကောင်းပါ..မလုပ်ပါနဲ့ ငိုယိုတောင်းပန်နေတဲ့ မိန်းကလေး ကို မင်းသား ဆိုတဲ့ကောင် အတင်းကျင့်နေတာကို ထင်ထက်ထွန်း မကြည့်ချင်
မကြည့်ရက်ဘဲ ကြည့်နေရသည် ။
မတန်တဆ ဖြစ်နေတဲ့ လိင်တန်တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး ကောင်မလေး အင်္ဂါစပ်ထဲ မတရားကြီး သတ်လျှိုသလို ပြည့်သိပ်တိုးဝင်နေတာ..ကောင်မလေး နာတယ်နာတယ် နဲ့ တအားငိုယိုအော်
နေတာတွေ ကို ကြည့်နေရသည် ။ အတင်းထိုးသွင်းနေရာက သူ့လိင်တန်ကို ဆွဲနုတ်တော့ လိင်တန်ထိပ်ဖျားမှာ သွေးစသွေးနတွေ ကပ်ပေနေတာကို အနီးကပ်ရိုက်ပြသေး
“ တောက် ..ဒါမုဒိန်းမှုဘဲ..မုဒိန်းကျင့်ပြပြီး ဖြန့်ချီနေတဲ့ ဒီခွေးသူတောင်းစားကို မ၇ရအောင်ကို ရှာမယ်.....”
ထင်ထက်ထွန်း ကြိမ်းဝါးနေသည် ။
သူဇာအောင် ကိုသားထွေးနဲ့ တွေ့တာ တတိယအကြိမ်ရှိပြီ ..။
ကိုသားထွေးကို တကယ်ယုံသွားသည် ..။ အကိုက တကယ့်လူကြီးလူကောင်းတယောက် ဘဲ ..။ သူဇာ့အောင့်ကို ကိုရဲလို ငွေတွေ မပေးပေမဲ့ နေမကောင်းတဲ့အမေ့အတွက်ဆိုပြီး ဆေးတွေ
၀ယ်လာပေးသည် ..။ သူဇာအောင့်အတွက်လဲ မိတ်ကပ်..နှုတ်ခမ်းနီ ..ရေမွှေးတွေ လက်ဆောင်ပေးသည် ..။ သူဇာအောင့်ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မတို့မထိဘူး ..။ စားပွဲတဖက်က ထိုင်ရင်း
ဘဲ..“ လှလိုက်တာ သူဇာရယ် ....ချစ်လိုက်တာ အရမ်း..အရမ်း...” လို့ သူဇာအောင့်မျက်နှာလေးကို ငေးစိုက်ရင်း ပြောတတ် သည် ..။
ဒီနေ့လဲ ကိုသားထွေးနဲ့ တွေ့နေကျ ဆိုင်မှာ ဆုံသည် ..။
ထမင်းစားကောင်းအောင်ဆိုပြီး မက်မန်းဝိုင်လေး သောက်ရအောင်လို့ ပြောသည် ..။ သူဇာအောင် ငြင်းလိုက် သည် ..။
မူးစေမဲ့ဟာ ဘာမှ မသောက်ချင်ဘူး ..။
ရီးစားနဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန် မူးလို့ တခုခုဖြစ်ပျက်တာတွေ ကြားဖူးထားသည် ..။ ကိုသားထွေးက ပြုံးသည် ..။
“ ရတယ်..သူဇာ..သူဇာ့သဘော..အကိုကလေ..သူဇာ့သဘောနဲ့ဘယ်တော့မှ ဆန့်ကျင်မှာ မဟုတ်ဘူး ...မသောက်နဲ့ ..အချို၇ည်ဘဲ မှာလိုက်မယ် ...”
နိုင်ငံခြားဖြစ် ကိုကာကိုလာ အချိုရေဘဲ မှာလိုက်သည် ။
အစားအစာတွေတော့ မျိုးစုံနေအောင်ကို မှာသည် ..။
“ အကိုရယ်..ဒီလောက်များတာတွေ သူဇာတို့ ဘယ်ကုန်အောင်စားနိုင်ပါ့မလဲ ...”
“ အော်..သူဇာကလဲ ..အိမ်ပြန်ယူသွားပေါ့..အမတို့ ညီမတို့ ကျွေးလိုက်ပေါ့...”
ကိုသားထွေးက ဟင်းတွေ သူဇာအောင့် ပုဂံထဲ ထည့်ပေးသည် ..။
“ စားသူဇာ....ရော့..ဒါက ပုဇွန်ကင် ....ဒီဟာက ၀က်စတူး ...”
သူဇာအောင် ကိုကာကိုလာ အချိုရည်ကို ပိုက်လေးနဲ့ စုတ်သောက်သည် ..။
အကို့ကြောင့် မရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကြီးတွေ ရောက်ပြီး .မစားဘူးတာတွေ စားဖြစ်နေရသည် ။
အပြန်ခရီးမှာ အကို့ပုခုံးကိုမှီပြီး သူဇာအောင် ငိုက်မြည်းလာသည် ..။ အီဆိမ့်တဲ့ အစားအစာတွေ တအားနင်း စားလိုက်တာကိုး ....။
“ အကို...ခေါင်းထဲက မူးတူးတူး နဲ့ ...ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိဘူး ...”
“ အော်..သူဇာ ဘဲကင်တို့ ပုဇွန်းတို့ စားလိုက်လို့နေမှာ......သူဇာ အိပ်နေ . . . .အိမ်ရောက်ရင် အကို နှိုးလိုက်မယ် ....”
သူဇာအောင် ကိုသားထွေးရဲ့ ပုခုံးကို မှီပြီး အိပ်ပျော်သွား သည် ..။
သူဇာအောင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်သွားသည် ..။
အိပ်မက်တွေ မက် သည် ..။
အိပ်မက်ထဲ မှာ ကိုသားထွေး နဲ့ သူဇာအောင် အိပ်ရာပေါ်မှာ ဖက်ကြနမ်းကြ သည် ..။ သူဇာအောင် စိတ်တွေ အရမ်းတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားရ သည် ..။ အ၀တ်အစားတွေ ကျွတ်ကွာကုန်
ပြီး မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း တွေ ဖြစ်ကုန်ကြလို့ ..။ အရှက်ကို ကုန်ရော ..။
ကိုသားထွေးကလဲ သူဇာအောင့်ကို နမ်းလိုက်တာမှ တကိုယ်လုံး နေရာလပ်မရှိအောင်ဘဲ ..။ ဖင်ကြားနေရာတွေပါ မကျန်ဘူး ..။ သူဇာအောင်လဲ တဆတ်ဆတ်ခါ ထွန့်ထွန့်လူး နေရသည် ။ နောက်တော့ ကြားဘဲကြားဖူးပြီး မကြုံဘူးတဲ့ ကာမစပ်ရှက်တာကို ကိုသားထွေး လုပ်သည် ..။ သူဇာအောင် တားတဲ့ကြားက ကိုသားထွေးက ဇွတ်လုပ်သည် ..။ သူဇာအောင့် ကိုယ်ထဲ
ကိုသားထွေး သူ့လိင်အင်္ဂါကို အတင်းသွတ်သွင်းသည် ..။
ပထမတော့ နာကျင်မှု နဲ့ ကိုသားထွေး လုပ်တာတွေကို ခါးခါးသီးသီး ငြင်းဆန်မိသည် ..။ ကိုသားထွေးက အတင်းအကျပ် သူလိုချင်တာတွေကို ရအောင်ယူသွားခဲ့ သည် ..။
သူဇာအောင် နိုးလာသည် ။
အိပ်မက်တွေ ကို သတိရ သည် ..။
တော်ပါသေးရဲ့ ..အိပ်မက်မို့လို့ လို့တွေးရင်း မျက်စိဖွင့်ကြည့်မိသည် ..။
အို ...ငါ ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့် ...။
အခန်းတခန်း ...။ ဟိုတယ်ခန်း လား ...။
ဟာ ....ငါ...ငါ ...ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေပါလား ...ဟယ် ....လုံးဝကြီး ဖင်အပြောင်သားနဲ့ ပက်လက်ကြီး အိပ်နေမိတာပါလား ..။
အင်္ဂါစပ်မိန်းမကိုယ် က တအား နာကျင်နေသည် ..။
ဟယ်..အ်ိပ်မက် မဟုတ်ပါလား ...။
ကိုသားထွေးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ တကယ်ကြီး ဆိုတာ သိလိုက်ရ သည် ။
ဘုရား..ဘုရား..သူ...သူ ဘယ်မှာလဲ ...။
ချောက်ကနဲ သံကြားလိုက်တော့ သူဇာအောင် အသံလာရာကို ကြည့်လိုက်မိသည် ..။
ကိုသားထွေးသည် ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာ သည် ..။
သူ..သူ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ...။
ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ် ..ကြွက်သားအမြောင်းတွေနဲ့ ၀မ်းဘိုက်...တောင့်တင်းတဲ့ လက်မောင်းလက်ဖျန်တွေနဲ့ ...ဟယ်..အောက်ပိုင်း ပေါင်ကြားက လိင်တန်ကြီး က ညိုညိုမဲမဲကြီး တန်းလန်း
ကြီး ကျနေတာ မြင်းလှည်းဆွဲတဲ့ မြင်းတွေကို တွေ့ဖူးခဲ့တာမျိုးကြီး ...။ မန္တလေး နဲ့ မေမြို့ သွားကြတုံးက မြင်းလှည်းဆွဲတဲ့မြင်းတွေ အောက်က တန်းလန်းကြီးကျနေတဲ့ အတန်ချောင်း
ကြီးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ တခစ်ခစ်ရယ်မောသဘောကျခဲ့ကြတာ ..။
ကိုသားထွေး ရဲ့ ဟာကြီးက မြင်းတကောင်ရဲ့ဟာလို ရှည်သလိုဘဲ ..။ တုတ်တုတ်ခဲခဲ ညိုမဲမဲကြီး ..။
အမလေး ..။ သူ ..သူ..ဒါကြီးနဲ့ ငါ့ကို လုပ်ခဲ့တာလား ..။
အို..ဒါကြောင့် ..ငါ့ ဟိုဒင်း...နာနေတာ..ဖွာတာတာကြီးတောင် ဖြစ်နေတယ် ...ဒါကြီးနဲ့ ထိုးဆောင့်သွားတာမို့ ..။
ကိုသားထွေး က “ နိုးပြီလား ..သူဇာ ...” လို့ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ မေး သည် ...။
သူဇာအောင် ဘာမှ ပြန်မပြောမိ ..။ ကိုယ်လုံးတီး ပက်လက်ကြီး သူ့ကို ငေးကြည့်နေမိ သည် ..။ သူ ကုတင်ပေါ်တက်လာ သည် ။
“ အကိုနဲ့ သူဇာ အချစ်လွန်ခဲ့ကြတယ် ....သူဇာ....”
အို ...။ ငါ..ငါ အိပ်ပျော်နေတာ သူ အတင်းလုပ်တာကြီး ...ငါ့အလိုမှ မပါတာ ....။
စိတ်ထဲက ပြောနေမိတာ ..။ အင်း..ပြီးတာက ပြီးသွားနေပြီ ..။
ပက်ပက်စက်စက် ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ အ၀တ်အစားတွေကို ရှာမိသည် ..။ မတွေ့ ..။
စောင်တို့ ခေါင်းအုံးတို့လဲ မတွေ့ ...။ ပေါင်ကြားနေရာကို လက်ဖ၀ါးနဲ့ ကာလိုက်မိသည် ..။ ကိုသားထွေး က ပေါင်တန်တလျှောက် လိုက်နမ်းနေသည် ..။
“ အို..အကို .....”
သူဇာအောင့် လက်ကို ကိုသားထွေးက ဖယ်လိုက်သည် ..။ အာ။။။ဟင် ....။
သူ...သူ သူဇာအောင့် အဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို နမ်းရှုံ့နေပြီ ...။
သူ့ကို တားဆီးနိုင်တဲ့ ခွန်အား သူဇာအောင့်မှာ မရှိတော့ ..။ သူ့လျာကြီး သူဇာအောင့် ပတ်ကြားအက် အကွဲထဲ တဖျတ်ဖျတ် ယက်နေတော့ သူဇာအောင် သူ့ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို
အတင်းဘဲ ဆွဲကိုင်နေမိရသည် ..။ ပေါင်တန်တွေကိုလဲ ဖြဲကားပေးမိရသည် ..။ သူ့လက်တွေက သူဇာအောင့် နို့လုံးကြီးတွေကို ကိုင်ညှစ်နေသည် ..။
ကိုသားထွေးလျာကြီးက အတင်းကြီးဘဲ သူဇာအောင့် အဖုတ်အတွင်းထဲ တိုးဝင်နေသည် ။
“ အား....အား....အင်း ...အကို..အကိုရယ် ....အား...အား....”
ကိုသားထွေး လက်ချောင်းတွေက သူဇာအောင့် နို့သီးခေါင်းတွေ ကို ကိုင်ဆော့နေသည် ။ ထောင်ထနေတဲ့ အစိလေးကို လျာနဲ့ ထိုးထိုးကလိပေးနေသည် ..။သူဇာအောင်
ကိုသားထွေး နှူးလွန်းလို့လူးနေရပြီ ..။
ကိုသားထွေးရဲ့ လိင်တန်ကြီး သူဇာအောင့်အဖုတ်ထဲ အတင်းကြီး ထိုးတာခံရတော့ သူဇာအောင် သူ့ရင်ဘတ်ကိုတွန်းပြီးမလုပ်ဖို့ တောင်းပန်မိရသည် ..။ စောစောက သူ ဆွပေးလို့ ထကြွခဲ့တဲ့စိတ်တွေတောင် နာကျင်မှုကြောင့် ပျယ်ပျက်သွားဆဲ သူ့လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီးက မညှာမတာ သူမအဖုတ်ထဲ ထိုးဆောင့်နေပြီ ...။
“ အား....အကို....နာ...နာတယ် ......အမလေး.....အကို...ဖြေးဖြေး ....”
ကိုသားထွေးကတော့ သူရဲစီးနေတဲ့အလား ..။ သူဇာအောင် ဘယ်လောက်တားတား နားမထောင် ..။ ဆက်တိုက်ဘဲ ဆောင့်ထည့်နေသည် ..။ဆောင့်ချက်တွေ က ပြင်းသည် ..။
ကိုသားထွေး သူဇာအောင့်ကို စိမ်ပြေနပြေ စပ်ရှက်သည် ..။ အ၀တ်လဲပေး မ၀တ် ..။ ကိုယ်တုံးလုံး နဲ့ နေနေရသည် ..။ သူဇာအောင် သူမ ဒီလူကို ယုံမိတာ အမှားကြီးမှားပြီဆိုတာ သိလိုက်ချိန် နောက်ကျနေပြီ ..။ သူဇာအောင် တုန်လှုပ်သွားတာက ကိုသားထွေးသည် သူမကို ကာမစပ်ရှက်တာတွေကို ဗီဒီယို နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ထားတာကိုပါဘဲ ...။
“ အကိုရယ်...မရိုက်ပါနဲ့ ....တောင်းပန်ပါတယ် ....ရိုက်ထားတာတွေ ဖျက်ပေးပါ...” လို့ ငိုယိုတောင်းပန်ပေမဲ့ မရဘူး ...။
“ ဖျက်စေချင်လား ...”
“ ဟုတ်..အကို....ဖျက်ပေးပါ ...”
“ ဒါဆို အကိုခိုင်းတာ လုပ်ပေးမလား ...”
“ လာ..အကို့ဟာကို စုတ်ပေး ....”
သူဇာအောင် လိင်တန်ကြီးကို ငုံကာ စုတ်ပေးရသည် ..။
သူ့သုတ်တွေ သူဇာအောင့်ပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားတဲ့အထိ စုတ်ပေးရသည် ..။ ဒါလဲ သူ ရိုက်ထားတာတွေ ဖျက်မပေးဘူး ..။ ခုနက စုတ်ပေးတာတောင် ထပ်ရိုက်လိုက်သေးသည် ။
“ တခု ထပ်လုပ်ပေးရအုံးမယ် ..သူဇာ..ဒါဆို ရိုက်ထားတာတွေ ဖျက်ပေးမယ် ...”
“ ဘာလဲအကို..ဘာထပ်လုပ်ပေးရမှာလဲ ....”
“ သူဇာ့နောက်ပေါက်ကို အကိုလုပ်ချင်တယ် ....”
“ ရှင် ....”
ကိုသားထွေး သူဇာအောင့်ကို ဖင်ပေါက်ထဲ လုပ်သည် ..။ နာကျင်မှုဝေဒနာ နဲ့အတူ ကိုသားထွေးရဲ့အကျဉ်းသား ဘ၀ကို ရောက်မှန်းမသိရောက်သွားရတဲ့ သူမရဲ့ဘ၀ကို ၀မ်းနည်း
ကြေကွဲရင်း ငိုရှိုက်မိသည် ..။ သူမရဲ့ စအိုပေါက်ထဲကို မညှာမတာ ထိုးထိုးညှောင့်နေတဲ့ ကိုသားထွေးကို ရွံရှာမုန်းတီးနေသည် ..။ ကိုသားထွေးကတော့ သူဇာအောင့် ကို နောက်ပေါက်
ဖွင့်ရလို့ ကျေနပ်နေသည် ..။
သူကျေနပ်လောက်အောင် လုပ်အပြီး သုတ်ရေတွေကို သူဇာအောင့်မျက်နှာပေါ်ကို ထုတ်လွှတ်လိုက်သည် ..။
သို့ပေမဲ့ ပုံတွေကို မဖျက်ပေးဘူး ..။
သူဇာအောင့်ကို အ၀တ်အစားလဲ ပေးမ၀တ်ဘဲ အခန်းထဲမှာ တယောက်ထဲ ထားခဲ့ သည် ..။
ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း ယူလာသော “ မင်းသား မုဒိန်း ” ဗီစီဒီကို ကြည့်နေသည် ..။
မင်းသားရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် မုဒိန်းကျင့်ခန်းကို ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေသည် ..။
အပျိုကြီးမမ အနေနဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြည့်နေရတာပေမဲ့ မင်းသားရဲ့ လိင်တန် ရှည်မျောမျော တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီးကို ကြည့်ရင်း ကျောထဲက စိမ့်တက်လာသည် ..။ ကြက်သီးတွေ ထမိရသည် ..။ အင်တာနက် ချပ်လိုင်းတွေမှာ အပျိုပေါက်မလေးလို ဟန်ဆောင်ပြီး မင်းသားလို လူသားစားကျားရဲတွေကို ထောက်လှမ်းခိုင်းထားတဲ့ ရဲမေ ပိုးဇာ နဲ့ ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် တို့ကိုလည်း မင်းသားအခွေကို ကြည့်ခိုင်း သည် ..။ ညာလက်မှာ ဆေးမှင်တက်တူးကြီးနဲ့ မင်းသားကို ချပ်တင်းလုပ်ကြရင်း ရှာဖွေဖို့ စစ်ငြိမ်းမေ သူတို့ကို ညွှန်ကြားလိုက် သည် ။စစ်ငြိမ်းမေ
အသံတွေ တုန်ရင်နေသည် ..။ မင်းသား က ကောင်မလေးတွေကို တအားကြီးတက်ဆောင့်ထည့်နေတာ ကြည့်နေတော့ စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေသည် ..။
ရဲမေပိုးဇာနဲ့ မိုးမိုးခိုင်တို့ စိတ်တွေလည်း သူမလိုဘဲ ဖြစ်နေလိမ့်မည် လို့ စစ်ငြိမ်းမေ ထင် သည် ။
စစ်ငြိမ်းမေက နဂါးတက်တူးနဲ့ မင်းသား ပုံပန်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျက်လုံးထဲက ဖျောက်လို့မရဘူး ဖြစ်သွားသည် ..။ ဒီ မုဒိန်းကောင်ကို စိတ်နာ မုန်းတီးရမဲ့အစား သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့သူ့လိင်တန်ကို သဘောကျသလိုဖြစ်သွားရတဲ့ သူမစိတ်တွေကို သူမ အံ့သြနေမိပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်သလို ဖြစ်မိလိုက် သည် ..။ တဏှာကြွသွားမိရတာကို ရှက်မိသည် ..။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည် ..။ အမြန်ဆုံး ..မင်းသားကို မရရအောင် ဖမ်းမည် ..။ ရုံးတင်တရားစွဲမည် ..။ထောင်ထဲပို့မည် ...။
ရဲမေပိုးဇာ လည်း ဒုရဲမှူးက ရုံးခန်းထဲ စောစောက တံခါးပိတ်ပြီး ရဲမေမိုးမိုးခိုင် နဲ့ သူမကို မင်းသားရဲ့ မုဒိန်းဗီဒီယို ပြတော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ မင်းသားဆိုတဲ့ကောင်ကို တွေ့ဖူးအောင်
နဲ့ သူ ဘာတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်..ဆိုတကိုသိဖို့ ကြည့်ကြရပေမဲ့အပြာကား က အပြာကားဘဲလေ ..။ အပြာကားကို ကြည့်တော့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားထကြွရတာ သဘာဝဘဲ လေ ။
အိမ်သာထဲ ထိုင်ရင်း စောစောက ကြည့်ခဲ့တဲ့ မင်းသား ရဲ့ ကာမပွဲကြမ်းတွေကို ပြန်လည်မြင်ယောင်နေဆဲ ...။
၀တ်ထားတဲ့ ပင်တီလေးရဲ့ ဂွဆုံမှာတောင် စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်သွားရ သည် ။
ကာမစိတ် နိုးကြွမှုကြောင့် မိမိရဲ့အင်္ဂါစပ် ပိုဖေါင်းကြွထူအမ်းလာလေသလား လို့ ထင်မိသည် ။ လက်ချောင်းလေးတွေက အင်္ဂါစပ်ကို မသိမသာ စမ်းမိလိုက်သည် ။ မင်းသား ဆိုတဲ့
အပြာကားဇာတ်လိုက် ရဲ့ အောင်မြင်လှတဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီးကို မြင်ယောင်မိသည် ..။ အို..ရင်တုန်လိုက်တာ ..။
ပိုးဇာ ချပ်လိုင်းတွေမှာ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ ချပ်တင်းလုပ်နေတော့ တချို့ကောင်တွေက လိင်ကိစ္စတွေ ပြောလာတာတွေ ကြုံရသည် ..။ ပိုးဇာကလည်း အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီး အလိုက်အထိုက် ပြန်ပြောရသည် ..။ လုပ်စားနေတဲ့ မင်းသားလိုကောင်ကို ရှာဖွေနေရတော့ ဒီလိုကောင်တွေကို ကျိတ်မှိတ်ပြီး ရောနှောနေရသည် ။
ရဲမေမိုးမိုးခိုင်ကတော့ ကိုသားထွေးဆိုတဲ့လူနဲ့ ငြိနေသည် ..။ မိုးမိုးခိုင်က အရိုးခံရပ်ကွက်တခုထဲက ၀င့်ဝါ ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ ကောင်မလေး လို့ ဟန်ဆောင်ထားသည် ..။ ကိုသားထွေးက သူ့ကိုယ်သူ နိုင်ငံခြားကနေ ချပ်တင်းလုပ်နေသယောင် ဟန်ဆောင်ထားသည် ..။ သူ့ကိုယ်သူ စင်္ကာပူကတဲ့ ။ ရဲမေမိုးမိုးခိုင် ရဲ့ ပြောပြချက် တင်ပြချက်အရ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း က ကိုသားထွေးဆိုတဲ့လူကို သူသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဘယ်ကသုံးနေလဲဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ်ကြည့်တော့ စင်္ကာပူက မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့စွန် တနေရာကနေ ဆက်သွယ်နေတာသာ ဖြစ်တာကို သိရတော့ ဒီ ကိုသားထွေးဟာ လူလိမ်တယောက် ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ပိုပြီးစောင့်ကြည့်လာကြသည် ..။ ကိုသားထွေး က သူ့ပုံကို ကင်မရာကနေပြသည် ..။ ညာလက်မောင်းမှာ နဂါးပတ်နေတဲ့တက်တူးနဲ့ မင်းသား ဆိုတဲ့ကောင်များလား ဆိုတာကို သိချင်နေကြသည် ..။ ကိုသားထွေးက အင်္ကျီလက်ရှည် ၀တ်ထားလို့ တက်တူး ပါမပါ သူတို့
မသိရသေး ..။ ကိုသားထွေး သည် မင်းသား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် ။ ကိုသားထွေးကို လူချင်းတွေ့ကြည့်ရင်ကောင်းမည် လို့ အထက်အရာရှိတွေက ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် ကို ပြောသည် ..။
ဇာဇာ ဒီနေ့ ကိုသားထွေးနဲ့ အပြင်မှာ တွေ့သည် ..။
ဇာဇာ စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေသည် ..။
ကိုသားထွေး က ဇာဇာ့ကို ပြုံးပြီးစိုက်ကြည့်တာ ဇာဇာ သူ့မျက်လုံးတွေကို ရင်မဆိုင်ဝံ့ဘူး ..။
နောက်ဆုံး ချပ်တင်း လုပ်ခဲ့တုံးက ကိုသားထွေးက ဇာဇာ့ကို အတင်းဘဲ ထူးခြားတာတခု ပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့သည် ..။ ကိုသားထွေး ကြည့်ချင်တာက ဇာဇာ့ ရင်သားတွေ ....တဲ့ ။
အိုး ...ဇာဇာ ရှက်ပါတယ် ...။ မပြရဲပါဘူး ...။
ကိုသားထွေး ချိန်းတဲ့နေရာကို ဇာဇာသွားသည် ။
သူက ပန်းခြံကြီးတခုထဲ ကို ချိန်းတာ ..။
လူပြတ်တဲ့နေရာတခုပေါ့ ..။ တကယ်ဆို ဇာဇာ တယောက်ထဲ ဒီလိုနေရာမျိုး မသွားရဲဘူး ..။
ကိုသားထွေးက ကားတစီးထဲက ထွက်လာသည် ..။ သစ်ပင်ကြီးတပင်အောက်မှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားတစီး ထဲက ထွက်လာတာ ..။
သူငယ်ချင်းတယောက် ရဲ့ ကား ကို ဆွဲလာတာ တဲ့ ။
ကိုသားထွေးက ဇာဇာ့လက်တွေကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး....“ ၀မ်းသာလိုက်တာ ဇာဇာရယ် ....”လို့ ပြောသည် ။
ဇာဇာ့အတွက် သူ လက်ဆောင်တွေ ယူလာသည် ..။ ဇာဇာ မလိုချင်ပါဘူးလို့ ပြောလဲ မရဘူး ..
ကိုသားထွေး နဲ့ အကြာကြီးဘဲ စကားတွေ ပြောကြသည် ..။ ညောင်းလာလို့ ကားထဲ ၀င်ထိုင်ပြီး ပြောကြသည် ..။ ကိုသားထွေးက အရမ်းဘဲ လက်တွေကို ကိုင်..ပေါင်ကိုကိုင် သည် ။
သူနဲ့ ကားထဲထိုင်ရတာ ရင်တွေ တုန်သည် ။
ဇာဇာ့ကို အိမ်နားအထိ လိုက်ပို့သွားသည် ..။ ဇာဇာ့ပေါင်တွေကို သူ ပွတ်နေခဲ့လို့ သူ့ကားပေါ်ကလဲ ဆင်းရော ဇာဇာ့ထမိန်အနောက်မှာ အရေတွေ စိုကွက်ခဲ့ရတဲ့အထိ
ဇာဇာ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားခဲ့ရသည် ..။
ကိုသားထွေးက ဆက်တိုက်ဘဲ ပူဆာသည် ..။ ဇာဇာ့ကို အရမ်းဘဲ တောင်းဆိုနေသည် ..။ သူ ဇာဇာ့ကို အရမ်းချစ်တယ်လို့ ပြောသည် ..။ ချစ်လွန်းလို့ အမေရိကားကတောင် ပြန်လာ
တွေ့မည် တဲ့ ...။
ဇာဇာ လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ဘဲ ပြလိုက်မိသည် ..။ ကိုသားထွေး ရေရေ လည်လည် ကြွေသွားသည် ..။ ဇာဇာ့ ရင်သားတွေ လှလွန်းလို့...တဲ့ ..။
သူက ယူအက်စ်အေ က တောင် လာတာဆိုတော့ ဇာဇာလဲ သူ့ကို တွေ့မှဖြစ်မည် ..။ ချပ်တင်းမှာ သူ့ကို နို့လှန်ပြထားတာကြောင့် ဇာဇာ ရှက်နေသည် ။
ဇာဇာ သူငယ်ချင်း ယမုန်နာ့ကို အားလုံး ပြောပြသည် ..။ ယမုန်နာကလဲ တော်တော် စိတ်ဝင်စားသည် ..။
ဇာဇာ့ကို ကိုသားထွေးအကြောင်းတွေ သေသေချာချာ မေးသည် ..။ ဇာဇာကလဲ အားလုံး ခရေစေ့တွင်းကျ ယမုန်နာ့ကို ပြောပြသည် ။
ကိုသားထွေးက ဇာဇာ နဲ့ သဘက်ခါ ထပ်ချိန်းသည် ..။
ဇာဇာ့စိတ်ထဲမှာ သိနေသည် ။ ကိုသားထွေး နဲ့တွေ့ရင် သူမကို နမ်းစုတ်ကိုင်တွယ် လိမ့်မည်ဆိုတာ ..။ သိနေပေမဲ့ ဇာဇာ မသွားဘဲအနေနိုင် ..။ ကိုသားထွေးကို သူ တအားကြိုက်နေပြီ ။
ကိုသားထွေးက သူနဲ့အတူ အမေရိကန်ကို ခေါ်သွားမည် လို့ ပြောသည် ..။ သူ့ကို ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဇာဇာပေးအပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဘဲလေ ..။ သူ့ကို အရမ်းခိုက်နေပြီလေ ။
ယမုန်နာက သူ့အကြောင်း ယူ ဘယ်လောက်သိလို့လဲ ..သူ့အကြောင်း သေသေချာချာ စုံစမ်းပါအုံးလား..ဇာ...လို့ ပြောသည် ..။ ဒီလိုပြောတာ ဇာဇာ မကြိုက်ဘူး ..။ ကိုသားထွေး ကို
မယုံသလို ပြောတာ မကြိုက်ဘူး ..။
ကိုသားထွေးနဲ့ တညလုံး ချပ်တင်း လုပ်ကြသည် ..။ သူက ဇာဇာ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားအောင် သိပ်လုပ်သည် ..။ ဇာဇာ အရမ်း တုန်ခါနေအောင် ဖြစ်ရတာက ကိုသားထွေးက သူ့လိင်တန် ကို
ကင်မရာကနေ ပြသလိုက်လို့ပါဘဲ ..။ယနေ့ခေတ် ခေတ်မှီတဲ့ ကောင်မလေးတယောက်မို့ ဇာဇာ သည် အင်တာနက်လဲ အမြသုံးနေသူဖြစ်တော့ ယောင်္ကျားလိင်တန်ဆာ နဲ့ ကာမစပ်
ရှက်တဲ့ အပြာဇာတ်ထုပ်တွေကို တွေ့မြင်ဖူးသူ ပါ ။ သို့သော်လဲ အခုလို တကယ့်လူတယောက်က ကင်မရာနဲ့ ပြသတာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ဘူး ..။ ကိုသားထွေးရဲ့ ဒစ်ပြဲထိပ်ဖူးကြီးကို အသဲတယားယား နဲ့ တွေ့ရတော့ စိတ်တွေ ဗလောင်ဆူသွားရသည် ..။ ကိုသားထွေးက ..သူ့ငပဲကို ပြပြီ....ဇာ့ပိပိ ကို ပြပါ..လို့ တောင်းဆိုသည် ..။ အို ..။ ပိပိတော့ မပြနိုင်ပါဘူး ..။
ကိုသားထွေးက သူ့လိင်တန်ကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် လုပ်ပြသည် ..။ ဇာဇာ ယမုန်နာ့ကို ပြချင်လို့ သူ့ပုံကို ကူးထားလိုက်သည် ..။
ညမအိပ်လို့ မနက်နေမြင့်မှ မေမေလာနှိုးလို့ အိပ်ရာက ထသည် ..။ မေမေက သူနဲ့ စူပါမားကက် လိုက်ခဲ့ပါ တဲ့ ..။ ဇာဇာလဲ မေမေ့ဆီက ငွေဖန်ရမှာမို့ မေမေနဲ့ ဈေးလိုက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ..။ မေမေ့ကို ဖါးထားရမည်လေ ...။
မေမေ့ဆီက ငွေရမှ မနက်ဖန် ကိုသားထွေးနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အခါ သူ့ကို ဇာ ထမင်းကျွေးနိုင်မည် ..။
မေမေနဲ့ ဇာဇာ ဂျန်းရှင်းစကွဲကုန်တိုက်ကြီးမှာ ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်အထွက် ကားတွေ ကျပ်နေလို့ လမ်းမကြီးကို ထွက်လို့မရဘဲ စောင့်နေရတဲ့အချိန် အထဲကို ၀င်လာတဲ့ ကားတစီးပေါ်မှာ
ကိုသားထွေးနဲ့ မိန်းမတယောက်ကို ဇာဇာလှမ်းတွေ့လိုက်ရ သည် ..။
ဇာဇာ့ရင်တွေ မီးတောက်ပူလောင်သွားရသည် ..။ ကိုသားထွေးက အဲဒီမိန်းမ ကို ရယ်မောပြီးစကားတွေပြောနေသည် ..။ မေမေနဲ့သာမဟုတ်ရင် ဇာဇာ ကားပေါ်က ပြေးဆင်းသွားပြီး
ကိုသားထွေးဆီကို လိုက်သွားမိမှာဘဲ ..။ စိတ်ထဲ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၀င်လာသည် ..။
ကိုသားထွေး မျက်နှာများတာလား ..။
ဇာဇာ ညဖက် သူနဲ့ ချပ်တင်းလုပ်ဖို့ ဒီတခါ စောင့်ရတာ တနာရီကို ဆယ်နှစ်လောက်ကြာတယ်လို့ ထင်မိနေသည် ..။ ကိုသားထွေးကို မေးချင်နေလို့..။ ဒီမိန်းမ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ..။
ဒုရဲမှူး စစ်ငြိမ်းမေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိပ်ခန်းထဲက ကုတင်ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ စားပွဲပေါ်က ကွန်ပြူတာကို ဖွင့်လိုက်သည် ..။
ဟူး ...။ အပြင်မှာက နေကပူလွန်းသည် ။ ၀တ်ထားတဲ့ ယူနီဖေါင်းအင်္ကျီလဲ ချွေးတွေစိုနေသည် ..။ ဒေါက်အမဲရောင်မှာ ငွေကြယ်သုံးပွင့်စီ ပါတဲ့ ယူနီဖေါင်းအင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။
အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ဖွင့်လိုက်တဲ့ အဲကွန်းလေအေးစက် က ခုမှစအေးလာသည် ။ ဘရာစီယာ က ကျပ်လွန်းနေသည် ။ ဆိုက်ပြောင်းရတော့မည်ထင်သည် ..။ ရင်သားစိုငတွေက
အတင်းရုန်းကန်ထွက်ချင်နေသည် ..။ ချုပ်ချယ်မှုကို မလိုလားကြဘူး ဖြစ်မည် ..။ ချိတ်ကိုလက်နောက်ပြန် နဲ့ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာလေးကို ချွတ်ခွာလိူက်သည် ..။
အောက်က ယူနီဖေါင်း ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ပင်တီအဖြူလေးကိုပါ ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ..။
တင်းမာကော့ထနေတဲ့ ရင်သားတွေက အချုပ်အနှောင်က လွတ်လို့ ထိုးထိုးထောင်ထောင် ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား ရှိနေကြသည် ။ နဲနဲအိတွဲတွဲ ရှိနေပေမဲ့ လုံးဝန်းလှပနေဆဲ ..။ အမြဲလေကျင့်
ခန်းလုပ်နေတာမို့ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ခါးက သေးသေးသွယ်သွယ် ရှိနေဆဲ ..။ တင်သားတွေက ဆန့်ကျင်ဘက် ယောက်ျားတွေ ငေးမောကြရအောင်ဘဲ စွင့်ကားတောင့်တင်းသည် ။
အိမ်နေရင်းဝတ် တီရှပ်ပွပွကြီးတထည်ကို ကောက်စွပ်လိုက်သည် ..။ တီရှပ်က ရှည်သည် ။ပေါင်လည်အထိ ရှည်သည် ..။
ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင်လိုက်သည် ။
အိုင်အက်စ်စီယူ မှာ တာဝန်ယူရကထဲက လိင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ဖတ်ရသည် ..။ ကြည့်ရသည် ..။ချပ်တင်းလုပ်တာတွေ နားထောင်ရသည် ။
အပျိုကြီးမမ ပစ်ထားခဲ့တဲ့..ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့ လိင်ကိစ္စ..ကာမကိစ္စတွေနဲ့ ပြန်လည်ထိတွေ့ရသည် ..။ ပြန်လည်ပတ်သက်လာရသည် ..။
ဒီနေ့ ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် သည် ချပ်လိုင်းမှာ သောင်းကျန်းနံမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုသားထွေးဆိုတဲ့ လူနဲ့ အပြင်မှာ လူချင်းချိန်းတွေ့သည် ။
ကိုသားထွေးသည် သူတို့ ရှာနေသော အွန်လိုင်းမြန်မာပွန်းစတား “ မင်းသား ” လို့ သူတို့ ယူဆကြသည် ..။ မသေချာသေး ..။ ညာလက်မောင်းမှာနဂါးတက်တူး ထိုးထားတဲ့ မင်းသား
ဟုတ်မဟုတ် သားထွေးကို မိုးမိုးခိုင်နဲ့ လာတွေ့ချိန် ဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပေမဲ့ သားထွေးဟာ မင်းသား မဟုတ်ခဲ့ရင် သားထွေးကို ဆွဲစိတဲ့ သတင်း မင်းသား ဆီ ပေါက်သွားရင်
မင်းသား လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားမှာကို စစ်ငြိမ်းမေတို့ မလိုလားဘူး ..။ သားထွေးကို အေးအေးဆေးဆေး လေ့လာပြီး မင်းသား ဟုတ်မဟုတ် မိုးမိုးခိုင် ကို စုံစမ်းစေမည် ..။
မိုးမိုးခိုင် ရဲ့ အနောက်မှာ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း ကို အရိပ်ပမာ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားသည် ။ နောက်ထပ်ရထားသော မင်းသား ရဲ့ ချစ်စခန်းဖွင့် ဗီဒီယို တွေကို စစ်ငြိမ်းမေ
ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည် ..။ မင်းသားကို ညာလက်မောင်းက တက်တူး နဲ့ဘဲ မရှာဘဲ တခြား ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်အသားတခုခု ရမလားဆိုပြီး သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်တာ ..။
သူ့မျက်နှာကို ဒီတခါ မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသည် ..။ လူကတော့ ဗလတောင့်တောင့်ဘဲ ..။ အသက် ခန့်မှန်းရခက်သည် ..။ ၃၀လောက် ဖြစ်ဖို့များသည် ..။ ရှည်ရှည်တုတ်တုတ် သူ့လိင်တန်
ကြီးကို မြင်ရတိုင်း စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်ထဲ တမျိုးကြီးဘဲ ..။ ရင်ဖိုသလိုလို ..ကျောချမ်းသလိုလို နဲ့ ..။ ရင်စိုင်တွေက နို့သီးလေးတွေက တအားတင်းမာနေလို့ လက်တွေက အလိုလို ကိုင်မိရက်သား ဖြစ်သွားရသည် ..။ ပေါင်ကြား က အင်္ဂါစပ်ကလဲ အထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလာသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ အင်္ဂါစပ်ကို လက်နဲ့စမ်းမိရသည် ။ မင်းသား ဇာတ်ထုပ်တွေကြောင့် ထကြွလာရတဲ့ မိမိရဲ့ ကာမစိတ်တွေကို မိမိမှာ ရှိနေတဲ့ အပြာရုပ်ရှင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေကို ကြည့်လိုက်ပြီး
ခါတိုင်း စိတကြွထလာရင် လုပ်သလိုဘဲ လက်နဲ့အာသာဖြေဖျောက်ရလေတော့ သည် ။
၀င့်ဝါ လို့ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် က အီးမေးနဲ့ သတင်းပို့သည် ..။ ဒီနေ့သားထွေးနဲ့ တွေ့တာ ဘာမှတော့ သဲလွန်စ မရသေးဘူး...တဲ့ ။
ထင်ထက်ထွန်းကလဲ ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဘဲ လို့ သတင်းပို့သည် ..။ ရဲမေပိုးဇာလည်း ဆယ်ကျော်သက်လေး အနေနဲ့ ချပ်တင်းလိုက်လုပ်တာ “ ရဲရဲတောက် ” ဆိုတဲ့ လူတယောက်နဲ့
တွေ့နေသည် ..။ ရဲရဲတောက် က ကင်မာရာမှာ သူ့ပုံမပြသေး ..။ ရဲရဲတောက် က သူ့မှာ တက်တူးရှိကြောင်း ပိုးဇာကို ပြောပြလို့ ပိုးဇာက တက်တူးကြိုက်တဲ့ ချာတိတ်မလေး အနေနဲ့ စပ်
စုနေသည် ..။ ဘယ်လိုတက်တူးမျိုးလဲ ..။ ရဲရဲတောက် က လူချင်းတွေ့တဲ့အခါ ပြမည် လို့ ပြောသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေလဲ ပိုးဇာကို ဆက်လက်စုံစမ်းဖို့ ပြောလိုက်သည် ..။
သားထွေး ဆိုတဲ့ နံမည် နဲ့ စော်လေးတွေ ကို ဖန်ဖန်ပြီး ဖြုတ်နေပေမဲ့ တတကယ့်သူ့နံမည် အရင်းက သားထွေးမဟုတ်ပါဘူး ..။
သူ့နံမည်အရင်းကို သိသူရှားလှသည် ..။
သူ့နံမည်က ထူးထူးဆန်းဆန်း မဟုတ်ပါ ..။ အများမှည့်နေကျ နံမည်တခုပါ ..။ နေ၀င်းနိုင် ...။
သားထွေး က အွန်လိုင်း မှာ သုံးတဲ့ နံမည် ..။
သားထွေး သည် တကောင်ကြွက် ။ မိဘမဲ့ .။ မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ ကြီးပွားလာတဲ့ ဦးစိန်ကျောက်ဆိုတဲ့ လူကြီးနဲ့ ကြီးပြင်းလာရသည် ..။ ဦးစိန်ကျောက်က သနားကြင်နာစိတ်
လုံးဝရှိတဲ့လူကြီးမဟုတ်ဘူး ..။ တောက ဆင်းရဲလို့ လာအိမ်ဖေါ်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အမြဲ မုဒိန်းကျင့် ခြေတော်တင် ဖျက်ဆီးနေကျ လူကြီး ..။
နေ၀င်းနိုင် ( ခေါ်) သားထွေးသည် ငယ်ငယ်ထဲက ဦးစိန်ကျောက် ရဲ့ မကောင်းလုပ်တာတွေကို တွေ့လာတော့ ကျေးညီနောင်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ထဲက ဓါးပြတွေနဲ့ ကြီးလာတဲ့ ကျေးငှက်လေးလိုဘဲ စိတ်နေစိတ်ထား ကြမ်းတမ်းယုတ်မာခဲ့ပေ သည် ။ မိန်းမများကို ကာမဖြေဖျောက်ဖို့ တခုထဲ မြင်သည် ..။ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်ဖို့ သူ ၀န်မလေးတော့ ..။
သူသည် နိုင်ငံခြား ဆိုတာကို တခါမှတောင် ရောက်ဖူးသူ ..မဟုတ်ဘူး ...။
ကြားဖူးနားဝရှိတာတွေနဲ့ လျှောက်ဖိန့် ညာစားနေတာဘဲ ဖြစ်သည် ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမပြောနဲ့ ..ပုဇွန်တောင် က စင်ကာပူကျောင်းတိုက်ထဲတောင် သူ မရောက်ဖူးဘူး ..။ မိန်းမတွေ အထင်ကြီး
အောင် ဖိုတိုရှော့ဖန်တီးချက်နဲ့ အမေရိကန် မြို့တိုက်တာတွေ နောက်ခံပုံတွေ လုပ်ပြီး မိန်းမတွေကို ပြသနေတာဘဲ ဖြစ်သည် ..။
အင်တာနက်ကနေ ချပ်တင်းလုပ်ပြီး ရိုးအတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သူ ကာမဆက်ဆံပြီး သူ အားရအောင် ဆက်ဆံပြီးရင် မိုးဟိန်းမိုး ဆိုတဲ့ ဖါခေါင်းကို ရောင်းစားလေ့ရှိသည် ..။
မိုးဟိန်းမိုးက မိန်းကလေးတွေကို ဖါဇာတ်သွင်းတဲ့အလုပ်ကို တသက်လုံး လုပ်နေသူ ဖြစ်သည် ..။ နယ်စပ်ကို မိန်းမတွေ ရောင်းစားတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေသူဖြစ်သည် ။ သားထွေးလဲ သူ့မွေးစားဖခင်ကြီးဦးစိန်ကျောက် အတွက်လဲ သူ ဖန်လို့ရလာတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပူဇော်ပသ သည် ..။ မိုးဟိန်းမိုးကိုလည်း ရောင်းသည် ..။ ဟိုတလောလေးက သူပြန်မလွှတ်တော့တဲ့
သူဇာအောင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို မွေးစားဖခင်ကြီးကို ပေးလိုက်ပြီးနောက် အခု ထပ်မံဆက်သွယ်ထားတဲ့ ဇာဇာကို ချိန်းဆိုပြီး ကျုံးသွင်းလျက်ရှိသည် ..။ ခုတလော မိန်းကလေးတွေ
က တော်တော် လွယ်နေသည် ..။ ဇာဇာနဲ့ ငြိနေဆဲ ၀င့်ဝါ ဆိုတဲ့ အငယ်အချောလေးတယောက် ထပ်ငြိ သည် ..။
လွယ်လွန်းလို့ သံသယရှိစရာတောင်ကောင်းသည် ..။
သူ့ကို သူ့တပည့် ရွှေအ က “ ဆရာစော်ကြည်” လို့ ခေါ်နေသည် ..။ ဆက်တိုက်ကို တယောက်ပြီးတယောက် ကြည်နေသည် ။
ရွှေအ က ခိုင်းဖို့သူ ခေါ်ထားတဲ့ လူမိုက်တပည့် ..။ ဖါဇာတ်သွင်းတဲ့အခါ ပြန်လှန်ရန်လုပ်တဲ့ မိန်းမတွေကို ရွှေအ က ညှင်းပမ်းသည် ။နှိပ်စက်သည် ။ရွှေအ သည်လဲ လူမဆန်သော
သူ့လိုဘဲ လူမိုက်တယောက် ..။
ပိုးဇာ သည် ရဲရဲတောက်ကို မသင်္ကာဘူး ..။
ရဲရဲတောက်က သူ့မှာ နဂါးပုံ တက်တူးရှိသည် လို့ ပြောတဲ့အပြင်ေ၇ာင်စုံဆေးမှင်နဲ့ ထိုးထားတာ လို့လဲ ပြောလို့ ရဲရဲတောက်ကို ပိုးဇာ စိတ်ဝင်စားနေသည် ..။ ပိုးဇာရဲ့ အထက်အရာရှိမ
ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေကလဲ စိတ်ဝင်စားနေသည် ..။ ရဲရဲတောက် ဆိုတဲ့ကောင်ဟာ မင်းသား ဖြစ်ဖို့များနေသည် ။ ပိုးဇာကို ရဲရဲတောက် နဲ့ အနီးကပ် ၀င်လုံးခိုင်း သည် ။ ရဲရဲတောက် ကို တက်တူးပြခိုင်းသည် ..။ ရဲရဲတောက် က သူ့နဂါး တက်တူးကြည့်ချင်ရင် ပိုးဇာ ရဲ့ ပေါင်ခြံမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ တက်တူးလေးကို ပြခိုင်းသည် ..။ ပိုးဇာက သူမပေါင်ခြံမှာ လိပ်ပြာပုံ တက်တူး ရှိသည်လို့ စ မိတ်ဆက် ခင်မင်စဉ်မှာ ပြောပြထားလို့ ..။
သားထွေး ( ခေါ် ) နေ၀င်းနိုင် သည် ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဇာဇာကို စိုက်ကြည့်နေသည် ..။
သူ့မျက်လုံးတွေက ကျာရဲတကောင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေလိုဘဲ ..။ ရက်စက်..ကောက်ကျစ် တဲ့ မျက်လုံးများ ...။
ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပြုံးလိုက်သည် ။
ဇာဇာသောက်မယ့် အချိုရည်ထဲ ထုံးစံအတိုင်း ဆေးခတ်လိုက်တော့ ပက်လက်ကလေး လောကကြီးနဲ့ ခေတ္တခဏ အဆက်ပြတ်နေပြီ ...။သားထွေးရဲ့ အပြုံးက ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ
တဲ့ ၀ံပုလွေတကောင်ရဲ့ အပြုံးမျိုး ...။
သူ့မွေးစားဖခင်ကြီးဦးစိန်ကျောက် ပိုင်တဲ့ သစ်ခွဲစက် ကို ခေါ်လာသည် ..။ ပုဇွန်တောင်ချောင်းဘေးမှာ ရှိနေတဲ့ သစ်ခွဲစက် က လူပြတ်တဲ့ နေရာတခုမှာ ဆိုတော့ သားထွေး ထင်တိုင်းကြဲနိုင်သည် ။ အပြင်ဘက်မှာ သူ့တပည့် ရွှေအ ရှိနေသည် ။
ဇာဇာ သည် သူမကိုသူမ အပျိုစစ်စစ်လေးလို့ ချပ်တင်းလုပ်တုံးက ခဏခဏဘဲ ထုတ်ဖေါ်ပြောခဲ့သည် ..။ ပါကင်ပိတ်လေး ....တဲ့ ..။ ဒီ ပါကင်ပိတ် အပျိုစစ်စစ်လေးကို သူ အခုဘဲ ဖွင့်တော့မည် ..။ ဟီး ....ကွင်းဖွင့်ပွဲဆိုတာ ဒါပေါ့ ...။ ဇာဇာရဲ့ ပြေလုလုကျွတ်လုလု ထမိန်တိုတိုလေးကို စ ချွတ်သည် ..။
ပေါင်တန်သွယ်တွေက ဖြူဖွေးနေသည် ..။ နေမထိတဲ့နေရာတွေမို့ ပိုပြီးဖြူနုနေကြသည် ။ ပင်တီပါးပါးဖြူဖြူလေး က အလည်ဂွဆုံနေရာမှာ စိုကွက်နေသည် ။
သားထွေး စောစောက ရေရေလည်လည် ကိုင်ထားနှိုက်ထားလို့ ဖြစ်မည် ..။ ပင်တီလေးကိုပါ ဆွဲချွတ်သည် ..။ လူတယောက်ကို ယုံစားမိတဲ့အတွက် ဇာဇာဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ဘ၀ပျက်
ရအုံးမည် ..။ အမွှေးမဲမဲပါးပါး တွေနဲ့ ဇာဇာရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါအကွဲကြောင်းကို သားထွေး သေသေချာချာ အနားကပ်ခါ ကြည့်ရင်း ..“ မဆိုးပါဘူး ...”လို့ ရေရွတ်လိုက်ပြီး လျာကြီးနဲ့ အပြား
လိုက် ပလပ်ပြတ်ဆိုတဲ့ အသံထွက်အောင် ယက်ထည့်လိုက်သည် ။
တောက် ..ကောင်းလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းလေး ...။
သားထွေး ဇာဇာရဲ့ အင်္ကျီကို ဆက်ချွတ်သည် ..။ ဘရာစီယာအဖြူလေးပါ ဆက်ချွတ်သည် ။ ဖြူဖွေးတင်းမာတဲ့ တောင်ပူစာလေးတွေက ထိုးထိုးထောင်ထောင် နဲ့ ကြည့်ကောင်းလှသည် ။
သားထွေးရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ဖွားဖက်တော် ခေါင်းထောင်ထလာသည် ။
နို့သီးခေါင်းနီနီလေးတွေကို သူ့လက်မနဲ့ လက်ညှိုးသုံးပြီး ချေနယ်လိုက်သည် ..။
“ အင်း...အင် ......”
သားထွေး သူ့အ၀တ်အစားတွေ အားလုံးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ..။
သားထွေးရဲ့ လက်ညှိုးတုတ်တုတ်ကြီး ဇာဇာရဲ့ တင်ပါးတွေကြား “ လိုင်းဆွဲ ”နေသည် ..။ ခရေပွင့် စအိုလေးကို ကလိသည် ..။
ဇာဇာ ဖျတ်ကနဲ မျက်လုံးပွင့်လာသည် ..။
“ အို...ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ..ဟင်..အကို..အကိုသားထွေး ....”
ဇာဇာက ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြစ်နေသော သူမကိုယ်သူမ သတိထားမိသွားပြီ ...။
“ဟယ် .....ဟယ်တော့ ....ဇာ...ဇာ.....အို..အကို..ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ ...ကျမ..ကျမ ...အ၀တ်တွေကို ချွတ်ထားတယ် . . ”
သားထွေး က ပြုံးကာကြည့်နေသည် ။
ဇာဇာ သူမရင်သားတွေ အပေါ် လက်နဲ့ကာသည် ..။ ကျန်လက်တဖက်နဲ့ ပေါင်ကြားက တြိဂံပုံနေရာကို ကာသည် ..။
“ ကိုသားထွေး ...ရှင်..ယုတ်မာလှချည်လား ....နှမချင်းမစာမနာ ....”
“ ငါ့မှာ နှမမရှိဘူး ....အမေလဲ မရှိဘူး ...တကောင်ကြွက် ..ဟင်းဟင်း ....”
“ကျမအ၀တ်တွေ ပြန်ပေး ....”
ဇာဇာအော်ငိုသည် ...။ သားထွေးရဲ့ ရယ်သံကြီးက သူမငိူရှိုက်သံတွေကို ဖုံးလွှမ်းသွား သည် ။
သားရဲတွင်းက သမင်မလေး ကူသူမဲ့နေပြီ ....။
ဇာဇာအ်ိမ်ပြန်မလာလို့ မိဘတွေ အကြီးအကျယ် စိတ်ပူနေသည် ..။
ဘာဖြစ်လဲ ..။ ဘယ်သွားလဲ ..။ ယောက်ျားနဲ့ ချိန်းတွေ့ပြီး လင်နောက်လိုက်ပြေးလား ....။ မိဘတွေ သိတာက လက်တော့နဲ့ နေ့ရောညပါ တခုခုအမြဲလုပ်နေသည် ..။ အင်တာနက်မှာ
ရီးစားများရလေသလား ...။ ဇာဇာရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးသည် ..။ ဇာဇာ ဘယ်သွားလဲ..။ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ...။
ယမုန်နာ က ဇာဇာ အွန်လိုင်း ချပ်တင်းမှာ ရီးစားရနေကြောင်း သူမသိသမျှပြောပြသည် ...။
ဇာဇာရဲ့ မိဘတွေ ရဲတိုင်သည် ..။ သူတို့ အမျိုးထဲမှာ ရဲအုပ်တယောက် ရှိသည် ။ သူက အမှုဖွင့်တာကို ကူညီသည် ..။ ယမုန်နာရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဇာဇာရဲ့ ကွန်ပြူတာကို ဖွင့်စစ် သည် ။
ယမုန်နာ က ဇာဇာ့ကွန်ပြူတာရဲ့ ( ပါ့စ၀ပ် )ကိုသိသည် ..။ ဇာဇာ နဲ့ အိမ်လိုက်အိပ်ဖူးလို့ ဇာဇာနဲ့ အတူတူ ကွန်ပြူတာအတူတူသုံးကြလို့ ဇာဇာက ပြောပြထားဘူးသည် ။
ယမုန်နာကြောင့် ဇာဇာ သိမ်းထားတဲ့ သားထွေးရဲ့ ပုံတွေကို ဇာဇာရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ရဲအရာရှိများ တွေ့လိုက်ကြရသည် ။
အင်တာနက်နဲ့ ဆက်နွယ်နေလို့ အိုင်အက်စ်စီယူ ကို ဆက်သွယ်ကြတော့ ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေ ဆီ ဇာဇာရဲ့ ကိစ္စ ရောက်လာသည် ..။ “သားထွေး ”ဆိုတဲ့နံမည်ကြားလိုက်ရကထဲက စစိငြိမ်း
မေ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ..။သူတို့လိုက်နေတဲ့ သားထွေးများလား ..။ သားထွေးရဲ့ပုံကို တွေ့ရသည် ..။ ၀င့်ဝါအဖြစ် ချပ်တင်းလုပ်ရင်း သားထွေးနဲ့ ငြိနေသော ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် က ခုထိ
သူမနဲ့ ချပ်လိုင်းမှာ ငြိနေတဲ့ သားထွေး ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို မမြင်ဘူးသေးဘူး ..။
စစ်ငြိမ်းမေတို့ ရဲမေမိုးမိုးခိုင်ကို သားထွေးနဲ့ အပြင်မှာ ချိန်းဖို့ ညွှန်ကြားလေသည် ..။
၀င့်ဝါ တဖြစ်လဲ ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် လဲ ချပ်လိုင်းမှာ သားထွေးကို ဆက်သွယ်သည် ..။ သားထွေးက မိုးမိုးခိုင် ကို “ ၀င့်ဝါကို ကိုသားထွေးကလဲ အရမ်းတွေ့ချင်နေတာ ...တွေ့မယ်လေ ...ဘယ်
ကိုလာခဲ့မလဲ..”လို့ ပြန်ပြောသည် ..။
မိုးမိုးခိုင် က ဆံပင်တိုတိုလေးနဲ့ ချစ်စရာနုနုငယ်ငယ် ပုံစံလေးမို့ သားထွေးကို သူမါတ်ပုံတွေ ပြလိုက်လို့ သားထွေး အရမ်း စ်ိတ်ဝင်စားသွားပြီ ။
သားထွေး မိုးမိုးခိုင် ကို ပန်းခြံထဲ ချိန်းဆိုလိုက်သည် ..။
ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်းနဲ့ အဖွဲ့က မိုးမိုးခိုင်ဆီကို လာမဲ့ သားထွေးကို အမိအရ ဖမ်းဖို့ စီစဉ်ထားသည် ။
ပန်းခြံထဲကို မိုးမိုးခိုင် ရောက်သွားသောအခါ သားထွေးကို ရေကန်စပ်က ခုံတန်းလျားလေး တခုမှာ ထိုင်စောင့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
“ ကိုသားထွေး ...”
“ ဟား....၀င့်ဝါ .......”
သားထွေး မတ်တပ်ထရပ်သည် ..။
ခပ်ဝေးဝေး က မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်နေသော ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း သားထွေးမျက်နှာကို သဲသဲကွဲကွဲ တွေ့လိုက်ပြီ....။ ဟုတ်သည် ..။ ဒီကောင်ဇာဇာရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲ တွေ့ကြရတဲ့ သား
ထွေးဘဲ ..။ တယောက်ထဲဘဲ ..။ ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့တွေ ကို ရယ်ဒီ ဖြစ်ဖို့ လမ်းလျောက်စကားပြောစက်နဲ့ သတိပေး လိုက်သည် ။
ရဲမေမိုးမိုးခိုင် သားထွေးဆီကို ပြေးသွားသည် ..။
သားထွေးက မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ လက်ကိုဆွဲပြီး အနားက မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆီကို ခေါ်သွားသည် ..။ မိုးမိုးခိုင် ရုတ်တရက် ကြောင်သွားသည် ..။ သားထွေးက ..ကိုယ်တို့ နေရာ သွား စကားပြော၇အောင် ၀င့်ဝါ လို့ ပြောပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခိုင်းသည် ..။ ပထမ စီစဉ်ထားတာက သားထွေးနဲ့ ခုံတန်းလျားလေးမှာ ထိုင်စကားပြောနေတုံး ထင်ထက်ထွန်းတို့ အဖွဲ့က လာ
ဖမ်းမှာ ..။အခုတော့ ရုတ်တရက် ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခိုင်းနေလို့ မိုးမိုးခိုင် အခက်ကြုံနေသည် ..။
“ အကို..ညီမ..ဆိုင်ကယ် မစီးဖူးဘူး..မစီးရဲဘူး ...ဒီမှာဘဲ ထိုင် စကားပြောရအောင်ပါ ..အကို ...” လို့ ပြောလိုက်သည် ..။
သားထွေး က အတင်းဘဲ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခိုင်းနေသည် ..။ သားထွေး ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခွကာ စက်နှိုးလိုက်သည် ..။ မတတ်သာဘဲ ဆိုင်ကယ်ပေါ် တက်လိုက်ရသည် ..။
ထင်ထက်ထွန်းတို့ အနောက်က လိုက်လာနိုင်မှာပါလို့ ယူဆသည် ..။
မိုးမိုးခိုင် ဆိုင်ကယ်ပေါ်ထိုင်လိုက်ပြီး သားထွေးရဲ့ ခါးကို ဖက်လိုက်တာနဲ့သားထွေး ဆိုင်ကယ်ကို မောင်းထွက်သည် ။ မိုးမိုးခိုင် စိတ်ထဲမှာ ပန်းခြံတနေရာရာ ဒါမှမဟုတ် ပန်းခြံထဲက အထွက်မှာ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်းတို့အဖွဲ့တွေက တားလိုက်လ်ိမ့်မည်လို့ ထင်နေပေမဲ့ သူမထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ ။ သားထွေးသည် ပန်းခြံထဲက ဆိုင်ကယ်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မောင်းထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီ ။
ငါ..ငါ...တော့ သူ့နဲ့ပါသွားပြီ ...။
အရပ်ဝတ်အရပ်စားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ချောင်းနေတာ ကိုသားထွေးများ သိနေရော့သလား ...။
သားထွေးက လမ်းမကြီးပေါ် အရောက် ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်မြှင့်လိုက်သည် ။ မိုးမိုးခိုင်လဲ လိမ့်ကျမှာ ကြောက်လို့သူ့ကို ဖက်ထားမိသည် ။ စိတ်ထဲမှာတော့ စိုးရိမ်ပူပန်နေသည် ။ ဒုရဲအုပ်
ထင်ထက်ထွန်းတို့ သူမဘယ်ကိုပါသွားသည် ကို ဘယ်လိုသိမလဲ ..။
သားထွေး မြို့ပြင်ကို ဦးတည်နေသည် ။ မိုးမိုးခိုင်လဲ ဘယ်ကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သတိမလစ်ဘဲ မှတ်နေသည် ။ ခြံဝင်းကျယ်ကြီးတခုထဲ ရောက်သွားသည် ။
ရေနံချေးဝနေတဲ့ သစ်သားအိမ်အိုကြီးတလုံး ရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်ကို ထိုးဆိုက်လိုက်သည် ။ လူသူအရိပ်အရောင် မတွေ့ရဘူး ..။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည် ။ သားထွေးက..“ ကဲ..၀င့်ဝါ ..အကိုတို့ အထဲဝင်ကြရအောင် ...”လို့ ခေါ်သည် ။
“ဒါ..ဒါ..ဘယ်သူ့အိမ်ကြီး လဲအကို ..အကို့အိမ်လား ... ”
“ မဟုတ်ဘူး...၀င့်ဝါနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး တွေ့နိုင်ဖို့ ရှာထားတဲ့ နေရာပါ ...”
“ ၀င့်ဝါ ကြောက်သလိုဘဲ ..အကို ...”
“ အကိုတယောက်လုံးရှိတယ် ...ဘာမှ မကြောက်နဲ့ ၀င့်ဝါ ...”
“ ဟင့်...အကို့ကိုကြောက်တာ ...”
သားထွေးက တဟားဟား အော်ရယ်လိုက်သည် ။
“ မကြောက်ပါနဲ့လေ ...ကိုက်မစားပါဘူး ...”
အိမ်ကြီးထဲကို ရောက်သွားတော့ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်သော ဧည့်ခန်းတခန်းကို တွေ့ရသည် ။
“ ထိုင်..၀င့်ဝါ ...ပန်းခြံထဲမှာ တွေ့ကြတာထက် ဒီနေရာမှာက ပို လွတ်လပ်တာပေါ့ ....”
သားထွေးက မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ ကိုယ်လုံးတွေကို စူစူးဝါးဝါး စိုက်ကြည့်နေရင်း ပြောလိုက်သည် ။
“ ၀င့်ဝါ ”
“ ရှင် ...အကို ..”
“ ၀င့်ဝါကို ပြစရာတခုရှိတယ် ...”
“ ဟုတ်ကဲ့အကို..ပြလေ..ဘာလဲ ...”
သားထွေးက သူဝတ်ထားတဲ့ နိုင်လွန်မိုးကာဂျာကင်အပါးစားလေးကို ချွတ်လိုက်သည် ..။ အောက်မှာ က ကြက်သွေးရောင်စပို့ရှည် ကို ၀တ်ထားသည် ။ သားထွေးက ဒီ စပို့ရှပ်ကိုပါ ဆက်ချွတ်လိုက်ပြန်သည် ။
သားထွေးရဲ့ ညာဘက်လက်မောင်းမှာ နဂါး တက်တူးကြီး ...။
မိုးမိုးခိုင် စိတ်ထဲ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ..။ အန္တရာယ်အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံတွေ မြည်ဟီးနေသည် ..။ အို ...သူ...သူ.....“ မင်းသား” “ မင်းသား” ....သားထွေးဟာ မင်းသား ..ဖြစ်နေပါလား ....။
“ အံ့သြသွားလား..၀င့်ဝါ ...”
“ အကို့လက်မောင်းက နဂါးတက်တူးကြီးကို တွေ့လို့ အံ့သြသွားလား...လို့ ..”
“ အင်း..အရမ်းလှတာဘဲ..ဆေးရောင်စုံနဲ့ . .တခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး ..အကို ..”
မိုးမိုးခိုင် ရဲ့ အသံတွေ တုန်ရီနေသလိုဘဲ ...။
ူလက်တွေ ခြေတွေ ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပြီ ...။ မင်းသား ...ရှေ့မှောက်မှာ သူမ ရောက်နေပြီ ..။
မိန်းမပျိုလေးတွေ ကို မုဒိန်းကျင့်နေသော ကာမဘီလူး မင်းသား နဲ့ သူမ ရင်ဆိုင်နေရပြီလေ ..။
“ သဘောကျလား ....”
“ ၀င့်ဝါကို ကြည့်ရတာ ကြောက်နေသလိုဘဲ ...လာ..အကို့ဆီ...”
မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ ခါးလေးကနေ ဆွဲဖက်လိုက်သည် ..။
“ အို..အကို ..မလုပ်ပါနဲ့ ..”
“ ၀င့်ဝါကို အကိုချစ်တယ် ...”
“ အကို....မလုပ်ပါနဲ့..၀င့်ဝါကြောက်တယ် ....”
“ချစ်တာ ကြောက်စရာမှ မဟုတ်တာကွာ.....”
သားထွေးက မလွှတ် ..။ အတင်းဖက်ထားသည် ။ “ ချစ်တယ်..၀င့်ဝါရယ် ....လာ..အခန်းထဲ သွားရအောင် ...”
“ မလုပ်ပါနဲ့...လွှတ်..လွှတ်ပါရှင် ..ကျမ..မိန်းမကောင်း တယောက်ပါ ...”
သားထွေး က မလွှတ်တဲ့အပြင် မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ တင်ပါးတွေကို ဆုတ်နယ်နေသည် ..။ တင်းမာလုံးထယ်သော တင်သားတွေကို နံပြားဖိုမှာ ဂျုံနယ်သလို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး ဆုတ်နယ်နေ
သည် ..။ ပွင့်အာနေတဲ့ မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေကိုလဲ သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးနဲ့ ငုံကာ စုတ်သည် ..။
မိုးမိုးခိုင် သည် သူ့သန်မာလှတဲ့ လက်တွေထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေသည် ။
မိုးမိုးခိုင် သားထွေး နဲ့ အခန်းထဲကို ပါသွားသည် ..။
သားထွေး ရဲ့ သန်မာတဲ့ လက်တွေနဲ့ ချုပ်ကိုင်ပြီး ခေါ်ဆောင်သွားတာကို မိုးမိုးခိုင် မတွန်းလှန် နိုင် ။
အခန်းထဲမှာ ကုတင်ကြီးတလုံး ရှိနေသည် ..။ သားထွေး မိုးမိုးခိုင်ကို ကုတင်ကြီးပေါ်ကို ကန့်လန့်ဖြတ် မှောက်ရက် အနေအထားနဲ့ တင်လိုက်သည် ..။ မိုးမိုးခိုင် နုတ်က တတွတ်
တွတ် တောင်းပန်နေသည် ။ မိုးမိုးခိုင် အနေနဲ့ သားထွေးလို ဗလကောင်းကောင်း အရပ်မြင့်မြင့် ယောက်ျားကြီးတယောက်ကို ပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာက မလွယ်ဘူး ။
သားထွေး သည် သူမ ရဲဖြစ်တာကို သိနေသလား မသိဘူး ။ တွေ့တွေ့ချင်းဘဲ ဆိုင်ကယ်ပေါ်အတင်း တက်ခိုင်းပြီး လာဖမ်းမဲ့ ရဲတွေ လက်ကနေ ရုန်းထွက်ခဲ့သလို အချိန်ဆိုင်းငံ့မနေဘဲ မုဒိန်းကျင့်ဖို့ လုပ်နေပြီ ..။ မှောက်ရက် အနေအထား ဖြစ်နေသော မိုးမိုးခိုင်ကို သားထွေး လက်တဖက်နဲ့ ကျောပြင်ကို တွန်းထားပြီး ကျန်တဲ့လက်နဲ့ ပြေလုလုထမိန်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။
“ အိုး..အကိုရယ်..မလုပ်ပါနဲ့..တောင်းပန်ပါတယ် ....”
သားထွေးက တဟားဟား အော်ရယ်လိုက်ပြီး ပင်တီပါးလေးနဲ့ တင်းကားနေတဲ့ မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ကို ဖျန်းကနဲဖျန်းကနဲ သူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ ရိုက်လိုက်သည် ။
“တောက်..လှလိုက်တဲ့ ဖင်တွေ ...”
ပင်တီလေးကို ဆွဲချွတ်သည် ။လက်တဖက်ထဲနဲ့ ချွတ်ဖို့မလွယ်လို့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲချွတ်ချိန် မိုးမိုးခိုင် ကိုယ်လုံးကို ဘေးကို လှိမ့်ထွက်ပြီး ရှောင်လိုက်သည် ။
“ ဟိတ်..ဘယ်ပြေးမလို့လဲ..ဒီလို ပြေးလို့ လွတ်မယ် ထင်လို့လား ...”
သားထွေး မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ ခြေထောက်ကို ဖမ်းဆွဲသည် ။
“ လွှတ်လွှတ် ..ရှင် မယုတ်မာပါနဲ့ ....”
“ ဟားဟား...ဟား...ဟား.....မင်းတို့ ချပ်တင်းလုပ်တဲ့လူကို ဘယ်ကမှန်း ဘယ်သူမှန်းမသိဘဲ အယုံလွယ်တာကိုး ...သင်္ခန်းစာ ဘဲပေါ့ ၀င့်ဝါ .....မင်း အသားအနာမခံချင်နဲ့..
ငါကတော့ငါလိုချင်တာကို ရအောင်ယူမှာဘဲ ....”
သားထွေး သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေ ကို တခုမကျန် ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ..။
“ဟိတ်..၀င့်ဝါ....မင်း နောက်ပိုင်းမှာ ငါ့ကို ကြိုက်သွားမှာပါ ...ငါက မင်းကို ကောင်းကောင်း ဖြုတ်ပေးမှာ ...ဒီမှာ ကြည့် ...”
သားထွေး က သူ့လိင်တန်နီညိုညိုကြီးကို အရင်းကနေ ကိုင်ဆုတ်ခါ ပြသည် ..။
မိုးမိုးခိုင်သူ့လိင်တန်ထိပ်ခေါင်းလုံးကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်နေသည် ။ မိုးမိုးခိုင် သည် ပိုးဇာနဲ့အတူ “ မင်းသား” ရဲ့ အပြာကားတွေကို အထပ်ထပ် အခါခါ ကြည့်ထားသည် ။
မင်းသားရဲ့ လိင်တန်ထိပ်ဖူး ဒစ်ကြီး မှာ မှဲ့နက်တလုံး ရှိတာကို သေသေချာချာ မှတ်မိသည် ..။ အခု သားထွေး ဒစ်မှာ ဘာမှဲ့မှ မရှိဘူး ။
သားထွေး သည် ညာဖက်လက်မောင်းမှာ မင်းသားမှာ ရှိတဲ့ နဂါးရုပ်တက်တူးကြီး ရှိနေပေမဲ့ လိင်တန်ထိပ်မှာ မှဲ့မပါတာကြောင့် မင်းသား မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို မိုးမိုးခိုင် သိလိုက်
သည် ..။ သားထွေးက သူမကို ကုတင်ကြီးပေါ် တွန်းလှဲလိုက်သည် ။
မွေ့ရာပေါ်ကို ပုံပျက်ပန်းပျက် ကျသွားချိန် သားထွေး ၀ုန်းကနဲ ခုန်အုပ်လိုက် သည် ။
တက်ခွသည် ။ နောက်ဆုံး ခံစစ် အနေနဲ့ မိုးမိုးခိုင် ရုတ်တရက် သူ့ရင်ဝကို ဆောင့်ကန်ထည့်လိုက်သည် ။ ထင်မထားလို့ သားထွေး ခံလိုက်ရသည် ။
အနောက်ကို လန်ကျ သည် ။
ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း နဲ့အဖွဲ့ သားထွေးကို ဖမ်းဆီးဖို့ လေးဖက်လေးတန်က ၀ိုင်းဝန်း ချဉ်းကပ်သွားကြဆဲ သားထွေးက ရုတ်တရက် မိုးမိုးခိုင် ကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ကာ မောင်းထွက်သွားလို့
အမြန် သူတို့ရဲကားတွေပေါ်တက်ခါ လိုက်ကြပေမဲ့ သားထွေးကို အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့ကြတော့ ။
ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေ ကိုယ်တိုင် ထင်ထက်ထွန်းတို့ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လမ်းဆုံလမ်းခွတွေက ယဉ်ထိန်းရဲများကို သားထွေးရဲ့ ပုံပမ်း..မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ ပုံပမ်း..ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစား နဲ့ တွေ့ရှိရင် သတင်း
ပို့ဖို့ ပြောကြတော့ မြို့သစ်တခု ထိပ်နားက လမ်းဆုံ က ယဉ်ထိန်းရဲတယောက် က သူ တွေ့မိလိုက်ကြောင်း ပြန်ခေါ်တာကြောင့် စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်းတို့ အဖွဲများ ထိုနေရာကို
ချက်ချင်း လိုက်သွားကြသည် ..။
ထင်ထက်ထွန်း လဲ သူညံ့ဖျင်းလို့ မိုးမိုးခိုင် အခုလို သားထွေးအနောက်ကို ပါသွားရသည် ဆိုပြီး စ်ိတ်ထိခိုက်နေသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ လဲ မြန်ဆန်သော သားထွေးရဲ့ လုပ်ရပ်ကို အံ့သြနေ
သည် ..။ သူတို့ လိုက်နေသော ကောင်သည် သာမန် မုဒိန်းကောင်မျိုး မဟုတ်ဘဲ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိသော ဒုစရိုက်ကောင် ဖြစ်နေလို့ ..။
မိုးမိုးခိုင် အန္တရာယ်ကင်းပါစေ ..ဆုတောင်းရင်း အပူတပြင်း လိုက်လံ ရှာဖွေနေကြ သည် ။
သားထွေး သူ့ကို ဆောင့်ကန်သော မိုးမိုးခိုင်ကို မညှာတော့ ..။ မိုးမိုးခိုင် ဒီတခါ ထပ်ကန်သောအခါ ကန်တဲ့ခြေထောက်ကို ဖမ်းဆွဲလိုက်သည် ။
“ အသားမနာချင်နဲ့လေ ..အေးအေးဆေးဆေး ငါလုပ်တာကို ခံလိုက် ...”
သားထွေးရဲ့ သန်မာတဲ့ လက်တွေ နဲ့ ဖမ်းချုပ်တာ ခံလိုက်ရသည် ..။ ကြီးမားတဲ့ လက်သီးဆုတ်ကြီးနဲ့ မျက်နှာကို ချိန်ရွယ်ခံရလို့ သားထွေးကို ပြန်မခုခံရဲတော့ ။
သားထွေးက နိုင်ငံခြားအပြာဇာတ်ထုပ်တွေထဲကလို အမွှေးမရှိ ပြောင်တင်းခုံးမို့နေသော မိုးမိုးခိုင် အင်္ဂါစပ်ကြီးပေါ်ကို တံတွေးတွေ ဖွတ်ကနဲ..ဖွတ်ကနဲ ထွေးချလိုက်ပြီး သူ့လက်ဖ၀ါးထဲကိုလဲ
တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ တံတွေးများထွေးထည့်ကာ သူ့လိင်တန်ကို ဒီတံတွေးတွေနဲ့ သုတ်လူးလိုက်သည် ..။
“ အို့.....အား ........”
သားထွေး ရဲ့ လိင်တန်ကြီး သူမအင်္ဂါစပ်ထဲကို မညှာမတာ ထိုးသွင်းလာလို့ မိုးမိုးခိုင် မချိမဆန့် အော်ညည်းလိုက်သည် ။ တခါမှ မကြုံဘူးသေးတဲ့ အပျိုစင် အင်္ဂါစပ်ရဲ့ အတွင်းသားနုနုလေး
တွေကို တအားကြီး ပွတ်တိုက်တော့ နာလွန်းလို့ တအားအားအော်နေပေမဲ့ သားထွေးကတော့ ဆက်တိုက်ဘဲ ထိုးဆောင့်နေသည် ...။ မိုးမိုးခိုင်ရဲ့ လုံးဝန်းတဲ့ ရင်သားစိုင်တွေကို အားရပါး
ရဘဲ ဆုတ်နယ်နေရင်း ဖိဖိဆောင့်ထည့်နေသည် ..။ ကျပ်နေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲ လိင်တန်အတုတ်ကြီး နဲ့ ဖိထိုးတော့ တဖျစ်ဖျစ် နဲ့ အင်္ဂါစပ် ကွဲပြဲ စုတ်ပြတ်သွားပြီလား ထင်မိရသည် ။
သားထွေး ဆောင့်ထည့်သည် ..။
မိုးမိုးခိုင် အော်သည် ..။ သားထွေး တအားကို ဆောင့်သည် ..။ ဆက်တိုက် ..။
“ အင်း...အင်း...အင်း .....”
သားထွေး သုတ်ရေတွေ တဖျတ်ဖျတ် နဲ့ မိုးမိုးခိုင် အင်္ဂါစပ် အခေါင်းထဲ ပန်းထုတ်လိုက်သည် ..။ လုံးတင်းနေသော ရင်သားတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ရင်း လိင်တန်တဆုံး ထိုးနှစ်ခါ အရသာ ခံနေခိုက် ..
၀ုန်းဆိုတဲ့ အသံကြီးနဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးကြီး ပွင့်ထွက်သွားသည် ..။
ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေ နဲ့ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်းတို့ သေနတ်များချိန်ရွယ်ရင်း သားထွေးနဲ့ မိုးမိုးခိုင်တို့ ရှိနေတဲ့ အခန်းထဲ ပြေးဝင်လာကြသည် ။
“ ဟေ့ ...သားထွေး ...ရပ်လိုက် ...”
“ ဟာ....မိုးမိုးခိုင် .....”
ပေါင်တန်တွေ ဖြဲကားထားတဲ့ မိုးမိုးခိုင် အပေါ်က တက်ခွထားရင်း အင်္ဂါစပ်ပေါက်ထဲ လိင်တန်ကြီး ထိုးသွင်း ထားသော သားထွေးကို တွေ့လိုက်ကြပြီး ထင်ထက်ထွန်း က သားထွေးရဲ့ ဆံပင်ကနေ ဆွဲကိုင်ပြီး ဆွဲဖယ်ပစ်သည် ..။
“ ခွေးမသား ..မုဒိန်းကောင် . ..”
“ အား . . ...”
အရေတွေ စိုရွှဲနေတဲ့ သားထွေး ရဲ့ လိင်ချောင်း သည် မိုးမိုးခိုင် အင်္ဂါစပ်ထဲက ပွက်ကနဲ ထွက်သွားသည် ..။ လိင်တန်ထိပ် ဒစ်ခေါင်းမှာ သွေးစသွေးနတွေ ပေရေနေသည် ။ အတင်းကျင့်လိုက်တယ် ဆိုတာ တွေ့နေရသည် ..။
အချိန်မမှီလိုက် ..။ မိမိရဲ့ ရဲမေ ကို တက်ဖြုတ်တာ ခံလိုက်ရလို့ စစ်ငြိမ်းမေ အရမ်း ခံပြင်းသွားသည် ။ သားထွေးကို ၀ိုင်းကန်ကြသည် ..။ ဒီအချိန်သည် သူတို့ရဲတွေအတွက် ဆော်ဖို့
အကောင်းဆုံး ..။ ခုခံလို့ ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ဆော်ရပါသည် လို့ အကြောင်းပြလို့ရသည် ..။ ထင်ထက်ထွန်း က အကြမ်းဆုံး ..။ ဒေါသတကြီး ကန်နေသည် ..။
ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျနေသော သားထွေးကို နောက်ထပ် ရောက်လာတဲ့ ရဲတွေ က ရိုင်ဖယ်ဒင်တွေ နဲ့ ထုရိုက်ကြသည် ..။
“ ချ..ချ....ခွေးမသား ..လူယုတ်မာ ...ဆော်ပစ် ...”
စစ်ငြိမ်းမေ သူ့လူတွေကို မတားဘူး ..။
သွေးအေးအေးနဲ့ ကြည့်နေသည် ..။
သားထွေး ..မင်းသား မဟုတ်ဘူး....လို့ မိုးမိုးခိုင် က စစ်ငြိမ်းမေကို ပြောသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ က စောင်တထည် ရှာလာပြီး မိုးမိုးခိုင် ကိုယ်ပေါ်ကို လွှမ်းခြုံပေးလိုက်သည် ။
အိုက်အက်စ်စီယူ ရဲ့ စစ်ကြောရေးအခန်းငယ်ထဲ သားထွေးကို သံစားပွဲနဲ့ တွဲပြီး လက်ထိပ်ခတ်ထားသည် ..။ သားထွေးကို ဖမ်းလာချိန်ထဲက အခုအထိ ရေတောင် မတိုက် ။ သားထွေး
ရဲမေကို တက်ကျင့်လိုက်လို့ ရေရေလည်လည် ခံနေရပြီ ..။ “ ရေသောက်ချင်တယ် ....”
စစ်တဲ့ရဲအရာရှိက မကြားချင်ယောင် ဆောင်နေသည် ..။
“ မေးတာကိုဖြေ ..မင်း နဲ့ မင်းသား သိလား ....”
“ မသိဘူးလို့ အခါ၁၀၀လောက် ဖြေပြီးပြီဗျာ ...”
“ သေချာလား ....”
“ သေချာတယ်..ကျုပ် ကသူ့ကို အားကျလို့ လိုက်လုပ်တာ..ကျုပ်က ကော်ပီကက် ...ကျုပ်တက်တူးက အတု ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့လဲ သိပြီးပြီဘဲ ...”
“ မညာနဲ့နော် ...ခင်ဗျား ကျန်းမာရေး ထိခိုက်သွားနိုင်တယ် ...”
“ မတရားမလုပ်နဲ့ဗျာ..ခေတ်ပြောင်းသွားပြီ ...”
“ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကို တိုင်ချင်လို့လား ...မင်းအဖေတွေ မင်းကို မကယ်ခင် မင်း အသက်ပျောက်သွားမယ် ..မုဒိန်းကောင် ...”
“ ခင်ဗျား..ခြိမ်းခြောက်နေတာလား ...”
စစ်ငြိမ်းမေ တဖက်ခန်းကနေ ကြည့်နေသည် ..။ သားထွေးသည် မင်းသား မဟုတ်ဘူး ..။
မင်းသားကို ရအောင် ဖမ်းရမည် ..။ သားထွေး က ရဲမေမိုးမိုးခိုင်ကို ကျုင့်လိုက်လို့ စစ်ငြိမ်းမေ အပါအ၀င် ရဲတွေ တော်တော် ထိခိုက်တုန်လှုပ်သွားသည် ..။ အသွင်ယူ ( အန်ဒါကာဗာ ) လုပ်ပြီး စုံစမ်းတာကို အမျိုးသမီးရဲမေတွေကို ခိုင်းတာ ကို ခေတ္တရပ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလား အထက်လူကြီးတွေ စဉ်းစားနေပြီ ။
ရဲမေ ပိုးဇာ က လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် မိုးမိုးခိုင် ကို မုဒိန်းအကျင့်ခံလိုက်ရလို့ နောက်တွန့်မသွား ..။ သူမ နဲ့ အဆက်ရနေသော ရဲရဲတောက် သည် မင်းသား ဖြစ်နိုင်ခြေ ၉၅% ရှိတာကြောင့်
မင်းသားကို ရအောင် ဖမ်းမည်လို့ စစ်ငြိမ်းမေကို ပြောသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေ လဲ ဒီတခါတော့ အမှားအယွင်း ဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူး..ပိုးဇာ....ငါ အလုပ်ပြုတ်တာထက် မိုးမိုးခိုင် နစ်နာသွားတာက
ပြန်အဖတ်ဆည်လို့မရဘူး ...လို့ ပိုးဇာကို ပြောသည် ..။
ပိုးဇာလဲ ချပ်လိုင်းမှာ ရဲရဲတောက်ကို ဆက်သွယ်သည် ..။ ရဲရဲတောက် သည် သားထွေးကို သိပုံမရ ..။ သားထွေး ရဲအချုပ်ထဲ ရောက်နေတာကိုလဲ သိပုံမရ ..။ လူတွေက ရဲတွေကို အထင်
သေးထားသည် ..။ ရဲတွေက ဘာမှမသိဘူး..ဘာမှ မလုပ်ဘူးလို့ ထင်ထားသည် ..။ ရဲရဲတောက် သည် ပိုးဇာကို တွေ့ချင်ကြောင်း ပြောသည် ..။ အွန်လိုင်း မြန်မာပွန်းတွေ ကြည့်ဘူးလား
လို့မေးတော့ ပိုးဇာလဲ မကြည့်ဖူးဘူးလို့ ပြန်ဖြေသည် ..။ ရဲရဲတောက် က လိင်ကိစ္စ..ကာမဆက်ဆံတဲ့ အကြောင်းတွေ ပိုးဇာကို မေးသည် ..။ ပိုးဇာ ယောက်ျားနဲ့ ကြုံဘူးသလား မေး
သည် ..။ ငယ်ငယ်က လက်နဲ့ အာသာဖြေဖျောက်ဘူးလား မေးသည် ။
ရဲရဲတောက် နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ချိန်းလိုက်ကြသည် ..။ ရဲရဲတောက် သည် မင်းသားဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ဘဲ လို့ ပိုးဇာက ပြောသည် ။
ဇေယျာကျော် မောင်းလာတဲ့ တိုယိုတာလင်းကရူဆာ ကားကြီး ဘိုဘိုငြိမ်းတို့ ခြံထဲကို ချိုးဝင်လိုက်ချိန် တိုက်ထဲက ရဲဝတ်စုံနဲ့ မိန်းမတယောက် ထွက်လာတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။
ဘိုဘိုငြိမ်းရဲ့ အမကြီး ..။ အမအကြီးဆုံး ...။
ရဲအရာရှိမမကြီးက ကားပေါ်က ဆင်းလာသော ဇေယျာကျော် ကို ပြုံးပြ နုတ်ဆက်သည် ..။
“ဟေး..ဇေယျာကျော် ..မတွေ့တာ ကြာပြီ ...”
“ ဟုတ်တယ်...မမ ..အလုပ်နဲနဲများနေတာနဲ့ ....”
မမစစ်ငြိမ်းမေ က အမိုးဖြူကိုယ်ထည်အနက် နဲ့ ခေါင်မိုးမှာ မီးတန်းအနီ ပါတဲ့ ရဲကားပေါ်ကို တက်ရင်း ...“ အေးအေး....ဘိုဘို ..အိမ်ထဲမှာ ရှိတယ် ....သွားလိုက်အုံးမယ်..ဇေယျာကျော် ..”
လို့ ပြောသည် ..။
“ ဟုတ်ကဲ့ မမ ”
မမစစ်ငြိမ်းမေရဲ့ စွင့်ကားတောင့်တင်းတဲ့ တင်ပါးတွေကို ဇေယျာကျော် မြင်လိုက်သည် ..။ ဘိုဘို နဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းမို့ ဘိုဘို့အိမ် အမြဲ ရောက်တော့ ဘိုဘို့အမတွေ နဲ့ သူ ရင်းနှီးနေခဲ့သည် ..။ မမစစ်ငြိမ်းမေ သည် လူတကာငေးမောရလောက်အောင် ဖြူဖွေး တောင့်တင်း ချောလှသလို မမစစ်ငြိမ်းမေရဲ့ အောက် က မမငြိမ်းအေးသူ ကလဲ မမစစ်ငြိမ်းမေလိုဘဲ
ချောလှတောင့်တင်းတာဘဲ ..။ ဘိုဘိုငြိမ်းရဲ့ အိမ်ကို ရောက်တိုင်း ဘိုဘိုငြိမ်းရဲ့ အမနှစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပတွေကို ဇေယျာကျော် မိန်းမောသာယာမိခဲ့ရသည် ..။ မမစစ်ငြိမ်းမေ ရော
မမငြိမ်းအေးသူရော အခုထိ ရီးစားချစ်သူ မရှိကြသေးဘူး ..။ ဒီလောက် ချောလှတဲ့ မိန်းမတွေက သူတို့ကို ချစ်ကြိုက်ကြသူတွေ လိုချင်ကြသူတွေ တပုံကြီး ရှိနေပါရက်နဲ့ ဘာကြောင့် ချစ်သူရီးစား မရှိကြလဲ ဇေယျာကျော် နားမလည်ဘူး ..။
မမစစ်ငြိမ်းမေ က ရဲအရာရှိ ဖြစ်သလို မမငြိမ်းအေးသူက တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေမကြီး ဖြစ်သည် ။ ဇေယျာကျော် သည် မိဘတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ၀င်လုပ်ကိုင်နေတော့ ရံဖန်ရံခါ ရဲ
တပ်ဖွဲ့နဲ့ ပြောရဆိုရ အကူအညီတောင်းရတာတွေ ကြုံရသလို တရားရုံး ရှေ့နေတွေနဲ့လဲ လုပ်ကိုင်ရတာတွေ ရှိတော့ သူငယ်ချင်း ဘိုဘိုငြိမ်းရဲ့ မျက်နှာနဲ့ အမများဖြစ်တဲ့ မမစစ်ငြိမ်းမေ
နဲ့ မမငြိမ်းအေးသူ တို့က အကူအညီပေးကြသည် ..။
ဇေယျာကျော် ကလဲ ဒီမမချောချောလှလှကြီးတွေကို ကျေးဇူးမမေ့ ..။ သိတတ်သည် ..။ မမတို့ ကြိုက်တဲ့ စားစရာတွေ အမြဲ ၀ယ်လာပေးသည် ..။ ကျွေးသည် ..။ ဘိုဘိုငြိမ်းနဲ့က ညီအကိုလို ခင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းအခြာတွေ မဟုတ်လား ...။ သူတို့အိမ်သည် ဇေယျာကျော် အတွက် စားအိမ်သောက်အိမ် ဆိုလဲ မမှား ..။
မနက်ငါးနာရီ ထိုးပြီ ..။
စစ်ငြိမ်းမေ တညလုံး မအိပ်သေး ..။ လူလဲနဲ့ သားထွေးကို စစ်နေတော့ သူမကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်နေသည် ။
သားထွေးသည် အင်တာနက် ချပ်လိုင်းကနေ ညိ တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို စိတ်ကြိုက် မုဒိန်းကျင့်ပြီးသောအခါ လူကုန်ကူးဂိုဏ်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပတ်သက်နေသော ခေါင်းမိုးဟိန်းမိုး ကို
လက်လွှဲရောင်းချပစ်သည် ဆိုတာကို စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်လို့ မိုးဟိန်းမိုးကို ဘယ်မှာ တွေ့ရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာကို စစ်မေးနေကြတာဖြစ်သည် ..။ သားထွေးမှာ နေ့ရောညပါ အစားမကျွေး ရေမတိုက်ဘဲ စိတ်ကိုရော လူကိုပါ ညှင်းပန်းထားလို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေပြီ ..။
မိုးဟိန်းမိုး ဘယ်မှာရှိတယ် ဆိုတာ သားထွေးသိသည် ..။ သားထွေး မပြောတာက မိုးဟိန်းမိုးကို အသေကြောက်လို့ ။
သူပြောမှန်းသိရင် မိုးဟိန်းမိုးက ရေဆုံးမိုးဆုံး သူ့ကို မြေလှန်ရှာပြီး သတ်မှာ...။
သူထောင်ကျနေရင် မိုးဟိန်းမိုးက ထောင်ထဲမှာ သူ့ကို သတ်မှာ ..။ လတ်တလောလဲ ရဲတွေက သူတို့ရဲမေ မိုးမိုးခိုင်ကို မုဒိန်းကျင့်ထားလို့ အခဲမကျေဘူး ..။ ရက်ရက်စက်စက် ကို လုပ်ကြတာ ပြန်ပြောလို့တောင် မကောင်းဘူး ..။ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ လက်တုံ့ပြန်ကြတာ ..။ ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်နေသည် ..။ ရေကလဲငတ်..ဘိုက်ကလဲဆာ..အိပ်လဲ မအိပ်ရ ။
စစ်ငြိမ်းမေ သိနေသည် ။ ဒီကောင် Break ဖြစ်တော့မည် ..။ ရဲလုပ်လာတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ သိနေသည် ..။ နဲနဲလေး ထပ် Push လုပ်လိုက်ရင် ဒီကောင် ပြောတော့မှာဘဲ ။
သူရောင်းစားလိုက်တဲ့ သူဇာအောင် နဲ့ ဇာဇာ တို့ကို လူယုတ်မာတွေ လက်က ကယ်ထုတ်ပေးဖို့ စစ်ငြိမ်းမေတို့ ရဲတွေမှာ တာဝန်ရှိနေသည် ။ တခြား မိန်းကလေးတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်များ
မိုးဟိန်းမိုးက ဖါဇာတ်သွင်းပြီး နယ်စပ်ကို ရောင်းချပို့ပစ်လိုက်ပြီလား မသိဘူး ..။
ထင်ထက်ထွန်း ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေသလဲမသိဘူး ..။
စစ်ကြောရေးအခန်းငယ်ထဲက သားထွေးရဲ့ အော်သံတွေ စုးစုးဝါးဝါး ထွက်လာသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ ကတော့ ဒီလိုအသံတွေ ကို ကြားနေကျဖြစ်လို့ ရိုးနေပြီ ။
ထင်ထက်ထွန်း ချွေးတွေသံတွေ နဲ့ အရှေ့ထွက်လာသည် ..။
“ ရဲမှူး ...ရပြီ ..ဟိုခွေးသူခိုးရဲ့ နေရာရပြီ ...သွားဝုန်းလိုက်ရမလား ..”
“ အေး ...ကောင်လေးတွေ စတင်းဘိုင် ထားထားတယ် မှုတ်လား ..ဘယ်မှာလဲ..ဒီကောင် က ...”
ထင်ထက်ထွန်းက POLICE လို့ အဖြူရောင်စာလုံး အရှေ့နဲ့ အနောက်မှာ ပါတဲ့ စပို့ရှပ်အနက်ရောင်ကို ကောက်ဝတ်နေရင်းက သားထွေး ပြောပြတဲ့ မိုးဟိန်းမိုး ရဲ့ နေရာကို ပြောပြသည် ။
“ ကဲ..ရွှေ့မယ် ..အားလုံး ....ဒီကောင်တွေက သေမထူးနေမထူးတွေ ..ခုခံနိုင်တယ် ..သတိရှိပါစေ ..အားလုံးကြားလား .....”
“ ဟုတ်ရဲမှူး ....”
မစ်ဆူဗစ်ရှီ အမျိုးအစား ရဲကားအပြာ နှစ်စီး သည် ရန်ကုန်မြို့စွန် ဖက်ကို ဦးတည်နေသည် ..။ ကားပေါ်မှာ စစ်ငြိမ်းမေ သည် မိုးဟိန်းမိုးတို့ကို ဖမ်းဆီးရာမှာ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သူ့လူတွေကို တတွတ်တွတ်မှာကြားနေသည် ။
မိုးဟိန်းမိုး အာခေါင်တွေ ခြောက်ပြီး နိုးလာသည် ။
ကိုယ်တုံးလုံး..ပက်လက်ကြီး အိပ်နေရာက နိုးလာတာ ..။
လိင်တန်ကြီးက မာတောင်နေသည် ။
ကုတင်ဘေးက နာရီကို ကြည့်လိုက်သည် ..။ ငါးနာရီ ဘဲ ရှိသေးသည် ..။ လူးလဲထထိုင် လိုက်ပြီး ကုတင်ဘေးက ရေသန့်ဘူးကို ဆွဲယူပြီး မော့သောက်လိုက်ရင်း သူ့နဘေးမှာ အိပ်နေ
တဲ့ သူဇာအောင်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သည် ။ သူဇာအောင် သည် သူ့ကိုကျောပေးပြီး တစောင်းလေး အိပ်ပျော်နေသည် ။ စောင်ပါးလေးကို ခြုံထားပေမယ့်သူဇာအောင်ရဲ့ ပေါင်တန်နဲ့ တင်ပါးတခြမ်း က စောင်လွတ်နေလို့ တွေ့နေရသည် ။ ညက သူဇာအောင်ကို မိုးဟိန်းမိုး အကြိမ်ကြိမ် ကျင့်ကြံသည် ။ သူစိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးရင် နယ်စပ်ကို ပို့မယ့် အော်ကုလားတို့ လက်ကို အပ်လိုက်မှာ ဖြစ်သည် ။ သားထွေး လာပို့တဲ့ ဇာဇာဆိုတဲ့ကောင်မလေး က သူဇာအောင်ထက် ပိုလန်းသည် ။ ဒါပေမဲ့ စွာသည် ။ကျားသစ်မလေးလိုဘဲ ကုတ်တတ်ဖဲ့တတ်သည် ။
မိုးဟိန်းမိုးတို့ကို ဒီလို အာခံလို့မရ ။ လုပ်စားနေတာ ကြာပြီ ။ ဇာဇာ အပိုးကျိုးသွားအောင် မြေတိုက်ခန်းထဲ လှောင်ထားလိုက်သည် ။အစားမကျွေးဘဲ ပစ်ထားလိုက်သည် ။ သဘောပေါက်သွားအောင် ဒါဏ်ပေးထားလိုက်သည် ။ မြေတိုက်ထဲမှာ ဇာဇာ့အပြင် အရင်ဖမ်းထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ရှိနေသည် ။ သူတို့ကိုတော့ “ ကျင့် ”ထားပေးလို့ ခိုင်းတာလုပ်
ကြသလို ခံမပြောကြတော့ ။ ဆုပေး ဒါဏ်ပေး စနစ်နဲ့ သူတို့ကို “ ကျင့် ”ပေးတာ ။ စကားနားထောင်ရင် အခွင့်အရေး ပေးသည် ။ စကား နားမထောင်ရင် ထမင်းမကျွေး ..။
သူတို့သည် သူတို့မိသားစု နဲ့ တသက်လုံး ပြန်တွေ့ကြရမည် မဟုတ် ။ တဖက်နိုင်ငံကိုေ၇ာင်းစားခံကြရပြီး ပြည့်တန်ဆာဘ၀ကို ရောက်ကြရမည် ။ မိုးဟိန်းမိုး တို့နဲ့တွေ့ရင် သူတို့ဘ၀
ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီ်ရင် သာမှတ် ။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ဘိန်းစွဲသလို ချင်တင်းမလုပ်ဘဲ မနေနိုင် ဖြစ်ကြရပြီး သူတို့ နဲ့ ဆက်သွယ်နေတဲ့ တဖက်ကလူတွေက ဘယ်လိုလူတွေ ဆိုတာ
မသိဘဲ ယုံကြလို့ ဘ၀ပျက်ကြရပြီ ..။
မိုးဟိန်းမိုး ပွဲတိုင်းကျော် လိင်တန်ချောင်းက မတ်မတ်တောင်နေပြန်ပြီ ..။
ညဦးပိုင်းက သူဇာအောင်ကို ကောင်းကောင်းဆွဲပြီးပြီမို့ ထပ်မဆွဲချင်တော့ ..။
မြေအောက်ခန်းထဲက လှောင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေထဲက ဘယ်သူ့ကို ခေါ်ဖြုတ်ရမလဲ မိုးဟိန်းမိုး စဉ်းစားလိုက်သည် ..။
အင်း ..၀တ်ရည် ဆိုတဲ့ကောင်မလေး ကို သူ ရွေးလိုက်သည် ။
မြေတိုက်ထဲကို ဆင်းသွားပြီး ၀တ်ရည် ကို အိပ်နေရာက နှိုးပြီး အပေါ်ပြန်ခေါ်ခဲ့သည် ။
“ ၀တ်ရည် ...မင်း အ၀တ်တွေ ချွတ်လိုက်စမ်း ...”
မိုးဟိန်းမိုးလဲ ၀တ်ရည် အ၀တ်ချွတ်တာကို ကြည့်ရင်း သူ့အ၀တ်တွေကိုလဲ ချွတ်ပစ်သည် ..။ မိုးဟိန်းမိုးရဲ့ ညိုမဲမဲ လိင်တန်ကြီးက တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ..။
၀တ်ရည်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဘာအ၀တ်မှမရှိတော့ဘဲ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်နေပြီ ။ တင်းမာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ရင်သားတွေက သိသိသာသာ ရှိလှသည် ..။ ၀တ်ရည်သည် မိုးဟိန်းမိုးတို့ ရက်
ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ထားတာတွေကြောင့် မကျေနပ်ပေမဲ့ ဘာမှ မဆန့်ကျင်ရဲ ..။
“ လာ...ငါ့ကို စုတ်ပေးစမ်း ...”
၀တ်ရည် ကျိုးနွံစွာနဲ့ မိုးဟိန်းမိုးရဲ့ မတ်မတ်တောင်နေသော လိင်တန်တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီးကို စုတ်ပေး သည် ..။
၀တ်ရည်ရဲ့ အစုတ်ကို ခံရင်း မိုးဟိန်းမိုး နဘေးမှာ အိပ်နေတဲ့ သူဇာအောင်ကို သတိရသွားပြီး သူဇာအောင်ရဲ့ တင်ပါးကြီးကို ဖျန်းကနဲ ရိုက်ထည့်သည် ..။
“ သူဇာအောင် ..ထစမ်း ..ဟဲ့..ကောင်မ..အိပ်ပုတ်ကြီးလှချည်လား ..”
သူဇာအောင် နိုးလာပြီး ထထိုင်သည် ..။
“ ဘာငိုင်နေတာလဲ ..ဒီမှာ ၀တ်ရည် စုတ်ပေးနေတာ တွေ့တယ်မှုတ်လား ...နင်လဲ လာစုတ် ...အတူတူ စုတ်ကြ ...”
သူဇာအောင်လဲ ၀တ်ရည် နဲ့အတူ မိုးဟိန်းမိုး ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို စုတ်ပေးရသည် ။မိုးဟိန်းမိုး ကျေနပ်စေရန် ၀တ်ရည် နဲ့ တချိန်ထဲမှာ အလုအယက် စုတ်နေရသည် ..။ မိုးဟိန်းမိုးလည်း
နိုင်ငံခြားအပြာဇာတ်ကားတွေထဲကလို ကောင်မလေးနှစ်ယောက် က သူ့လိင်ချောင်းကို တချိန်ထဲ လုကာ စုတ်ပေးနေတာကို ကျေနပ်သဘောကျနေသည် ..။ စုတ်တဲ့အသံတွေ က တိတ်ဆိတ်နေချိန် ပြွတ်ပြတ်နဲ့ အသံတွေ ထွက်နေသည် ။
“ ဟဲ့..တလှည့်စီ လုပ်မနေနဲ့ ..၀တ်ရည်က ဒစ်ကို စုတ်နေရင် နင်က ငါ့ဘောတွေကို ယက် ...”
ကောင်မလေးတွေ ရဲ့ ရင်သားအိအိတွေကို မိုးဟိန်းမိုး ဆုတ်နယ်နေသည် ။
၀တ်ရည်လဲ ကောင်းကောင်း မစုတ်ရင် နဘန်ကျင်းတတ်သော မိုးဟိန်းမိုးကို အသေလန့်ရလို့ သူ့ဒစ်ပြဲကြီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်လိုက် လျာနဲ့ယက်လိုက် လုပ်နေရချိန် သူဇာအောင်လဲ မိုးဟိန်းမိုးရဲ့ ဂွေးစိတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပေးရင်း ဂွေးစိတွေ ရဲ့ အောက်ဖက်ကို လျာနဲ့ ထိုးကာ ကလိပေးနေပေသည် ။
“ အား...ကောင်းတယ်....အိုး...စုတ်...စုတ် ”
မိုးဟိန်းမိုး သူဇာအောင် ကိုတော့ ဖင် ချပြီးပြီ ..။ ၀တ်ရည်ကိုတော့ မချရသေး ..။ ၀တ်ရည်ကို ဖင်ချမည် လို့ သူ စိတ်ကူးနေသည် ..။ ၀တ်ရည်ရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေ ကြားထဲ သူ စမ်းလိုက်သည် ။ ခရေပွင့်လေးကို လက်ညှိုးနဲ့ ကလိလိုက်သည် ။
ထိုအခိုက် သူ့အိပ်ခန်းတံခါး ၀ုန်းကနဲ အသံနဲ့အတူ ပွင့်သွားပြီး အပြာရင့်ရောင်..ကာကီရောင် ယူနီဖေါင်းတွေ နဲ့ ရဲတွေ တပြုံကြီး ပြေးဝင်လာတာ တွေ့လိုက်ရ သည် ..။
ီရဲတွေ ညာသံပေးပြီး ၀င်လာတာ ..။
သေနတ်တွေ နဲ့ ချိန်တဲ့ရဲတွေ က ရှေ့ဆုံးက ..။
တုတ်တွေကိုင်ထားတဲ့ရဲတွေလဲပါသည် ။ မိုးဟိန်းမိုး ၀တ်၇ည်နဲ့ သူဇာအောင်ကို တွန်းဖယ်ပြီး ခေါင်းအုံးအောက်က သေနတ်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်သည် ။ ရဲတယောက် က သူ့ကို တုတ် နဲ့
ရိုက်လိုက်လို့ သေနတ်လွတ်ကျသွားသလို နာကျင်လွန်းလို့ စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်လိုက်သည် ။
မိုးဟိန်းမိုးကို ရဲများ ၀ိုင်းကန်ကျောက် ရိုက်နှက်ကြသည် ။
၀တ်လစ်စလစ် ဖြစ်နေသော ၀တ်ရည် နဲ့သူဇာအောင်တို့ကို ရဲမေတွေက စောင်တွေနဲ့ ခြုံပေးထားပြီး သူတို့ရဲ့အ၀တ်အစားတွေကို ရှာဖွေပေးနေသည် ။
ရဲများ မြေတိုက်ခန်းထဲကို ရောက်သွားပြီး သော့ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေကို တွေ့ကြရသည် ။
“တောက်..တော်တော် ယုတ်မာ ရက်စက်တဲ့ကောင်တွေဘဲ ...”
စစ်ငြိမ်းမေ နေ့ရောညပါ အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့ မအိပ်ရသေး ..။
မိုးဟိန်းမိုးကို သူတို့ ချက်ချင်း စစ်မေးကြသည် ။ နယ်စပ်ကို မိန်းကလေးတွေကို ပို့ဆောင်တဲ့ အော်ကုလား ဆိုတဲ့ လူကုန်ကူးတဲ့ ကောင် ကို ရဖို့ အော်ကုလား ဘယ်မှာလဲ ဆိုတာ
စစ်မေးကြသည် ။ မိုးဟိန်းမိုးက သားထွေးထက် ရက်စက်ခေါင်းမာမည်လို့ ထင်ထားရပေမဲ့ ထင်သလို မဟုတ်တာ တွေ့ရသည် ။ နဲနဲ အသားနာတာနဲ့ စစ်ငြိမ်းမေတို့ သိလိုတာတွေ အားလုံးကို ပြောပြသည် ။
အသားအနာမခံနိုင်ဘူး ..။ ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်း သည် မိုးဟိန်းမိုးကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်းပြီး စစ်တော့ မကြာလိုက်ဘဲ အော်ကုလား ရှိတဲ့နေရာကို ပြောပြသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေတို့ ဆက်တိုက်ဘဲ
အော်ကုလား ကို သွားဝိုင်းကြသည် ။ အော်ကုလား သည် မိူးဟိန်းမိုးလိုဘဲ ကမ်းကုန်အောင်မိုက်သည်လို့ နံမည်ကြီးနေတဲ့လူဆိုးတယောက် ..။ နယ်စပ်ကို အမြဲရောက်နေတဲ့ကောင် ..။
သေနတ်နဲ့ ခုခံဖို့ကြိုးစားသည် ။ အော်ကုလားကို အရှင်ဖမ်းချင်လို့ စစ်ငြိမ်းမေတို့ သေနတ်နဲ့ ပစ်မဖမ်းဘဲ ၀င်လုံးပြီး ဖမ်းသည် ..။
အော်ကုလားတို့ကို သူ့လက်အောက်က ရဲအုပ်တွေကို စစ်ခိုင်းထားပြီး စစ်ငြိမ်းမေ အိမ်ပြန်ခဲ့သည် ။ အရမ်းပင်ပန်းနေသည် ။ အိမ်ပြန်ရေချိုးချင်သည် ။ အိမ်ထဲကို ၀င်ဝင်ချင်း မောင်လေးဘိုဘိုရဲ့ သူငယ်ချင်းဇေယျာကျော် နဲ့တိုးသည် ။ ဇေယျာကျော်က ဘိုဘိုနဲ့ ထိုင်စကားပြောနေသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေကို နုတ်ဆက်သည် ။ ဇေယျာကျော်က စစ်ငြိမ်းမေ
ကို စားသောက်ဆိုင် ကောင်းတာ တွေ့ထားလို့ ကျွေးချင်ကြောင်း ပြောသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေက သွားတာပေါ့ ဇေယျာကျော် ..အခု လတ်တလောတော့ မမ အလုပ်အရမ်းများနေတယ် ..
ညတောင် မအိပ်ရသေးဘူး ...လို့ ပြောလိုက်ပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်ခဲ့လိုက်သည် ။
ဒီဇေယျာကျော် ဆိုတဲ့ ကောင်ချောလေးကို စစ်ငြိမ်းမေ ကြည့်ကြည့်ပြီး တိတ်တခိုး စိတ်လှုပ်ရှားနေမိတာ ကြာပြီ ..။ သူ့မျက်လုံးတွေ...။ သူ့မျက်လုံးတွေ က သိပ်စူးရှသည် ..။ စစ်ငြိမ်း
မေကို ကြည့်တဲ့ပုံက ချစ်နေတဲ့ပုံ ..။ ဇေယျာကျော် ကို အိပ်မက် မက်မိခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ် ပါဘဲ ..။
သူ့ကို ကျမ ချစ်မိနေပြီလား ....။
ပိုးဇာ ချပ်လိုင်းမှာ ရဲရဲတောက်ကို စောင့်နေသည် ။ ရဲရဲတောက် ခုရက်ပိုင်းတွေမှာ ပေါ်မလာ ..။
ပိုးဇာလဲ ရဲရဲတောက် မလာလို့ စိတ်သောကရောက်နေရတဲ့ပုံနဲ့ ရဲရဲတောက်အတွက် စာတွေ ချန်ထားသည် ။ ရဲရဲတောက် ဘာတွေ လုပ်နေလဲ ..။ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ။ ဘာကြောင့် ချပ်
လိုင်းကို မလာလဲ ..။ မိုးဟိန်းမိုးတို့ အော်ကုလားတို့ သားထွေးတို့ ဖမ်းမိတာများ သူ သိသွားလို့လား ...ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ က ပိုးဇာ ခေါင်းထဲ ရှိနေကြသည် ။ သို့ပေမဲ့ ပိုးဇာ မင်းသား
ရဲ့ မုဒိန်း ဗီဒီယို အသစ်စက်စက်တခု ထပ်ထွက်လာတာကို မင်းသားရဲ့ ဗီဒီယိုတွေ တင်နေကျ ဒေါက်တာဏှာကြီး ဒေါ့ကွန်း မှာ တွေ့လိုက်သောအခါ မင်းသား သည် သူလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်နေဆဲဘဲ ဆိုတာ တွေ့လိုက်ရ သည် ။
ရဲရဲတောက် ခုတလော ပျောက်နေတာ ကောင်မလေး အသစ်တယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်နေလို့ကိုး .. ။ မုဒိန်းကားမှာ နေ့စွဲပါတာကြောင့် ရဲရဲတောက် ပိုးဇာနဲ့ လာချပ်တင်းမလုပ်ဖြစ်တဲ့ရက်
မှာ ရိုက်တာ ဖြစ်နေလို့ ..။ မင်းသားသည် ရဲရဲတောက်ဘဲလို့ ပိုးဇာ မှတ်ချက်ချသည် ။ ခုနောက်ပိုင်း မင်းသားသည် မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသည် ..။ ညာလက်မောင်းက နဂါးတက်တူးကြီးကတော့ ထင်းနေသည် ။
မင်းသား ရဲ့ လိင်တန်ထိပ်နားမှာ မှဲ့ပါတာ မိုးမိုးခိုင် သတိထား ထောက်ပြလို့ ပိုးဇာလဲ သိရှိရတော့ ဒီအချက်ကို မင်းသားမှတ်တမ်းထဲမှာ အသေအချာရေးထည့်ပြီး ဒုရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေကိုလည်း
အသိပေး သတင်းပို့ထားသည် ။ ပိုးဇာလည်း ဒေါက်တာဏှာကြီးဆိုက်က မင်းသားရဲ့ မုဒိန်းကားအသစ်ကို ဘာများသဲလွန်စရမလဲလို့ သေသေချာချာ ကြည့်သည် ..။ အသံကိုလဲ နားထောင် သည် ။ မုဒိန်းအကျင့်ခံရတဲ့ ကောင်မလေး ပြောတာ..ငိုယိုတာတွေကိုလည်း သေသေချာချာ နားထောင်သည် ..။ အထပ်ထပ် ကြည့်လိုက် စဉ်းစားလိုက် ..။ မင်းသား ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေကို ကြည့်ရတော့ ပိုးဇာလဲ တချက်တချက် မင်းသားရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို တွေ့ပြီးစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်လာရသည်..။
ကာမစိတ်တွေ နိုးကြား ထကြွလာသည် ။
အို..ငါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဘဲ..ဒီလူယုတ်မာတွေကို ထောင်ထဲပို့နိုင်ဖို့ လုပ်နေတာ..ဒီကာမစိတ် ထကြွတာတွေကို ဖျောက်ပစ်မှ ဆိုပြီး မိမိစိတ်ကို မိမိ ထိန်းချုပ်လိုက် သည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ မိုးဟိန်းမိုး..အော်ကုလား..နဲ့ သားထွေးတို့ကို ဖမ်းဆီးတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထက်ကို အစီရင်ခံစာတွေ ရေးနေခိုက် ဒုရဲအုပ်ဇင်မျိုးလင်း ရုံးခန်းထဲ ၀င်လာသည် ။
“ ထူးတယ်..ရဲမှူး ..ကျနော်တို့ အိပ်စဘစ်ရှင်းနစ်စ် ဘယ်သူဆိုတာ သိပြီ ..အဲဒါ ...”
“ ဆွဲစိဖို့ လိုနေပြီ ဆိုပါတော့ ...”
“ ဟုတ်ကဲ့..ရဲမှူး ..သူ့နံမည်က ထိန်သာဝင်း ...အသက်၃၀ ...ပြည်သာယာရေကူးကန် မှာ အလုပ်လုပ်တယ် ....”
“ ကောင်းပြီလေ ..ဒီလူ အဲ့မှာ ရှိမရှိ ကြည့်လိုက်..ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ မင်းဘဲ ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်သွား...စိလိုက်ပေါ့..”
“ ကျမကို စက်နဲ့ သတင်းပို့ ..”
ဇင်မျိုးလင်း အလေးပြုပြီး ထွက်သွားသည် ..။
အင်း ..အင်တာနက် ကို သုံးပြီး လူတွေလဲ အမျိုးမျိုး တဏှာထကြွကြတာ ဒီကေ့စ်ကလည်း မိန်းကလေးတွေဆီကို သူ့ကိုယ်တုံးလုံးပုံတွေ..လိင်တန်ဆာပုံတွေ ဓါတ်ပုံ..ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ပြီး
အီးမေးလ်နဲ့ ပို့နေလို့ သူတို့ စုံစမ်းနေတာ ..ခုတော့ သိပြီ..ဘယ်သူဆိုတာ ..ဒီဆိုက်ကိုကောင် ကို သူတို့ ဆွဲစိတော့မည် ..။
အင်း..သေချာအောင် ငါလဲ လိုက်သွားလိုက်တာ ကောင်းပါတယ် ...။
ခဏကြာတော့ ဇင်မျိုးလင်း စက်နဲ့ သတင်းပို့သည် ။
ထိန်သာဝင်း ဆိုတဲ့လူ ရှိနေသည် ...တဲ့ ..။
“ ခဏစောင့် ..ကျမလာခဲ့မယ် ...”
စစ်ငြိမ်းမေ ပြည်သာယာရေကူးကန်ကို သွားလိုက်သည် ။ ရေကူးကန် မှာရှိနေသော ဇင်မျိုးလင်းတို့ အဖွဲ့ကို မီးစိမ်းပြ အိုကေ လိုက်သည် ..။
ထိန်သာဝင်းက ရေကူးကန်က အလုပ်သမား ..။
ဇင်မျိုးလင်းတို့ ဖမ်းဆီးတဲ့ အလုပ်ကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဘဲ လုပ်လိုက်နိုင်ကြသည် ။
ထိန်သာဝင်း သည် သူလုပ်ခဲ့တာတွေကို ဘယ်သူမှ မလိုက်နိုင်ဘူး မသိနိုင်ဘူး ထင်ထားလို့ ရဲများ လာရောက်ဖမ်းဆီးသောအခါ အံ့အားသင့်နေသည် ။
ဇင်မျိုးလင်းတို့ အလုပ် အေးဆေးစွာ ပြီးဆုံးသွားလို့ စစ်ငြိမ်းမေလည်း စိတ်အေးရသည် ..။
ရဲမေ မိုးမိုးခိုင်ကို သားထွေး ကျင့်ကြံတာ ခံလိုက်ရလို့ သူမအတွက် ကြီးမားတဲ့ သင်္ခန်းစာတခု ရခဲ့လို့ အလုပ်ကို အောက်က အရာရှိတွေနဲ့ဘဲ လွှဲမထားတော့ဘဲ ကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်
သူ့အဖွဲ့တွေ ရော သူရော အရပ်ဝတ်နဲ့ မို့ ရေကူးကန်ထဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဘာမှ မဖြစ် ..။ လူတောင် မသိလိုက် ..။
တပည့်ငယ်သားတွေ ပြန်သွားကြပြီး စစ်ငြိမ်းမေ ဆာသလိုလို ရှိတာနဲ့ ဒီရေကူးကန်က ဆိတ်သားကဘတ် နံမည်ကြီးတာမို့ နေ့လည်စာအချိန်လဲ ရောက်နေပြီ ဆိုတော့ စားသောက်ဆိုင်
လေးမှာ ထိုင်လိုက်သည် ..။
စားသောက်ဆိုင်လေးသည် ရေကူးကန် ရဲ့ ဘေး မှာ ရှိနေသည် ..။ စားပွဲ ထိုင်ခုံတွေ မှာ ထိုင်နေရင်း ရေကူးနေတဲ့လူတွေကို ကြည့်နိုင်သည် ။ စားပွဲထိုးလေး ရောက်လာလို့ ဆိတ်သားကဘတ် နဲ့ နံပြား မှာလိုက်သည် ။
အမှတ်မထင် ရေကူးကန်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်မိသည် ..။ လူတယောက် ရေကူးနေသည် ..။ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် ကူးနေသည် ။
စားပွဲထိုးလေး လာချပေးသော ရေသန့်ဘူးကို ဖွင့်ပြီး စစ်ငြိမ်းမေ ရေမော့သောက်သည် ။ စားသောက်ဆိုင်လေးထဲ လူရှင်းနေသည် ။ ခါတိုင်းနေ့များမှာ အခုအချိန် နေ့လည်စာ စားတဲ့
လူတွေ ပြည်နေတတ်သည် ..။ ဒီနေ့တော့ သူမမှအပ လူမရှိဘူး ..။
ရေကူးကန်ဘက်ကို ပြန်ကြည့်မိသည် ..။ ရေကူးနေတဲ့သူ မရှိတော့ ...။
အော်..သူ ရေကူးကန် ထဲက တက်လာပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ခေါင်းသုတ်နေသည် ..။
ဇေယျာကျော်ပါလား ...။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လာတိုးနေသည် ..။
ဇေယျာကျော် ကို အ၀တ်အစားအပြည့်နဲ့ဘဲ တွေ့ဘူးတာ ..။ ခုတော့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာ..ရေကူးဘောင်းဘီ အပြတ်လေးနဲ့ ..တွေ့နေရသည် ...။
ဟား...တကယ့် ကိုယ်လုံးဘဲ ..။ ကြွက်သားတွေ က ဖုထစ်နေသည် ..။ လက်မောင်းမှာလဲ ကြွက်သားတွေနဲ့ ..။ ရင်ဘတ်ခလယ်မှာ အမွှေးနုလေးတွေ နဲ့..။ ရွှေဆွဲကြိုး မျှင်မျှင်လေး
ဆွဲထားသည် ..။ ရေကူးဘောင်းဘီက ရေစိုနေသည် ..။ သူ့ပစ္စည်းကြီး ရဲ့ အရာကြီး က ထင်းနေသည် ..။ အိုး..အပျိုကြီး ရင်တွေ ခုံသွားရ သည် ။
ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဇေယျာကျော်ရဲ့ တကိုယ်လုံးကို စုံချီ ဆန်ချီ ငေးစိုက်ကြည့်နေမိဆဲ ..သူ...သူ...ဇေယျာကျော် သူမရှိတဲ့ဖက် ကို လျှောက်လာနေပါလား ...။
အို ....ဟုတ်သည် ...။
“ ဟေး....မမ ......”
“ အော်....ဇေယျာကျော် ....”
“ မမ ဘာလာလုပ်တာလဲ..ရေလာကူးတာလား ......”
“ ဟင့်အင်း...ကူးပါဘူး.....ကိစ္စလေးတခု ရှိလို့ ......”
“ မမနဲ့တွေ့ရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ...ကျနော်က နေ့တိုင်းလိုဘဲ ဒီမှာ ရေလာကူးတယ် ....”
“ အေး..ကောင်းတာပေါ့...ဘိုဘို့ကိုရော ခေါ်မလာဘူးလား ....သူ က ငပျင်းလေး....အိမ်မှာဘဲ ဂိန်းထိုင်ကစားနေတာ ....”
“ ခေါ်မယ်...မမ ...ခေါ်မယ် .....ဒါနဲ့...မမ တယောက်ထဲလား .....”
“ ဟုတ်တယ် ဇေယျာကျော် ....”
“ ခဏနော်..ကျနော် အ၀တ်အစား သွား ၀တ်လိုက်အုံးမယ် ...”
“ အေး..အေး ..”
မှာထားတဲ့ ဆိတ်သားကဘတ် နဲ့ နံပြား ရောက်လာသည် ..။
ဇေယျာကျော် နဲ့ တွေ့လို့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေတာနဲ့ ဆိတ်သားကဘတ်ကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး ။
ခဏကြာတော့ ဇေယျာကျော် စစ်ငြိမ်းမေ ရှေ့ကို ပြန်ရောက်လာသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေ နဲ့ ဇေယျာကျော် စကားတွေ ထိုင်ပြောကြတာ စစ်ငြိမ်းမေသည် ဒီနေ့မှာ အလုပ်တက်တဲ့နေ့ ဆိုတာတောင် မေ့သွားသည် ..။ ဇေယျာကျော် နဲ့ စကားစဖြတ်ပြီး အလုပ်ကို ပြန်
သွားဖို့တောင် စိတ်မပါတော့ဘူး ။
ဇေယျာကျော် က ညပိုင်း သူတွေ့ထားတဲ့ အစားအသောက်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ကို သွားစားဖို့ ခေါ်သည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေလည်း သဘောတူလိုက်သည် ..။ ဇေယျာကျော် က သူလာခေါ်မည် လို့
ပြောသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ အလုပ်ကို ပြန်ကားမောင်းခဲ့ရသည် ..။ စိတ်တွေက ဇေယျာကျော် ဆီမှာ ကျန်ခဲ့သည် ..။
ဇေယျာကျော် နဲ့ အစားထွက်စားမည်လို့ အိမ်မှာပြောတော့ ညီမ နဲ့ မောင်က သဘောကျနေသည် ။
လိုက်ကြအုံးမလား...မေးတော့..မမကြီးတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားကြပါ ...လို့ ညီမက ပြောသလို မောင်ဖြစ်သူက “ ဇေယျာက မမကြီးကို ကြိုက်နေတာကြာပြီ ...ကျနော်သိတယ်..” လို့
စစ်ငြိမ်းမေလဲ ဇေယျာကျော်ကို သဘောကျနေတာ ကြာပါပြီ ။ မြင်းကမလှုပ်ဘဲ ခုံက မလှုပ်ချင် ..။ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ရဲ့ ဘ၀က ယောက်ျားလေးက စလာတာကို စောင့်ကြရတာ ။
ခေတ်ကတော့ စစ်ငြိမ်းမေတို့ ခေတ်ထက်တော့ ဘာမှမဆိုင်အောင်ကိုဘဲ ပွင့်လင်းလာနေပြီ ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အရွယ်သိပ်မလင့်ခင် ရီးစားထားမှ ဖြစ်တော့မည် ။
ညနေ ဇေယျာကျော် သည် သူခါတိုင်းစီးနေကျ တိုယိုတာလင်းခရူဆာကားကြီးနဲ့ မလာဘဲ တံခါးနှစ်ပေါက် တိုယိုတာစလီကာ ကားလေးနဲ့ လာသည် ။ ။ကားထဲထိုင်ကြသောအခါ ဇေယျာကျော် နဲ့ စစ်ငြိမ်းမေတို့ ပုခုံးချင်း ထိကပ် လူချင်းနီးကပ်လွန်းနေသည် ..။ ဇေယျာကျော် လိုက်ကျွေးချင်တဲ့ဆိုင် က ဝေးသည် ..။ လမ်းမှာ ဇေယျာကျော်
ကားဂီယာပြောင်းတော့ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ပေါင်တန်တွေကို မတော်တဆ ကိုင်မိထိမိရ သည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိရသည် ။
ဇေယျာကျော်က ထမင်းစားကြတုံး..“ မမ သိပ်လှတာဘဲ ...” လို့ သူ့ကို ငေးကြည့်ရင်း ပြောလိုက်လို့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်မိသလို ရှက်သလိုလို ဖြစ်မိသည် ..။ ရှက်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး ...အသက်လဲ ၃၀ကျော်နေပြီ ...လင်မရဘဲ နေနေအုံးမယ်..လို့ ကိုယ့်ဖါသာ စိတ်ထဲမှာ ပြောနေမိရသည် ..။ ဇေယျာကျော် သည် ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်တင်မြင့် ဇာတ်လမ်းတွေထဲက ဇာတ်ကောင်လို ပုံစံမျိုး လို့ စစ်ငြိမ်းမေ ထင်သည် ။
ဗလကောင်းကောင်း မျက်ခုံးထူထူ နှာတန်ပေါ်ပေါ် မေးရိုးလေးထောင့်နဲ့ ဆံပင်လှိုင်းတွန့်နဲ့ ...။ မောင်လေးဘိုဘို ပြောဖူးတာတော့ ဇေယျာကျော်ကို ကျောင်းတုန်းက မိန်းကလေးတွေ
ဇေယျာကျော် က စစ်ငြိမ်းမေ ကို အစားအသောက်တွေ ပုဂံထဲ ခပ်ထည့်ပေးလိုက် ..ဘာလိုလဲ မေးလိုက် နဲ့ ဂရုစိုက်တာကို ပြသ သည် ။
အချိုပွဲတွေလဲ မစားချင်ပါဘူး ပြောတာလဲ အတင်းဘဲ မှာကျွေးသည် ။
အပြန်လမ်းမှာ ဇေယျာကျော် က နောက်နေ့ နေ့လည်စာ အတူတူထွက်စားဖို့ ချိန်းနေပြန်သည် ..။
“ မသိသေးဘူး ဇေယျာ ..မမ က အလုပ်များတယ် ..မမ ပြန်ပြောမယ်လေ ...” လို့ ပြောလိုက်ရသည် ..။
နောက်တနေ့မနက်မှာ တကယ်ဘဲ စစ်ငြိမ်းမေ အလုပ်များပါသည် ။
သတင်းဆိုးတခု ၀င်လာသည် ..။
အင်တာနက်ပေါ် မင်းသား တင်လိုက်လို့ သူနဲ့ အိပ်တဲ့ ကောင်မလေး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရင်မဆိုင်နိုင်ဘဲ အရှက်တကွဲဖြစ်..မိဘဆွေမျိုးတွေ ရဲ့ အပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တာကို ခံရလို့ သတ်သေသွား
တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ကြားလိုက်ရသည် ။ စီအိုင်ဒီ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ သေမှုသေခင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ယူနစ်က ရဲမှူးဦးကျော်စွာဦး က သေသူကောင်မလေး အလောင်းကို သွားစစ်ဆေးတာကို
စစ်ငြိမ်းမေလဲ လိုက်ခဲ့စေချင်သည် ။ စစ်ငြိမ်းမေ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို လိုက်သွားလိုက်သည် ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ ကောင်မလေး နံမည်က ယုယုမိုးသွယ် ....။
ယုယုမိုးသွယ် နဲ့ မင်းသား ရဲ့ ကာမပွဲ ဗီဒီယို ကို ပိုးဇာပြလို့ စစ်ငြိမ်းမေ တွေ့ရသည် ။
ယုယုမိုးသွယ် နဲ့က မုဒိန်းကျင့်တာမဟုတ်ဘူး ..။ အလိုတူသည် ။ ယုယုမိုးသွယ် နဲ့ ဆက်ဆံရာမှာလဲ သူ့မျက်နှာကို မပြ ..။ နောက်ကျောကဘဲ တွေ့ရသည် ..။
ထုံးစံအတိုင်း မင်းသားရဲ့ စံချိန်မှီ လိင်တန်ရှည်ရှည် တုတ်တုတ်ကြီးကို ကျောချမ်းစရာ ရင်တုန်စရာ စစ်ငြိမ်းမေ တွေ့ရသည် ။ ဒါကြီးကို မြင်တိုင်း စစ်ငြိမ်းမေ ပေါင်ကြားထဲက ယားသလိုလို
တစစ်စစ်နဲ့ ...ဖြစ်ဖြစ်နေမိသည် ။
ယုယုမိုးသွယ် ကိုယ်တိုင်က မင်းသားကို ကြည်ကြည် ဖြူဖြူ ပေးတာ ...။ ယုယုမိုးသွယ် မင်းသား ရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို အားရပါးရ စုတ်ပေးနေတာ စစ်ငြိမ်းမေရော ပိုးဇာရော မျက်တောင်မခတ်တမ်း ငေးမော ကြည့်နေမိကြသည် ။ အလုပ်တာဝန်အရ သဲလွန်စ ရှာဖွေဖို့ ကြည့်ကြရပေမဲ့ ပိုးဇာရော စစ်ငြိမ်းမေရော ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကြားက မိန်းမအင်္ဂါ အလှရတနာမှာ ကာမရှေ့ပြေး အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေကြရသည် ။ သဘာဝဟာ သဘာဝပါဘဲ ။
မဆီမဆိုင် မင်းသားရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်သည် ဇေယျာကျော် နဲ့ တူသည်လို့စစ်ငြိမ်းမေ ထင်သည် ။
ပိုးဇာကို မင်းသားလို့ သူတို့ ထင်နေတဲ့ရဲရဲတောက် ကို မာယာသုံးပြီး အပြင်မှာတွေ့ဖို့ ဆွယ်ဖို့ မှာကြားရင်း စစ်ငြိမ်းမေ အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်သည် ..။
မင်းသားရဲ့ ကာမစပ်ရှက်တာတွေ ကြည့်ခဲ့လို့ စစ်ငြိမ်းမေ အိမ်ရောက်တော့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်လှုပ်ရှားနေသည် ။ တကယ်တော့ စစ်ငြိမ်းမေသည် အလုပ်တာဝန်တွေကို ရှေ့တန်းတင်
ကာ အချစ်ရေးကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့သည် ။တက်တက်ကြွကြွ ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ခဲ့လို့ နှစ်တိုတို နဲ့ ဒုရဲမှူး ရာထူးကို ရရှိခဲ့သည် ။ အထက်လူကြီးတွေ သဘောကျကြတာကြောင့် ရာထူး
တိုးခဲ့သည် ..။ သို့ပေမဲ့ လတ်တလော ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရဲမေ မိုးမိုးခိုင် မုဒိန်းကျင့်ခံလိုက်ရတာ စစ်ငြိမ်းမေ ရဲ့ တာဝန်မကင်းသလို ဖြစ်နေသည် ..။
ဒါကြောင့်လဲ ဒီ မင်းသား ဆိုတဲ့ မုဒိန်းကောင်ကို အမိဖမ်းပြလိုသည် ..။
ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်းကလဲ လူငယ်တွေအထဲ ရောပြီး မင်းသားအကြောင်းကို လိုက်လံ စုံစမ်းနေသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ အိပ်လို့မရဘူး ...။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်ညာနေပေမဲ့ စစ်ငြိမ်းမေ တစုံတခု ကို တောင့်တနေသည် ။
သဘာဝကို လွန်ဆန်ပြီး နေခဲ့ပေမဲ့ သွေးသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူသားတယောက်မို့ သဘာဝစိတ်ဆိုတာက ဖြစ်ပေါ်စမြဲဘဲ ။
ညနေက ရဲမေပိုးဇာနဲ့ မင်းသား ဆိုတဲ့ကောင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗီဒီယို ကို ကြည့်ကထဲက သဘာဝကာမစိတ်တွေ လာနေခဲ့သည် ။ စိတ်တွေနိုးကြွခဲ့သည် ။ အိပ်ခါစက နဲနဲမှေးကနဲ အိပ်
ပျော်သလိုလို ဖြစ်သွားတော့ အိပ်မက်မက် သည် ။ အိပ်မက်ထဲ မင်းသား က သူ့ကို အတင်းဘဲ ကိုင်တွယ်နမ်းစုတ်ပြီး ကာမစပ်ရှက်ဖို့ ကြိုးစားသည် ။ ဒီအိပ်မက်ကြောင့်လဲ သူ အခု စိတ်တွေဂယောက်ဂရက် ဖြစ်နေရသည် ..။
သူ တောင့်တလိုချင်နေတာက ယောက်ျားတယောက် ဘဲ ..။ ယောက်ျားတယောက် နဲ့ အနမ်း..အကိုင်အပွတ်...သံဝါသပြုတာကို လိုချင်နေတာ ...။ တောင့်နေတာ ...။ ဒီတခါတော့
ဇေယျာကျော် အချစ်တောင်းခံလာရင်တော့ မငြင်းတော့ဘူး ..။ လက်ခံလိုက်တော့မည် ..။ တကိုယ်ထဲ အထီးကျန်ဆန်ပြီး အဖေါ်မဲ့နေရတဲ ဘ၀ကို ချုပ်ငြိမ်းလိုက်တော့မည် ။ စိတ်လွတ်
ကိုယ်လွတ် ခံစားလိုက်မည် လို့ စဉ်းစားနေသည် ။
မင်းသားရဲ့ လိင်တန်ကြီးကို မြင်ယောင်နေသည် ။ ဒီလို လိင်တန်မျိုးကြီးနဲ့ တခါမှ မကြုံဘူးသေးတဲ့ မိမိရဲ့ အင်္ဂါစပ် ထဲကို ထည့်လို့ရှိရင် အရမ်းများ နာကျင်လေမလား ..တွေးကြောက်သလို တချို့လိင်ကိစ္စကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ယောက်ျားတွေက မနာကျင်အောင် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်ပေးသွားနိုင်သည် လို့လဲ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးသည် ။
အပျိုဖေါ်ဝင်ခါစထဲက ဒီလိုစိတ်မျိုး ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်ဖါသာ လက်နဲ့ အစိကို ပွတ်ချေပြီး အာသာဖြေဖျောက်ခဲ့သည် ။ အတွင်းထဲကိုတော့ တခုခုနဲ့ ထိုးထည့်ဖြေဖျောက်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့ ။
တအားပွတ်ပွတ်ချေလိုက်ရင်..တကိုယ်လုံးက အကြောတွေ တဖျန်းဖျန်း နဲ့ ထူးထူးကဲကဲကောင်းသွား ကျင်သွားတဲ့ “ ပြီးခြင်း ”အရသာကို အကြိမ်ကြိမ်ဘဲ ခံစားဖူးခဲ့သည် ..။တခါတရံ အတွင်းထဲ
က လှိုက်လှိုက်ပြီး ယား လာတတ် သောအခါ တစုံတခု နဲ့ ထိုးထည့်ကာ ဖြေဖျောက်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်ရသည် ။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ အရမ်းဘဲ အနေရခက်ခဲ့သည် ။ ယောက်ျား နဲ့ နေပစ်လိုက်ချင်စိတ်တွေ တအားဖြစ်သည် ။ စိတ်တွေ ထိန်းချုပ်ပြီး နေခဲ့ရတဲ့ သက်တမ်းက ကြာခဲ့ပြီ ။
အခုလဲ မင်းသား ကောင်မလေး အင်္ဂါစပ်ကို လျာနဲ့ ယက်ပေးတာတွေ..သူ့အတန်နဲ့ ထိုးဆောင့်ပေးတာတွေ ပြန်စဉ်းစားမြင်ယောင်နေချိန် လုပ်နေကျဖြစ်နေတဲ့ အစိကို လက်နဲ့ ချေပွတ်
တာ အလိုလို လုပ်မိနေသည် ။ ပွတ်သည် ။ပွတ်သည် ။ တအားတအားချေပွတ်နေမိသည် ..။ အင်...အင်...အင် ......အင် .....။
တင်းမာပြီးထောင်လာတဲ့ နို့သီးလေးတွေကိုလဲ ချေနေမိသည် ။
အရမ်းအရမ်း လူးလှိမ့်နေရသည် ။ “ပြီး”တဲ့အထိ ပွတ်ချေလိုက်မှ နဲနဲငြိမ်ကျသွားသည် ။ ပွတ်နေတဲ့အချိန် ဇေယျာကျော် ကို မှန်းမိသည် ။ ပြီးမှ ကိုယ့်ဖါသာ ရှက်နေမိသည် ။ အိုလေ..
ဘယ်သူမှ သိတာမှ မဟုတ်တာ..လို့ စိတ်ဖြေရသည် ။ တိတ်တဆိတ် အိပ်ခန်း အလုံထဲ အပျိုကြီးမမ တယောက်ရဲ့ စိတ်ရူးထတဲ့ လှို့ဝှက်ဇာတ်လမ်းလေး ဘဲ လေ ...။
မနက် ယူနစ်က ကားနဲ့ လာကြိုသည် ။
မနက်စောစောစီးစီး လူသေမှုတခု ဖြစ်ပြန်လို့ ..။ ထုံးစံအတိုင်း အင်းစိန်စီအိုင်ဒီက ဖုန်းဆက်ခေါ်သည် ။ အင်တာနက် နဲ့ ပတ်သက်တိုင်း စစ်ငြိမ်းမေတို့ကို ခေါ်သည် ။ ပူးပေါင်းပြီး သဲလွန်စရှာဖွေဖို့နဲ့ အမှုဖြစ်ပျက်တဲ့ အကြောင်းရင်းခံကို မှတ်တမ်းတင် ထားဖို့ ..။
ဒီတခါက အင်တာနက်ပေါ် လိင်ဆက်ဆံတာ အတင်ခံလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေး ရဲ့ မိဘနှစ်ပါး အဆိပ်သောက် သတ်သေလိုက်ကြတာ ...။
မိန်းကလေးကတော့ မြစ်ထဲ ခုန်ချသွားသည် ။ အလောင်း ပြန်ရှာလို့ မရသေးဘူး ..။
ဒီလိုကိစ္စတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပျက်နေသည် ..။
မိန်းကလေးတွေ လည်း မလုပ်ခင်က သေသေချာချာ မစဉ်းစားဘဲ လုပ်ချင်တာတွေ အရက်မူး..ဆေးမူးပြီး လုပ်ကြသည် ..။ ပြီးတော့ အရှက်တကွဲ ဖြစ်တာကို မခံနိုင်ကြဘဲ အသက်ဆုံးကြရတဲ့အထိတွေ ဖြစ်လာသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံ ထုံးစံအရ သက်ဆိုင်ရာက သတင်းအမှောင်ချ..ဖုံးထားတာကြောင့် လူသိပ်မသိကြ ။
တရုတ်နိုင်ငံလုပ်အောင်ဒီ အမျိုးအစား အမိုးအဖြူရောင် ကိုယ်ထည် အနက်ရောင် ..ဘေးကိုယ်ထည်မှာ POLICE လို့ စာတမ်း ရေးထိုးထားတဲ့ ရဲကားလေး သည် တခုသော မြို့သစ်ဆီကို ဦးတည်မောင်းနေသည် ။ ကားပေါ်တွင် စစ်ငြိမ်းမေ သူ့လက်အောက်က ရဲအုပ်တယောက် ဖုန်းနဲ့ သတင်းပို့နေတာ ကို နားထောင်ကာ ဘာလုပ်ရမည်ကို ပြန်လည် ညွှန်ကြားနေသည် ။
တနေ့တာ အလုပ် စပြီ ...။
ပိုးဇာက ရဲရဲတောက် ရှိတဲ့နေရာကို အိုင်ပီ လိပ်စာ နဲ့ ကြည့်သည် ..။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေရဲ့ အိုင်ပီလိပ်စာက အတိအကျ ပြောလို့မရဘူး ။ဆိုင် သုံးလေးဆိုင်ကို အိုင်ပီလိပ်စာ တခုထဲ ပြနေသည် ။ လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်ဆိုင်က သုံးနေလဲ။။ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး ..။
ဒုရဲအုပ် ထင်ထက်ထွန်း သည် ရဲရဲတောက် ( သို့ ) မင်းသား အွန်လိုင်း တက်နိုင်သည့် အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ကို လိုက်ကြည့်နေသည် ။ ဘယ်သူ မင်းသား ဖြစ်နိုင်မလဲ ...လိုက်ရှာနေသည် ။ မလွယ်တဲ့ အလုပ် ဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ မင်းသားကို အရမ်း ဖမ်းချင်နေကြသည် ...။
ထင်ထက်ထွန်း ရဲမေမိုးမိုးခိုင် မုဒိန်းကျင့်ခံလိုက်ရတာကို အခဲမကျေဘူး ။ သားထွေးကို မိတုံးကလည်း အချုပ်ထဲမှာ သားထွေးကို သူ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက် လက်စားခြေသည် ။ အခု မင်းသား ကို သူ မိခဲ့ရင် အချုပ်ထဲ မရောက်ခင် ရေရေလည်လည်ဗျင်းမည် လို့ကြုံးဝါးနေသည် ။
ရဲရဲတောက် ကို ပိုးဇာဘက်ကနေ ဓါတ်ပုံပြပြီး မြှူဆွယ်လိုက်သည် ။ ပိုးဇာ က လက်ရှိအသက်ထက် ပိုငယ်တယ်ထင်ရအောင် ချာတိတ်မလေး လို ပြင်ဆင်ပြီး ရဲရဲတောက်ကို ပြလိုက်သည် ။ သဲသဲ ဆိုတဲ့ နံမည် နဲ့ ...။
ရဲရဲတောက် စိတ်ဝင်စား သွားသည် ။
အခုထိ ရဲရဲတောက်က သူ့ဓါတ်ပုံကို ပိုးဇာကို မပြသေးဘူး ။
တက်တူး ပြမလား..ကြည့်ချင်သည် ဆိုတော့ လူပုံမပါဘဲ တက်တူးကို အနီးကပ်ရိုက်ထားတာ ကို ပို့လိုက်သည် ။
မင်းသား လက်မောင်းက တက်တူး ဖြစ်နေသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေက ..သားထွေးလို ကော်ပီကက် ..မင်းသားကို အားကျပြီးလိုက်ရူးနေတဲ့ကောင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ် ..ဘညဘဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ ..ချိန်းပြီး ဆွဲစိကြရမှာဘဲ ...”လို့ ပြောလေ သည် ။
ပိုးဇာ က ခပ်တုံးတုံးအအ ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်မလေးတယောက် လို ပုံနဲ့ ရဲရဲတောက်ကို အပြင်မှာ ချိန်းလိုက်ပြီး စစ်ငြိမ်းမေတို့ အဖွဲ့က ၀ိုင်းဖမ်းဖို့ ပြင်နေပြီ ...။
ဇေယျာကျော် စစ်ငြိမ်းမေဆီကို ဖုန်းဆက်ပြန်သည် ။
“ မမနဲ့ တွေ့ချင်လို့ ...”
“ဘာလုပ်မလို့လဲ..ဇေယျာ အစားလိုက်လိုက် ကျွေးနေတာနဲ့ မမ လဲ ၀တုတ်လာတော့မယ် ...ခိခိ ...”
“ မမ က မ၀ပါဘူး..မမ က လှနေတာ ...”
“ မြှောက်နေပြန်ပြီကွာ ..ကဲကဲ..ဘယ်တော့ တွေ့ချင်တာလဲ ..ဘာလုပ်မလို့လဲ ...”
“ မမကို အရေးတကြီး စကားပြောစရာရှိလို့ပါ ...”
“ ကောင်းပြီလေ ...မမဒီညနေ ဘာပေါ်လာအုံးမလဲတော့မသိသေးဘူး ..ဘာမှ အရေးပေါ် မရှိရင် ညနေ ၅နာရီခွဲကျော်ရင် တော့ ထွက်လို့ရပါပြီ....”
“ ဒါဆို..၅နာရီခွဲ ကျနော် မမ ကို လာခေါ်မယ် နော် ....”
“ အလုပ်မှာ လား ..”
“ ဟုတ်တယ်မမ..ကျနော် အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ် မမ ...”
“ အင်း..အင်း...ကောင်းပြီ...လာခဲ့လေ ...”
ဇေယျာကျော် လာခေါ်မည် ဆိုလို့ ယူနီဖေါင်းကို ချွတ်ပြီး အရပ်ဝတ် လဲလှယ်ဝတ်ဆင်လိုက်သည် ။ သူမလာခင်လေး မျက်နှာသစ် သန့်စင်ပြီး မိတ်ကပ်လေးဘာလေး ပြင်..နှုတ်ခမ်းဆေးဆိုး
ပိုးဇာလဲ စစ်ငြိမ်းမေ ကို သူမပြန်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့ပြီး သူမနေရာမှာ လုပ်မဲ့ ရဲမေနွယ်သင်းကို တာဝန်လွှဲပေးခဲ့ပြီး ရုံးထဲက ထွက်လာသည် ။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ လူတွေက တရာလောက်ရှိမည် ။
ပိုးဇာ အရမ်း စိတ်ညစ်သွားသည် ။
ဘတ်စ်ကားက ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိသေး ..။
ပိုးဇာ ဒီနေ့ လုက နဲနဲ နုံးနေသည် ။ နေလို့သိပ်မကောင်းဘူး ..။ ဘတ်စ်ကား မရလဲ နောက်ဆုံး တက်ဆီ နဲ့ သွားလိုက်မည် လို့ စဉ်းစား သည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်ချင်လှပြီ ။
ဇိမ်ခံမှန်ကား လှလှတစီး သူ့ရှေ့ထိုးဆိုက်လာသည် ။
ကားမှန် အောက်ကို လျော့ကျပွင့်လာသည် ။
“ မပိုးဇာ ..အိမ်ပြန်မလို့လား ..လာလေ..ကျနော် လိုက်ပို့ပေးမယ် .....”
ပိုးဇာ ကားထဲက ပြောနေသူကို ငုံ့ကြည့်သည် ။ အသားဖြူဖြူ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း နဲ့ လူရွယ်တယောက် ..။
ဘယ်သူလဲ..မမှတ်မိဘူး ..။ အမြန် အပြေးအလွှား စဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့ သူ ဘယ်သူဆိုတာ ခေါင်းထဲ မပေါ်လာဘူး . . ။
“ ရတယ်..နေပါစေ...ဘတ်စ်ကား နဲ့ဘဲ သွားမလို့ ...”
“ အော်..မဟုတ်တာဘဲဗျာ ..မပိုးဇာကလဲ ..လာ...လာ..တက်...တက် ....”
ကားတံခါးကို ဖွင့်ပေးလာ သည် ..။
ပိုးဇာလဲ နေလို့ကမကောင်း..ဘတ်စ်ကား လာရင်တောင် ဒီလူတွေ တပုံတခေါင်း နဲ့ ဘယ်လိုတက်နိုင်မလဲ ..။ ကားပေါ်တက်လိုက်မိသည် ။
လူရွယ်က ပြုံးသည် ။ ပိုးဇာ သူ့ကားပေါ်ပါလာတာ သဘောကျဝမ်းသာသွားပုံရသည် ။
ကားထဲက လေအေးစက်က အရမ်းအေးသည် ။ ပိုးဇာ ကားပေါ်လိုက်ပါလာပြီးမှ မသိတဲ့လူနောက်ကို လိုက်လာလိုက်တာ မှားများ မှားသွားပြီလား လို့ စဉ်းစားမိလိုက်သည် ။
ဒီလူကလဲ ခေါ်သာတင်လာတာ ပိုးဇာ ဘယ်သွားမလဲ လဲ မမေးသေးဘူး ..။
“နေပါအုံး ..ရှင်က ကျမ ကို ဘယ်ကို မောင်းပို့မှာလဲ ..ကျမ နေတာ ဘယ်မှာလဲသိလို့လား ....”
“ ဟုတ်ကဲ့ မပိုးဇာ..သိပါတယ် ...”
“ ဟင်...ရှင်...ရှင်...ဘယ်လိုသိလဲ..ရှင်က ကျမကို ဘယ်လို သိနေတာလဲ ....”
“ အေးအေးဆေးဆေး ...နားနေပါဗျာ..တနေ့လုံး ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်နေရတာ ခါးလဲ ညောင်း ..မျက်စိလဲ ညောင်းနေမှာဘဲ မပိုးဇာ...”
အို ..ဒီလူ..ငါ ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင်ရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လို သိနေပါလိမ့် ...။
“ ရှင်က ကျမ ဘာလုပ်တယ် ဆိုတာ သိလို့လား ....”
“ မသိပါဘူးဗျာ....မပိုးဇာ ..မှုခင်းကြိုတင် ကာကွယ်ရေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ ကျနော် မသိပါဘူး ....”
“ ဟင်..ရှင်...ရှင် ......ဘယ်သူလဲ ....ခု ချက်ချင်း ကားရပ်လိုက် ..ကားရပ်လိုက် ....”
“ ဟားဟားဟား......မကြောက်ပါနဲ့ မပိုးဇာရယ် .....ဘာမှ မကြောက်ပါနဲ့ .....ဟားဟားဟားဟား......”
ဇေယျာကျော် ရောက်လာသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေ သူမရုံးရှေ့မှာ ပြုံးပြုံးလေး စောင့်နေသည် ။
ဇေယျာကျော် လဲ ရဲဝတ်စုံနဲ့ တွေ့ရတာ နဲ့ တမူထူးခြားနေတဲ့ မမစစ်ငြိမ်းမေကို အကြာကြီးငေးကြည့်နေသည် ။
“ ဟိတ်..ဇေယျာ ...လူကို ကြည့်နေလိုက်တာ...မမြင်ဘူးတာကျနေတာဘဲ ....”
“ မမ က အရမ်းလှတာဘဲ ....တကယ်..တကယ် ....ရဲဝတ်စုံနဲ့ ခန့်ငြားသလောက် ခုလို ၀တ်ထားပြင်ထားတော့လဲ အရမ်းလှတာဘဲဗျာ ....”
“ ကဲပါ မြှောက်နေလိုက်တာ ...ဘာစားမလဲ..မမ မင်းကို ကျွေးမယ်...”
ဇေယျာကျော် သည် အဖြူနဲ့ အနက်ကြား ရှပ်အင်္ကျီလက်တိုကို ရင်ဘတ်ကြယ်သီး နှစ်လုံး မတပ်ဘဲ ၀တ်ထားသည် ။ ရွှေကြိုးခပ်တုတ်တုတ်ကြီးကို ရွှေဒင်္ဂါးပြား လော့ကက်နဲ့ ဆွဲထားသည် ။ အောက်က အရောင်စိုလွင်တောက်ပတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အသစ်တထည် ကို ၀တ်ထားသည် ။ လက်ကောက်ဝတ်မှာလဲ ရွှေဟန်းချိန်းများ နဲ့ ရွှေရောင် အိုမီဂါနာရီတလုံး
“ ကျနော် ကျွေးမှာ..မမ ..မမကိုလေ..ဒီနေ့ တရက်ထဲ တညနေထဲ ကျွေးချင်တာ မဟုတ်ဘူး ...မမကို ....ကျနော်လေ..တသက်လုံး တဘ၀လုံး ....ကျွေးချင်တာ ...”
အံမယ် ...။ ကောင်လေး ...။ လူကို ရီးစားစကား ပြောနေတာလား ...။
“ ဇေယျာ ..ဘာလဲ..ဒါ ရီးစားစကားလား ....ဟွန်း . ..”
“ မမ..မမကို ကျနော် အရမ်းချစ်တယ် ....တကယ် ပြောတာ ....”
“ဟေ့..ကားကြည့်မောင်းအုံး ...တိုက်နေအုံးမယ် ....”
ဇေယျာကျော်က အနီးမှာ ရှိနေတဲ့ ပန်းခြံထဲကို ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်သည် ..။ ကားကို ရပ်လိုက်သည် ။
“ ဒီပန်းခြံထဲက ဆိုင်မှာဘဲ ထိုင်ရအောင် မမ ”
“ အင်း..ကောင်းပါတယ်....ဇေယျာက မမ ကိုဘဲ ကြည့်ပြီး ကားမောင်းနေတာ ..ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်နိုင်တယ် ...”
ဆိုင်လေးဆီကို ဇေယျာကျော် နဲ့ စစ်ငြိမ်းမေ လျှောက်ခဲ့ကြသည် ။
“ မမ...ကျနော် တကယ်..အတည်ပေါက် ပြောနေတာ..မမကို ကျနော် အရမ်းချစ်နေတယ် ...မမယုံပါ ...ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်ပါ မမ ...ကျနော် နဲ့ မမ လက်ထပ်မယ်လေ ....”
“ တိုးတိုးပြော..ဇေယျာ..သူများတွေ ကြားလိမ့်မယ် ...”
“ မမကို ကျနော် ချစ်တာ ကို ပြောတာ ..ကြားကြားပေါ့ ...”
“ မင်းမရှက်ပေမဲ့ မမရှက်တယ် ...ဟင်းဟင်း ...”
ဆိုင်ထောင့်က စားပွဲလေးမှာ ထိုင်ပြီး ဇေယျာကျော်နဲ့ ညနေစာ စားကြသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေလဲ ဇေယျာကျော်က သူ့ထက် အသက်ငယ်တာ တခုဘဲ ပြောစရာရှိသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်ထဲမှာ
လဲ ဇေယျာကျော် ကို သဘောကျနေမိသလိုဘဲ ။
“ မမ..ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်လားဟင် ...”
“ ချက်ချင်းကြီးဘဲ သိချင်တာဘဲလား..ဇေယျာရယ် ...ဖြေးဖြေးပေါ့ ...”
“ သိချင်တာပေါ့ ..မမပြန်ချစ်ရင် ကျနော် အရမ်းပျော်မယ်..မမကို လက်ထပ်မယ်ဗျာ..ချက်ချင်း ...”
စစ်ငြိမ်းမေ သူ့အမူအရာကို ကြည့်ပြီး ရယ်မိရသည် ..။
ဇေယျာကျော်သည် ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတယောက်လိုဘဲ အမူအရာတွေ လုပ်နေလို့ ..။
တကယ်ဆို သူနဲ့ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ မောင် ဘိုဘိုတို့သည် ဘွဲ့ရပြီးတာတောင် နှစ်နှစ်လောက် ရှိနေပြီ ။ ဘိုဘို လဲ ဒီလိုဘဲ ။ ကလေးဆန်တုံး ..ဂိန်းကစားနေတုံးဘဲလေ ..။
စစ်ငြိမ်းမေ ရဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက hand phone မြည်လာသည် ..။
အိတ်ကိုဖွင့်ပြီး ဖုန်းကိုနှိုက်ယူတော့ မဲပြောင်လက်နေတဲ့ ပြောင်းတို သေနတ်တလက်ကို ဇေယျာကျော် တွေ့လိုက်ရသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ ဖုန်းပြောနေသည် ။
ဒုရဲမှူးဆိုတော့လဲ အချိန်မရွေး အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေက သတင်းပို့နေသည် ။
မမစစ်ငြိမ်းမေသည် အရမ်းကျက်သရေရှိတာဘဲ ..။ ဆံပင်ကို အနောက်လှန်ဖီးထားတာ နဖူးလေးက ၀င်းပြောင်နေသည် ..။ မျက်လုံးက ၀ိုင်းစက်စက်နဲ့ လှသည် ။ မျက်လုံး ပြူးတာမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး ..။ မမနှုတ်ခမ်းတွေက နဲနဲထူသည် ပြောမလား ..။ ဆက်ဆီဖြစ်သည်လို့ ဇေယျာကျော် ထင်သည် ..။
မမကိုယ်လုံးတွေက အရမ်း အချိုးကျသည် ။ အကွေ့အကောက် အမို့အမောက်တွေက ပြေပြစ်လွန်းနေသည် ။ ဒီလို ၀င်းဝင်းသန့်သန့် မမကြီး နဲ့ ရီးစားဖြစ်ချင်နေတာ ကြာပြီ ။ မမကို အခုမှဘဲ ဖွင့်ပြောဖြစ်သည် ။ မမ ပြန်ချစ်ပါစေ ။
စစ်ငြိမ်းမေ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့လဲ သူ့လူတွေက ထူးခြားတဲ့ သတင်းတွေ ဖုန်းနဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ ပေးပို့နေတာတွေကို ကြည့်ရဖတ်ရနားထောင်ရသည် ။ လိုအပ်ရင် ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ပါ ညွှန်ကြားရသည် ။ ကိုယ့်ဖါသာ မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ကေ့စ်မျိုး ဆိုရင် အထက်က လူကြီးတွေဆီ တင်ပြရသည် ။
အိမ်ဖေါ်မလေး ဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီတခွက်ကို သောက်တော့မည် ကိုင်လိုက်ဆဲ ဖုန်းလာပြန်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဇေယျာကျော် ဖြစ်နေသည် ။
အချိန်မတော်ကြီး ဘာလို့ ခေါ်ပါလိမ့် ။
အပျိုကြီးရဲမှူးမ မျက်မှောင်လေး ကြုံ့သွားသည် ။
“ ဟလို ...”
“ မမ..ကျနော်ပါ..ဇေယျာ ...”
“ အင်း...ပြော..ဇေယျာ ...”
“ မမ အလုပ်များနေလား ...”
“ အင်း..မများဘူး...ရတယ်...ပြော ....”
“ မမကို လွမ်းနေလို့ ..အရမ်း ..အရမ်း သတိရနေတာ ...”
စစ်ငြိမ်းမေ ရယ်ချင်သွားသည် ။ သူ့လေသံက ၁၄နှစ်သားလေး လိုလို ..ချွဲတဲတဲ နဲ့ ...။
“ ဒီတော့ ...”
“ ဟွန်း...မမ အသံကလဲ..ကျနော် နဲ့ မပြောချင်သလိုကြီး ...”
ခက်တယ်..သက်လယ် ...ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ ...။ ဇေယျာကျော် သည် သူ့ဗလကြီးမှ အားမနာ ..။ နုနေလိုက်တာ ...။
“ ဒီတော့..မမက ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ...”
ပြောမိပြီးမှ စကားမှားးသွားတာ သတိရသွားသည် ..။
“ မမ..ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့ ...မမ ကော ကျနော့်ကို သတိမရဘူးလားဟင် ....”
“ မမ အလုပ်များနေလို့ ..”
“ မမ က ညဖက်ကြီးလဲ အလုပ်များတာဘဲနော် ..မမရယ် ...ကျနော် မမကို အလုပ်မလုပ်စေချင်ပါဘူး ..ကျနော် ဘဲ အလုပ်လုပ်မယ် ..မမ အလုပ်ထွက်လိုက်တော့ ...”
“ မမက အလုပ်မရှိလဲ မနေတတ်ဘူး ဇေယျာ ရဲ့ ...”
“ မမ ပင်ပမ်းတာ ကျနော် မကြည့်ရက်ပါဘူး ...မမကို လက်ထပ်ပြီးရင် ကျနော်က ဒီထက် ၂ဆ အလုပ်လုပ်မှာ ....”
“ ဘယ်သူက ဇေယျာ့ကို လက်ထပ်မယ် ပြောလို့လဲ ...”
“ ဟာ..မမ...မနောက်နဲ့ဗျာ ...မမ ကျနော့်ကို ပြန်မချစ်ရင် ကျနော့်အသဲတွေ ကွဲအက်ကြေပြီး ကျနော် သေမှာဘဲ .....”
“ ခိခိခိ .....”
“ မမ..ကျနော့်ကို မလှောင်ပါနဲ့ဗျာ ...ကျနော်က တကယ် စီးရီးရက်စ် ..ပြောနေတာ ..”
“ဟုတ်ပါပြီ..ဇေယျာရယ် ...ကဲ...ဇေယျာ ...မမ အိပ်ရတော့မယ်..မနက် အစောကြီး ...အလုပ်ရှိနေလို့ ....”
“ ဟုတ်ပြီမမ..မမ.အားရင် နေ့လည်စာ အတူတူ စားမလား ...”
“ အင်း.....အားရင်စားမယ် .....ဖုန်းဆက်လေ .....”
ဇေယျာကျော် ဖုန်းချသွားပြီးနောက် ထင်ထက်ထွန်း ဖုန်းဆက်သည် ။ သူတို့ယူနစ်က ည တာဝန်မှူး ဖုန်းဆက်သတင်းပို့ တာ..ရဲမေပိုးဇာ ညနေက အိမ်ပြန်မလာလို့  သူ့အိမ်က အလုပ်ကို ဆက်မေးသည် တဲ့ ။ အခုထိ အိမ်ပြန်မရောက်သေးလို့ စုံစမ်းပေးဖို့ တိုင်သည်...တဲ့ ...။
ထူးဆန်းတာဘဲ ..။ ပိုးဇာက ဒီလို အိမ်ကို မပြောဘဲ မသွားတတ်ဘူး ..။ အမေနဲ့ အမတွေ ညီမတွေ နဲ့ နေတာ ..။
ပိုးဇာ ဘယ်ရောက်နေလဲ ...။
စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်ပူလာသည် ။ ဟိုတလောလေးကဘဲ ရဲမေမိုးမိုးခိုင် ကို သားထွေး ဖမ်းခေါ်သွားပြီး ကျင့်ကြံတာ ခံလိုက်ရသည် ။
ဘယ်လိုလုပ် အိပ်လို့ ရတော့မလဲ ..။
ထင်ထက်ထွန်း နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပိုးဇာကို မတွေ့တွေ့အောင် ရှာဖို့ လုပ်ကြသည် ..။
ပိုးဇာ သည် မသိတဲ့ လူစိမ်းတယောက် နဲ့ လိုက်လာမိတာ မှားသွားပြီလို့ သိလိုက်ပြီး ကားရပ်ပေးဖို့ ပြောသည် ။ ကားမောင်းသူက ရပ်မပေးတဲ့အပြင် ကားကို ပိုလို့တောင် မြန်မြန် မောင်း
လိုက်သေးသည် ။ ပိုးဇာ သူကိုင်ထားသော ကားစတီရာရင် ကို အတင်းဝင်ဆွဲသည် ..။ သူ့ကို ထုရိုက်သည် ။
“ ရပ်ပေး...ရပ်ပေး .......ရှင်..ဘာလုပ်တာလဲ ...ကားကို ခု ချက်ချင်းရပ်လိုက် .....”
“ အိုကေ...ရပ်ပြီ....ရပ်ပြီ ......”
ဒီလူက ကားကို ရပ်လိုက်သည် ။ လမ်းမကြီးပေါ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး ...။ သစ်ပင်အုပ်တွေ ထဲမှာ ...။
ပိုးဇာ ကားတံခါးကို ဖွင့်ပြီး ဆင်းပြေးသည် ။
ကားမောင်းသူ က ရယ်မောရင်း လိုက်ဆင်းလာသည် ။ ပိုးဇာ ဝေးဝေးကို ပြေးလို့ မရ ...။
သူ့ရှေ့မှာ လူသုံးယောက် ကာဆီးနေသည် ..။ ရုပ်တွေက မသန့်ဘူး ..။ ပိုးဇာကို ကြည့်နေကြတဲ့ ပုံက ကြောက်စရာကောင်းသည် ။
လာရာလမ်းကို ပြန်လှည့်ဖို့ကလဲ သူ့ကို ကားနဲ့ တင်ခေါ်လာတဲ့လူက ရှိနေသည် ။
အို...ခုမှ သေသေချာချာ ကြည့်မိသည် ..။ စောစောက သူက ကားမောင်းနေတော့ ကွယ်နေလို့ ပိုးဇာ မတွေ့လိုက် ..။ သူ့ညာဘက်လက်မောင်းမှာ ဆေးမှင်ကြောင် တက်တူးကြီး ...။
နဂါး အစိမ်းေ၇ာင်ကြီး ....။
“ ဟာ...အို............ရှင်..ရှင်...ရဲရဲတောက်...ရဲရဲတောက် မဟုတ်လား ....”
“ ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ..မသိဘူး...ရဲရဲတောက် ဆိုတာ ......ဟားဟားဟား.......“
“ ရှင် .....ဒါဆို ဘယ်သူလဲ ..မင်းသား....လား ......”
“ မင်း ဒုံးမဝေးဘူး ....ပိုးဇာ....မင်း ပါးနပ်သားဘဲ ...ဟားဟား......ငါ ...မင်းတို့ ရှာနေတဲ့ “ မင်းသား ”
“ အို ....”
“ ဟုတ်တယ်...ငါ.....“ မင်းသား ” ဘဲ ....”
ပိုးဇာ ပါးစပ် အဟောင်းသား နဲ့ မင်းသား ကို ငေးကြည့်နေသည် ။ သူတို့ လိုချင်နေသော ..ဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေသော မင်းသား ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေလို့ ..။
ဒီမင်းသားရဲ့ ကာမပွဲကြမ်းတွေကို သူတို့ အင်တာနက်လိင်မှုခင်း တားဆီးရေးယူနစ် က အထပ်ထပ် ကြည့်ဖူးခဲ့ကြသည် ။
မင်းသား ပုံတွေနဲ့ သူ ကာမပွဲတွေ ရိုက်ကူးတဲ့ ဟိုတယ်အခန်းပုံတွေကနေ ဘာသဲလွန်စများ ရမလဲ ဆိုပြီး အထပ်ထပ် ကြည့်ခဲ့ကြသည် ။ ဒါကြောင့်လဲ မင်းသားရဲ့ လိင်တန်ထိပ်မှာ
မှဲ့နက်တလုံး ရှိနေတာကို သူတို့ သိနေကြသည် ။
တကယ်ဆို မင်းသားရဲ့ ကာမပွဲကြမ်းတွေကို အလုပ်တာဝန်အရ သူတို့ ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ကာမစိတ်တွေ ထကြွခဲ့ကြရသည် ။
မငိးသား သည် မျက်ခုံးထူထူ..ဆံပင်လှိုင်းတွန့်နဲ့ မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်း နှာတန်ပေါ်ပေါ် နဲ့ ...။ အသားက ဖြူဖွေးပြီး အရပ်မြင့်သည် ။ ဗလတောင့်တင်းသည် ။ အမြဲ မုဒိန်းကျင့်
ကျင့်ပြနေလို့ မင်းသားရဲ့ ကိုယ်လုံး အားလုံးကို တွေ့ဖူးထားကြသည် ။ မတွေ့ဘူးတာက သူ့မျက်နှာ ..။ အခုတော့ သူ ဘယ်လိုပုံ ဆိုတာကို ပိုးဇာတွေ့လိုက်ရပြီ ။
ရုပ်ရည်က မိန်းမတွေ ကြိုက်တဲ့ ရုပ်မျိုး ..။ ဖြူဖြူသန့်သန့် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ..။
ဒီလို လုပ်လိမ့်မည်လို့ ဘယ်လိုမှ ထင်စရာ မရှိဘူး ...။
“ ဘာလဲ...အမြဲ ဖွက်ကာထားတဲ့ ငါ့ရုပ်ကို တွေ့လိုက်ရလို့ အံ့သြနေလား .....ဟားဟားဟား .....”
“ နင်..နင်..ဘာလို့ ဒီလိုဟာတွေ လုပ်နေတာလဲ ....မိန်းမကောင်းလေးတွေကို သက်သက် မုဒိန်းကျင့် ဖျက်ဆီးနေတာ ....နင်..သားထွေးတို့လိုဘဲ မိန်းကလေးတွေ ကို ရောင်းစားသေး
“ ရောင်းတာပေါ့ ....ချောချောလှလှ ဆိုရင် ဈေးတောင် ပိုရသေးတယ် ...ဟားဟားဟား .....မရောင်းစားခင်..ငါ စိတ်ကြိုက် လုပ်သေးတယ်လေ ...”
“ နင်..တော်တော် တဏှာရူးတာဘဲ ...နှမချင်း မစာမနာ ....”
မင်းသားက ပိုးဇာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်ရင်း ...“ ပိုးဇာ ...မင်း နို့တွေကလဲ အယ်နေတာဘဲ ..ဘယ်ယောက်ျား ကိုင်ပြီးပြီလဲ ....”
“ ရိုင်းစိုင်းလိုက်တာ ...ဘယ်လိုမိဘက မွေးထားပါလိမ့် ...”
“ လာ..ပိုးဇာ ..မိဘတွေ ဆွဲထည့်မလာနဲ့ ငါစိတ်ပေါက်လာရင် ..နင် မလွယ်ဘူး.......ကဲ ...ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ ...”
မင်းသား ပိုးဇာရဲ့ လက်မောင်းကို ဆုတ်ကိုင်က ဆွဲခေါ်သည် ။
“ လွှတ်လွှတ် ...ငါ့ကို လွှတ် ....”
မင်းသားရဲ့ လက်တွေက သန်မာလှသည် ။ ပိုးဇာကို တောလမ်းလေးအတိုင်း ဆွဲခေါ်သွားသည် ..။ ပိုးဇာရုန်းပေမဲ့ အင်အားချင်းက မမျှ ။
မင်းသား ဆွဲခေါ်သမျှ ပါသွားရသည် ။ သစ်ပင်အုပ်တွေထဲက သွပ်မိုးနဲ့ သစ်သား အိမ်လေးတအိမ် ထဲကို ဆွဲခေါ်သွားသည် ။
ပိုးဇာ သူ့ကို တွန်းထိုးကန်ကျောက်ပြီး ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားသေးသည် ..။
မင်းသားရဲ့ လက်ဝါးတွေက ပိုးဇာ ဇက်ပိုးနဲ့ နောက်စေ့ကို ပြင်းထန်စွာ မိတ်ဆက်လာသည် ။
“ ဖေါင်း..ဖေါင်း ....အား ........”
“ နင်..နင်...ရက်စက်လှချည်လား ...”
“ ငါမလုပ်ချင်ဘူးနော်..မင်း အေးအေးဆေးဆေး လိုက်ခဲ့ ...မလိုက်ရင်တော့ လိုက်အောင် အကြမ်းကိုင်ရမှာဘဲ ...”
“ ပိုးဇာ..ငါဘယ်သူဆိုတာ တွေ့ဖူးသွားတဲ့မင်း ..ဘယ်တော့မှ မပြန်ရတော့ဘူး..သိလား...မင်း လုပ်ရမှာ တခုက မင်းကို မသတ်အောင်..သတ်မပစ်အောင်ဘဲ ငါ့ကို ရှစ်ခိုးတောင်းပန်ရမှာ...”
“ ရာဇ၀တ်ဘေး ပြေးမလွတ်ပါဘူး ..မင်းသား ...”
“ နိုး...နိုး....နိုး.......ပိုးဇာ....ပြေးနိုင်ရင် လွတ်ပါတယ် ....လူဆိုးနဲ့ရဲ ဥာဏ်ရည်ချင်း ယှဉ်ကြတဲ့အခါ ...လူဆိုးလောက် ရဲက ဦးနှောက်က မကောင်းဘူးဆိုရင် ..မမိနိုင်ဘူးလေ ...ခုဘဲ
ကြည့်..မင်းတို့ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အရာရှိမ စစ်ငြိမ်းမေ ထက် ငါက ဥာဏ်ရည်သာလို့ မင်း ငါ့လက်ထဲ ရောက်နေရပြီလေ ....ဟားဟား...”
“နင်. နင်.....နင်ငါ့ကို ပြန်လွှတ်....”
“ ဟင့်အင်း...ပိုးဇာ...မလွှတ်တဲ့အပြင်..မင်းကိုငါ..ကင်မရာလေးလုံးရှေ့မှာ ဖြုတ်မယ် ..မင်းပုံတွေ အင်တာနက်မှာ ပြန့်နေစေမယ် .....ဟားဟား...”
“ နင်...နင်...ယုတ်မာလှချည်လား ...”
“ မပြီးသေးဘူး ....ပိုးဇာ . .မင်းကို နယ်စပ်မှာ ကျွဲုတွေ..နွားတွေကို ရောင်းချတာမျိုး ..ငါ ရောင်းစားပစ်မယ် ...မင်းလေ ...ကုလားလီး..ယိုးဒယားလီး..တရုတ်လီး ..လီးမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရပြီး
ဖါလုံးလုံး ဘ၀ကို ရောက်သွားအောင် ငါ ပို့ပစ်မှာ...ငါ လုပ်မှာ .....”
“ တောက် ..နင်..နင်...အရမ်း ယုတ်မာတာဘဲ..နင် လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရမလား ...”
“ အင်း...ငါ လုပ်ခဲ့တာ များလှပြီ ...နင့်ကိုယ်နင် ငါ့ဘ၀တော့ မထူးတော့တာမို့ ဖါဘဲ ခံစားတော့မယ် လို့ ဖြစ်အောင်ကို ငါ လုပ်မှာ ...”
“ နင့်ကို ငါက ဘာများ လုပ်မိလို့လဲ မင်းသား ...နင် ဒီလောက် ယုတ်မာ ပက်စက်ရအောင် ...”
“ နင်တို့ ငါ့ကို ဖမ်းဖို့ လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာ ငါ မသိဘူး မထင်နဲ့လေ ...”
အိမ်ထဲ ရောက်သောအခါ စောစောက တွေ့တဲ့ လူသုံးယောက်က ပိုးဇာကို မင်းသားရဲ့ လက်ထဲက လွှဲပြောင်းယူလိုက်ကြသည် ။ အခန်းတခန်းထဲကို ဆွဲသွင်းသွားကြပြီး မျက်နှာကျက်
မှာ ရှိနေတဲ့ ထုတ်တန်းက တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ကြိုး နဲ့ ပိုးဇာလက်နှစ်ဖက်ကို ပူးပြီး ချည်နှောင်လိုက်ကြသည် ။ ပိုးဇာ လက်နှစ်ဖက် ပူးမြှောက်ထားတဲ့ အနေအထားနဲ့ ဖြစ်သွားသည် ။
လူတယောက်က နံရံက မီးခလူတ်ကို နှိပ်လိုက်သည် ။ ထောက်ကနဲ အသံနဲ့အတူ မီးပွင့်လင်းလာသည် ။
ပိုးဇာ နံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ စာရွက်တွေ ဓါတ်ပုံတွေကို သဲသဲကွဲကွဲ မြင်လိုက်ရသည် ။
အို...ပိုးဇာ အလုပ်သွား..အလုပ်ပြန်တာတွေကို ဓါတ်ပုံ ခိုးရိုက်ထားတာတွေ ကပ်ထားသည် ။ အကြံအစည်နဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်ထားတာဘဲ ..။
မင်းသားသည် နိုင်ငံခြား ဆိုက်ကို အရူးကားတွေထဲကလို လိုက်လုပ်နေတာပါလား ...။
ဟင်...ရဲမှူးစစ်ငြိမ်းမေကိုလဲ ဓါတ်ပုံတွေ ခိုးရိုက်ထားသည် ။ အာ..ဒီကောင် တကယ့်စောက်ရူးဘဲ .....။ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ခေါင်းပိုင်းဓါတ်ပုံနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံးပုံ တခုရဲ့ ကိုယ်ပိုင်းကို ဆက်ကပ်ထားသည် ။ ဒီကောင် စစ်ငြိမ်းမေကိုလဲ တနေ့ ဖမ်းမယ့်သဘောပါလား ....။
ပိုးဇာ ခေါင်းထဲမှာ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အပြင်းအထန် စဉ်းစားနေသည် ။ ဒီမင်းသား ဆိုတဲ့ အရူး မုဒိန်းမကျင့်ခင် သူ့လက်ထဲက ထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ လုပ်ရမည် ။ ကိုယ့်လူတွေဆီကို တ
နည်းနည်းနဲ့ သတင်းပို့ရမည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ ပိုးဇာအတွက် အရမ်း စိတ်ပူနေသည် ။
ပိုးဇာတော့ သူ့စိတ်အလိုမတူဘဲ တယောက်ယောက် ရဲ့ အဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားတာကို ခံနေရပြီလို့ စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်ထဲ ထင်နေသည် ။
ဒုရဲအုပ်ထင်ထက်ထွန်းတို့ လူစုလဲ ပိုးဇာ ပျောက်သွားတာ သူတို့လက်ထဲ ဖမ်းထားပြီး ဖြစ်တဲ့ သားထွေးနဲ့ မိုးဟိန်းမိုးတို့ နဲ့ ပတ်သက်နေလား..မင်းသား..ရဲရဲတောက် နဲ့ ပတ်သက်နေလား
ဆိုပြီး စုံစမ်းနေသည် ။ ရဲရဲတောက် ကို အွန်လိုင်း ရောက်နေတာ တွေ့လို့ ရဲမေ တယောက်က ရဲရဲတောက်ကို အရင် ပိုးဇာ စကားပြောခဲ့သလို ဆက် ဟန်ဆောင်ပြီး အပြင်မှာ တွေ့ကြမလား ...မေးသည် ..။ ရဲရဲတောက်က တွေ့ချင်ကြောင်းပြောသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေက ရဲမေကို ရဲရဲတောက် နဲ့ ချိန်းခိုင်းလိုက်သည် ။ ရဲရဲတောက် က သူလာခဲ့မည် ဆိုပြီး ရပ်ကွက်တခုက နံမည်ကြီး လဘက်ရည်ဆိုင်တခုကို ချိန်းလိုက်သည် ။ စစ်ငြိမ်းမေတို့လဲ
ပိုးဇာ ပျောက်သွားတာတော့ ရဲရဲတောက် နဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး လို့ ထင်လိုက်ပေမဲ့ ရဲရဲတောက်သည် မင်းသားများလား ဆိုပြီး ရဲရဲတောက် ချိန်းဆိုတဲ့နေ၇ာကို သွးစောင့်ကြသည် ။
အရပ်ဝတ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပုန်းအောင်းစောင့်ဆိုင်းနေကြချိန် ရဲရဲတောက် ရောက်လာသည် ။ သူ ဘယ်လို ၀တ်လာမည် လို့ ရေးပြောထားတဲ့အတိုင်း ၀တ်လာလို့ သိကြရတာ ..။
လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲကို သူ လိုက်ကြည့်နေသည် ..။ ရဲရဲတောက် ဆိုပြီး လာသောကောင် သည် မင်းသားလို အရပ်မြင့်မြင့် ဗလကောင်းသူ မဟုတ်ဘဲ ပိန်သေးသေး ချာတိတ်လေးတကောင်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရလို့ စစ်ငြိမ်းမေတို့ စိတ်ပျက်သွားသည် ။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လာတဲ့ ရဲရဲတောက် ကို သူတို့ ဆွဲစိလိုက်ကြသည် ..။ လက်မောင်းမှာ နဂါးတက်တူး ရှိသလားလဲ စစ်ဆေးကြည့်ကြသည် ။ ဘာမှ တက်တူး ထိုးမထား ..။ သားထွေး
လိုဘဲ မင်းသားကို အားကျလို့ ကော်ပီကက် လုပ်တဲ့ ချာတိတ်တကောင်ပါဘဲ ..။ အော်ငိုနေလို့ စိတ်ညစ်ကြရသည် ။
ပိုးဇာ ဘယ်မလဲ ....။
မိုးဟိန်းမိုး နဲ့ သူ့တပည့် အော်ကုလား ကို ထောင်ထဲမှာသူတို့ ပြန်စစ်ကြပြန်သည် ..။ ပိုးဇာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ ဘာမှ မသိကြဘူး ။
“ မမ ဘာဖြစ်လဲဟင်..မမ နေမကောင်းဘူးလား ...”
“ ကောင်းပါတယ် ဇေယျာ ..မမ အလုပ်နဲနဲများနေလို့ပါ ...”
“ ရဲအလုပ်က ကြမ်းတမ်းလှပါတယ်..မမရယ် ..မမလိုချောချောနုနု အမျိုးသမီးတယောက် က လူဆိုးလူမိုက် ဒုစရိုက်ကောင်တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာ အန္တရာယ်များလွန်းတယ်လို့ ကျနော်
ထင်တယ် ...မမ အတွက် ကျနော် အရမ်းစိတ်ပူတာဘဲ....”
“ မမ ၀ါသနာပါလို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ပါ ဇေယျာ ..”
သာယာတဲ့ ရေကန်စပ်က စားပွဲလေးမှာ ညနေစာ ထိုင်စားနေကြ ရင်း..ဇေယျာကျော် က စစ်ငြိမ်းမေကို တချိန်လုံး စိုက်ကြည့်နေလို့ ...“ ဟိတ်..ဇေယျာ ..ကြည့်လှချည်လား ..ပိုလိုက်
တာကွယ် ...”လို့ စစ်ငြိမ်းမေ မျက်နှာလေးနီမြန်းလျက် ပြောလိုက်သည် ။
“ တအားချစ်တာကိုး..မမကလဲ..မမရော ကျနော့်ကို ချစ်လားဟင် ...”
ဇေယျာကျော် လဲ သူချိန်းတိုင်း စစ်ငြိမ်းမေက သူနဲ့ အပြင်ထွက် ထမင်းစား..ပန်းခြံထဲ လမ်းလျှောက်တာမို့ မမစစ်ငြိမ်းမေ..ငါ့ကို ပြန်မချစ်ဘဲ ဒီလောက် တွဲမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး စဉ်စား
နေသည် ။ မမကို အတင်းအဖြေတောင်းမှဘဲ ဆိုပြီး ..“ ချစ်တယ်မှုတ်လားဟင်..မမ ” လို့ ထပ်မေးပြန်သည် ။
“ ခက်တယ် ဇေယျာရယ် ...ဇေယျာ့ကို သံယောဇဉ် မရှိဘဲ မမ အခုလို ဇေယျာ နဲ့ အမြဲ လျှောက်သွားနေပါ့မလား ...”
“ သိတယ်လေ..သံယောဇဉ် ရှိမှန်း ..ချစ်တယ် လို့ ဖြေလိုက်တော့ ..နော်...မမ...နော် .....ဖြေလိုက်ပါဗျာ ....”
“ဟင်း..သိပ်ပူဆာတာဘဲကွယ် ..လူဆိုးလေး ...”
“ ဟုတ်တယ်...ချစ်လူဆိုးလေးလေ...မမ ဒီလူဆိုးလေးကို ဖမ်းလိုက်ပါတော့ ...မမ ထောင်ချမယ် ဆိုရင် ကျနော်က ရဲရဲကြီး ခံလိုက်မှာ ...”
“ အံမယ်..အံမယ် ...ဒါ ဘာစကားလဲ ...”
စစ်ငြိမ်းမေ လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ဟန်းဖုန်း မြည်လာသည် ။
“ ခဏ ကွယ် ...”
ဇေယျာကျော်က ..“ ဟန်းဖုန်းတွေ မရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ မမ နဲ့ နေချင်တယ် ...” လို့ ညည်းသလို ပြောလိုက်သည် ..။ မမက အလုပ်များတဲ့ ရဲမှူးမတယောက်မို့ တချိန်လုံး ဖုန်းတွေက လာလာနေလို့ပါ ...။
“ ဟင် ....မင်းသား ..ထပ်တင်ပြန်ပြီလား .....”
ဇေယျာကျော့်ရှေ့မှာတောင် လွှတ်ကနဲ ယောင်ထွက်သွားမိသည် ...။
ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းက မင်းသား အခုဘဲ အသစ် ထပ်တင်လိုက်သည်...တဲ့ ။
စစ်ငြိမ်းမေ ဖုန်းချလိုက်ပြီးသောအခါ ဇေယျာကျော်က ..“ မမ ခုနပြောလိုက်တာ ..ဘာလဲ..မင်းသား ...ဆိုတာ...ဗီဒီယို မင်းသားလား ...” လို့ မေးသည် ။
“ အင်း..အင်း..အလုပ်ကိစ္စပါ ...ဇေယျာ ...”
ဇေယျာ့ကို ဒါတွေ ဘာမှ မပြောနိုင်ဘူး ..။ ဒါ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲက လှို့ဝှက်ထားရမယ့်ဟာတွေ လေ ။
အပြန်လမ်းမှာ ဇေယျာကျော် က စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ လက်ကို ဆုတ်ကိုင် သည် ။ ပွတ်သပ်သည် ။
“ ချစ်တယ် မမ ရယ်..အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ...”
ဇေယျာကျော် စစ်ငြိမ်းမေ ခါးလေးကနေ ဆွဲဖက်ပြီး သူ့ဖက်ကို ဆွဲယူသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ သူ့ပုခုံးမှာ မှီချလိုက်မိသည် ။
“ အင်း ....”
“အို..မမ...ကျနော့်ကို ပြန်ချစ်တယ် နော် ...”
“ အို..၀မ်းသာလိုက်တာ မမ...ရယ် ....”
ဇေယျာကျော် စစ်ငြိမ်းမေ ၇ဲ့ နဖူးလေးကို နမ်းသည် ။
“ဟ်ိတ်...ရှေ့ကြည့်မောင်းကွယ် ...နမ်းရင် မမောင်းနဲ့ ...မောင်းရင် မနမ်းနဲ့ ...ခိခိ ....”
စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်တွေ ဘယ်လို လွတ်ထွက်သွားသည် မသိတော့ ..။ ဇေယျာကျော့်ပါးပြင်ကို ပြန် နမ်းလိုက်မိသည် ။ ဇေယျာကျော် က ကားကို ထိုးရပ်လိုက်သည် ။
“ ဟင်..ဇေယျာ ..ဘာလုပ်မလို့လဲ ...”
“ ဒါ ကျနော့်အလုပ် ကန်ပနီ ရုံးခန်းလေ ...ကျနော့်ဖေဖေက စာရွက်စာတမ်း တချို့ ၀င်ယူခိုင်းလို့ မမ ..ခဏပါ..သိပ် မကြာပါဘူး ...”
“ မမ က ကားပေါ်မှာ စောင့်နေရမှာလား ...”
“ အင်း ...အာ...မမ.ခဏ တက်လိုက်ခဲ့လေ ...ဖိုင်တွေက နဲနဲရှာရမှာ ဆိုတော့ ၁၀မိနစ်လောက် တော့ ကြာသွားနိုင်တယ် ...”
“ မမ လိုက်ခဲ့မယ်လေ..ဇေယျာ့ ရုံးခန်းလဲ ရောက်ဖူးရတာပေါ့ ...”
ဇေယျာကျော့် လက်မောင်းကို တွဲဖက်ပြီး စစ်ငြိမ်းမေ ရုံးပေါ်ကို လိုက်ခဲ့ သည် ။ ဇေယျာကျော်က စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ဖက်ထားသည် ။
ရုံးခန်းထဲကို ၀င်လိုက်တော့ မှောင်နေသည် ။
“ မီးခလုပ် ဘယ်မှာလဲ ဇေယျာ ...”
ဇေယျာကျော် က ပြန်မဖြေဘူး ။
စစ်ငြိမ်းမေကို တအားဖက်ပြီး စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ်ပြီး စုတ်ယူလိုက်သည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ ရုတ်တရက် ဆိုတော့ သူလုပ်သမျှ ငြိမ်ခံနေမိသည် ။ သူ့လက်တွေက ခါးအောက်
က တင်ပါးကြီးတွေကို ပွတ်သပ်လာတော့ ရှက်လာပြီး ရုန်းဖယ်မိရသည် ။
ဇေယျာကျော်က ဖက်ထားတာကို လွှတ်မပေး ..။ သန်မာတဲ့ သူ့လက်တွေထဲက ရုန်းထွက်လို့ မရဘူး ..။
“ဟွန်း..ဆိုးလိုက်တာ..လူဆိုးလေး ...လွှတ်ကွယ် ...”
“ မလွှတ်ဘူး..ချစ်တယ်..မမရယ် ...လက်ထပ်လိုက်ကြရအောင် ...”
“ ဖြေးဖြေး...ဇေယျာ..ဖြေးဖြေး ...ခိခိ”
ဇေယျာကျော် စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးတွေကို ပြန်စုတ်ပြန်သည် ။
ဒီတခါတော့ စစ်ငြိမ်းမေ မရုန်းတော့ ..။သူ့ကို ပြန်ဖက်ထားသည် ။ စုတ်နေချိန် သူ့လျာက စစ်ငြိမ်းမေ လျာဆီကို ရောက်လာပြီး ထိုးလှိမ့်သည် ။ သူ့လက်တွေက တင်အိအိတွေကိုပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ညှစ်နေသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ တသက်လုံး စိတ်ထိန်း ခဲ့သမျှ အခုစိတ်တွေ ကို လွှတ်ထည့်လိုက်မိပြီ ။ သူလုပ်သမျှ မငြင်းမိတော့ ။ သူက ပိုပို အတင့်ရဲလာသည် ။ ရုံးပိတ်ချိန်မို့ လေအေးစက်လဲ ဖွင့်မထားတော့ အရမ်းပူနေသည် ။ ဇေယျာကျော် သူ့စပို့ရှပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ သူ့ကြွက်သားဖုထစ်နေတဲ့ လက်မောင်းသား တွေ နဲ့ ရင်အုပ် ...၀မ်းပျင်တွေကို စစ်ငြိမ်းမေ သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ရွရွလေး ပွတ်ကြည့်နေမိသည် ။ သူ့လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားတဲ့ ရွှေကြိုးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ရွှေဒင်္ဂါးပြားလော့ကက် ကို စမ်းမိသည် ..။ သူ့အသားဝင်းဝင်းနဲ့ ဒီရွှေဆွဲကြိုးနဲ လိုက်ဖက်သည် လို့ စစ်ငြိမ်းမေ ထင်သည် ။
“ မမ လဲ အင်္ကျီချွတ်လိုက်ပါလား...သိပ် ပူတာဘဲ ....”
“ ဟင့်အင်း..ချွတ်ချင်ဘူး ...”
ဇေယျာကျော် စစ်ငြိမ်းမေကို သူ့အလုပ်စားပွဲကြီးပေါ် ချီမ တင်လိုက်သည် ။ ပြောင်လက်နေတဲ့ ကျွန်းစားပွဲကြီးပေါ် ထိုင်ကြရင်း ထပ် နမ်းပြန်သည် ။ ဒီတခါတော့ စစ်ငြိမ်းမေ သူ့ကို ပြန်တုံ့ပြန် နမ်းစုတ်မိသည် ။ နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ပါလက်ပါ နမ်းကြပြီ ဆိုတော့ အနမ်းတွေက စောစောကထက် ပို ကြာရှည်လာသည် ။ တချက်တချက် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ရုံးခန်းထဲ ပြွတ်
်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်ထွက်လာသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ အင်္ကျီကို သူ ချွတ်လာတော့ မငြင်းတော့ ..။ စစ်ငြိမ်းမေ ကိုယ်တိုင်ကို က ရှိတဲ့ အ၀တ်တွေအားလုံးကို ဖယ်ခွာချင်စိတ်ပေါက်နေတာ .. ။သူခုလို ချွတ်ပေးတော့လဲ ပြီးသွားရော...။ ဘရာကိုပါဆက်ချွတ်ဖို့ သူကြိုးစားပေမဲ့ ခိုးချင်တာလဲ ပြာလို့ လက်နှေးတာလဲ ခြာလို့ ဆိုတာမျိုး ..။ သူ ဘရာချိတ်ကို မဖြုတ်နိုင် ။ စစ်ငြိမ်းမေဘဲ ဘရာချိတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ရသည် ..။
အမှောင်ထဲမှာ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ဘယ်ယောက်ျားမှ မကိုင်ဖူး မနမ်းဖူးသေးတဲ့ ရင်သားအိအိတွေကို သူ နမ်းသည် ။ ကိုင်သည် ။ ပွတ်နေသည် ။ ညှစ်သည် ။ “ လှလိုက်တာ မမရယ် ...”
လို့ တိုးတိုးလေး ပြောရင်း သူ ချိုချိုတွေကို စို့သည် ။ စစ်ငြိမ်းမေလဲ ပေးစို့လိုက်သည် ။သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ကြားထဲ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေး ရောက်နေသည် ။ သူ့လျာက နို့သီးခေါင်း
လေးကို ယက်လာတော့ စစ်ငြိမ်းမေ ခါးလေးကော့တက်ပြီး ညည်းမိရသည် ။ သူ စိတ်ရှိတိုင်း နို့သီးလေးကို ကလိနေသည်..။ တဖက် ၀အောင် ကလိပြီး နောက်တဖက်ကို ကလိပြန်သည် ။
ချိုချိုစို့နေတာ အကြာကြီး ..။ ပြီးတော့ နောက်တဆင့်တက်ချင်လာသည် ။
သူ စစ်ငြိမ်းမေ နို့တွေကို ကလိနေထဲက စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်တွေက တအားကြွနေခဲ့သည် ။ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ် သူနဲ့ လမ်းဆုံးအထိ သွားပစ်လိုက်ချင်တဲ့အထိ စိတ်အဟုန်က ပြင်းထန်နေတော့
သူ ထမိန်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တာကိုလဲ မတားမိ ..။ သူပင်တီကိုပါ ဆက်ချွတ်ချိန် သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အောက်ပိုင်းမှာအ၀တ်တွေ မရှိတော့ဘူး ..။
သူ့ပေါင်ကြားက ဒုတ်တုတ်တုတ်ကြီး က စစ်ငြိမ်းမေ ပေါင်ကြားကို နွေးနွေးကြီး လာထိကပ်နေသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေ အင်္ဂါစပ်ထဲမှာ မုန်တိုင်းထန်နေသည် ။ လှိုက်ပြီး ယားနေတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် သူ့ဒုတ်ကြီးကို မျှော်လင့်နေမိရသည် ။
ဒီတချီတော့ အပျိုကြီးမမ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ..။ ဇေယျာကျော်က စားပွဲကြီးပေါ် စစ်ငြိမ်းမေကို ပက်လက်လှဲချပြီး ပေါ်ကနေ တက်မှောက်ခါ သူ့ဒုတ်တုတ်တုတ်ကြီးကို စစ်ငြိမ်းမေ
ပေါင်ကြားဂွဆုံက ဖူးကြွထူအမ်းတောင့်တနေသော အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲကို ထိုးသိပ်သည် ။ ထည့်သည် ။ ကာမစိတ်ကြောင့် သဘာဝအရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတာတောင် တခါဘူးမှ ယောက်ျားနဲ့
မကြုံဘူး မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ အပျိုစင် ပစ္စည်း အစစ်အမှန်ကြီးမို့ ဇေယျာကျော်ရဲ့ ဒုတ်ရှည်တုတ်ကြီး သည် လွယ်လွယ်နဲ့ မ၀င်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေရသည် ။ ဇေယျာကျော်လဲ သူ့အတန်ချောင်းကြီး
ကို ရှေ့တိုးလိုက် နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ နဲနဲခြင်း ဖြေးဖြေးချင်း တထစ်ချင်း သွင်းသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေလဲ သူ့ခါးကို တအားဆွဲဖက်ထားရင်း သူသွင်းသမျှ ခံနေသည် ..။ တအားအား ညည်းနေသည် ။
တဖျစ်ဖျစ်နဲ့ လိင်တန်ကြီး တထစ်ချင်းတထစ်ချင်း အင်္ဂါစပ်ထဲ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာ သည် ။ အား....အာ....အာ........အင့်ဟင်..ဇေယျာရယ် .....နာတယ်.......နာတယ် ......။
ဇေယျာကျော် က ဘာမှပြန်မပြော...။စစ်ငြိမ်းမေ အထဲကို ထိုးထည့်လိုက် ပြန်ဆုတ်လိုက် နဲ့ လုပ်နေသည် ...။
တဖြေးဖြေးနဲ့ ထိုးလို့ဝင်လာသည် ..။ အသွင်းအထုတ်တွေ အဆင်ပြေလာသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေလည်း ခံနိုင်လာသည် ။ ဇေယျာကလည်း တဖြေးဖြေး သွက်လာသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ ပေါင်တန်တွေကို မထောင်ပြီး ထည့်နေသည် ။ ဆောင့်ထည့်တဲ့အထိ ဖြစ်လာသည် ။
ဇေယျာကျော့်ကိုယ် မှာ ချွေးတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေသည် ။
ဇေယျာကျော်လဲ တအားဆောင့်ထည့်ရင်း သုတ်ရေတွေ စစ်ငြိမ်းမေအထဲကို တထုတ်ထုတ် နဲ့ အချက်ပေါင်များစွာ ပန်းထုတ်ရင်း အထွပ်အထိပ် ကို တက်လှမ်းသွားသည် ။
လိင်တန်တုတ်ကြီးကို အရင်းအထိ တဆုံးထိုးထည့်ထားရင်း ဇေယျာကျော် တပ်ရက်ကြီး ငြိမ်ကျသွားသည် ။
စားပွဲကြီးပေါ်မှာ စစ်ြိငိမ်းမေ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး လဲလျှောင်းနေသည် ။ မီးမဖွင့်ပါနဲ့လို့ သူ့ကို ပြောလို့ မှောင်နေဆဲဘဲ ..။ လေအေးစက်ကတော့ သူဖွင့်လိုက်လို့ စောစောကလောက် မပူတော့ဘူး ။ သူလဲ စစ်ငြိမ်းမေ ဘေးမှာ ပက်လက်ကြီး လီးတန်းလန်းနဲ့ ငြိမ်နေသည် ။ ဘာလို့ နှစ်ယောက်စလုံး အ၀တ်အစား ပြန်မ၀တ်ဖြစ်ကြသေးလဲ မသိဘူး ..။ နောက်ထပ် ပွဲကြမ်းကြချင်သေးလို့ လားမသိဘူး ။
မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားသည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ အင်္ဂါစပ်နှုတ်ခမ်းသားထူထူတွေ အပေါ်ကို တစုံတခု လာပွတ်တိုက်လိုက်တာ ခံစားလိုက်ရလို့ ဖျတ်ကနဲ လန့်နိုးလာသည် ။
ဟင် ....သူ...သူ ဇေယျာ .....အဖုတ် ယက်နေပါလား ...။
သူ့လျာကြီးက အပြားလိုက်ကြီး စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်းကို ယက်ပေးနေသည် ။
အပြာဇာတ်ထုပ်တွေထဲမှာဘဲ တွေ့ဖူးခဲ့ပြီး စိတ်ကူးတွေထဲမှာ ကြုံချင်ခဲ့သော ဘာဂျာအမှုတ်ခံရတာ ကို လက်တွေ့ကြုံ လိုက်၇ပြီ ။
သူ့ခေါင်းကို ယောင်ယမ်းပြီး ဆုတ်ကိုင်လိုက်မိသည် ။
အောက်ကနေ အထက်ကို ကော်ပင့်တင်လိုက်တဲ့ သူ့လျာကြီးရဲ့ ထိပ်ချွန်ချွန်က စောက်စိကို ကော်ပွတ်သွားတဲ့အခါ တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရသည် ။
သူ့ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆုတ်ထားမိသည် ။ သူက စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ကိုယ်အောက်ကို လက်သွင်းပြီး တင်ပါးကြီးတွေကို ဆုတ်ညှစ်ပြီး ဖိဖိယက်ပေးနေသည် ။ သူ့လျာကြီးက အတွင်းထဲကို
၀င်ဝင်လာနေသည် ။ တော်တော်ကြာကြာ သူ ဘာဂျာဆွဲပေးပြီး စစ်ငြိမ်းမေလက်ကို လှမ်းဆွဲယူပြီး သူ့အတန်ကို ကိုင်ခိုင်းသည် ..။
အို...အတန်ကြီး ပြန်မာနေပြန်ပြီ ...။
ထိပ်ဖူးဒစ်ကားကားကြီးကို စစ်ငြိမ်းမေ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည် ။
သူ့ဟာကြီးကို ကိုင်နေရင်း ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ မင်းသားရဲ့ ကာမပွဲကြမ်းတွေကို ဖျတ်ကနဲ သတိရ မြင်ယောင်လာသည် ..။ မင်းသား က ကောင်မလေးတွေကို အမြဲဘဲ သူ့အတန်ကြီးကို
စုတ်ခိုင်းလေ့ရှိသည် ။ ကောင်မလေးက လျာနဲ့ ယက်ပေးတာကို အနီးကပ် ပြလေ့ရှိသည် ..။ ဒါတွေကို ကြည့်တုံးက မင်းသားရဲ့ ဒုတ်ကြီးကို စုတ်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရဘူးတာ
ကိုယ့်ဖါသာဘဲ သိသည် ။ အခု ဇေယျာ့အတန်ကြီးကလည်း ပူပူနွေးနွေး တုတ်ခဲခဲ နဲ့ စုတ်ချင်စရာကြီး ...။
စောစောက သူကလည်း အဖုတ် ရေရေလည်လည် ယက်ပေးခဲ့တော့ သူ့ကို တုံ့ပြန်တဲ့ အစုတ်တွေ ပေးချင်စိတ်ပေါက်လာသည် ။
ထထိုင်လိုက်ရင်း...“ မမ နမ်းပေးရမလား...” လို့ တိုးတိုးလေး မေးမိရသည် ..။
“ အင်း..မမ နမ်းပေး ....”
စစ်ငြိမ်းမေလဲ သူ့ထိပ်ဖူးဒစ်ပြဲကြီးကို ဖမ်းငုံလိုက်ပါတော့သည် ..။
လာကြိုတဲ့ကားဆီ အိမ်ထဲကနေ ထွက်ခဲ့တော့ မနေ့ညက ဇေယျာနဲ့ ကဲထားတာကြောင့် လမ်းလျှောက်တာ ကွတတ ဖြစ်နေသည် ။ နာကျင်ကျိန်းစပ်နေပေမဲ့ ချစ်သူနဲ့ နှစ်ဦး သဘောတူ
ချစ်ရည်လူး ချစ်တလင်းခေါ်ကြလို့ရခဲ့တဲ့ ဝေဒနာမို့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်သည် ။ အလုပ်ကိုရောက်တာနဲ့ တာဝန်ကျနေတဲ့ ရဲမေတွေက စစ်ငြိမ်းမေကို ကွန်ပြူတာဆီ ခေါ်သွားကြပြီး မင်းသား ထပ်တင်တဲ့ ကာမပွဲကို ပြကြသည် ။ မင်းသား သည် မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားသည် ။ ငိုယိုနေသော ကောင်မလေးတယောက်ကို လိင်ဆက်ဆံတာ စစ်ငြိမ်းမေ ဒီတခါတော့ စိတ်မကြွတဲ့အပြင် စိတ်
ဝေဒနာ ခံစားလိုက်ရသည် ။ ထုံးစံအတိုင်း မင်းသားသည် ကင်မရာရှေ့မှာ သူ့လိင်တန်ကြီးကို ကောင်မလေးကို စုတ်ခိုင်းသည် ။
“ ဟင် ...”
အို ...။ မင်းသားလည်ပင်းမှာ ရွှေကြိုးတုတ်တုတ်ကြီး ဆွဲထားသည် ။ ဆွဲပြားက ရွှေဒင်္ဂါးပြား...။ ဟင်..ဇေယျာကျော် ရဲ့ ဆွဲကြိုးနဲ့ ရွှေဒင်္ဂါးနဲ့ တပုံစံထဲ ...ချွတ်စွပ် ...။ ဒါ...ဒါဆို ....ဇေယျာ
ဟာ မင်းသားများ ဖြစ်နေမလား ...။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလဲ တူသည် ။ မင်းသား ရဲ့ ညာလက်မောင်းမှာ တက်တူးကြီးက ထင်းနေသည် ။ ဇေယျာကျော်မှာက ဘာတက်တူးမှ မရှိ ။
အင်း ..တက်တူးက ကပ်ခွာလို အတုလဲ ဖြစ်နိုင်တာဘဲ ..။
မင်းသား ရဲ့ လိင်တန်ထိပ်မှာ မှဲ့နက်တလုံး ထင်းထင်းကြီး ရှိသည် ။ ဇေယျာကျော်နဲ့ ညက စစ်ငြိမ်းမေ ကာမစပ်ရှက်ခဲ့တော့ သူ့လိင်တန်ကြီးကို စုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ မှောင်နေတာမို့ လိင်တန်ကို သေသေချာချာ မတွေ့ခဲ့ဘူး ။ ဇေယျာကျော် ဟာ မင်းသား ဟုတ်မဟုတ် စစ်ကြည့်ဖို့က ဇေယျာကျော့် လိင်တန်မှာ မှဲ့ရှိမရှိ ကြည့်ဖို့ဘဲ ။
အို ...ငါ့ချစ်သူဟာ မင်းသား များ ဖြစ်နေမလား ...။
ဇေယျာကျော် သည် မင်းသား များလား ...။
ဘုရားဘုရား ....မဖြစ်ပါစေနဲ့ ...။ ကျမချစ်သူဟာ မင်းသား ....မဖြစ်ပါစေနဲ့ ...။
ဇေယျာ ..မင်းသား မဖြစ်ပါစေနဲ့ ...။
ပိုးဇာ ခေါင်းတွေ ခြာခြာလည် မူးနေသည် ။
ရေဆာလို့ ရေတောင်းသောက်တာ ရေထဲမှာ ဆေးတွေ ခပ်ထားသလားမသိဘူး ..။
ရေလဲသောက်ပြီးရော ..ခေါင်းတွေ မူးလာသည် ။
ချွေးတွေပြန်လာသည် ။ အင်း ...စိတ်ကို တင်းထားသည် ။ မရ ...။
လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားသည် ။
ပိုးဇာ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး အိပ်ပျော်နေပြီ ။ ၀တ်ထားတဲ့ ထမိန်က လျော့ရဲရဲနဲ့ ပြေလုလုဖြစ်နေသည် ။
မင်းသား ပိုးဇာကို အနီးကပ်ကြည့်နေသည် ။
အင်း..တော်တော် ကိုယ်လုံးလှတဲ့ ကောင်မလေးဘဲ ...။
မင်းသား ပိုးဇာရဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။ထမိန်ကို လုံးပြီး အခန်းထောင့်ကို ပစ်လိုက်သည် ။ပင်တီအတွင်းခံဘောင်းဘီနွမ်းနွမ်းလေး သည် စွင့်ကားတဲ့တင်ပါးကြီးတွေ ကို လုံ
အောင် မဖုံးနိုင်ကြ ။ တင်စိုင်ဝင်းဝင်းအိအိတွေက လျံထွက်နေသည် ။ ပေါင်တန်ရှည်တွေက ဖြူဝင်းနေသည် ။ မင်းသား ပင်တီလေးကို ဘေးကိုဆွဲဖယ်ပြီး ကြည့်လိုက်သည် ။ အမွှေးရိပ်ထားလို့ မို့ပြောင်တင်းနေတဲ့ ပိုးဇာရဲ့ အင်္ဂါစပ် အကွဲကြောင်း နီညိုညိုလေး ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။
မင်းသား သူ့အ၀တ်တွေကို ချွတ်သည် ။
ရှပ်အင်္ကျီကို အရင်ချွတ်သည် ။ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ် အဖြူရောင် ကိုတော့ မချွတ်သေး ..။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်သည် ။ ဒီနေ့မင်းသား အတွင်းခံဘောင်းဘီ မ၀တ်ထား ..။ ဂျင်း
ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်တာနဲ့ သူ့လိင်တန်တုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ကြီးက ထောင်ထလာသည် ..။ ငေါထွက် မာကျောစပြုနေပြီ ..။
ပိုးဇာကို သူ လုပ်တာကို ရိုက်တော့မည် ။ ပိုးဇာ အင်္ကျီကို ချွတ်နေရတာ ကြာလို့ ကပ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်သည် ။ ဖြူဝင်းတဲ့ ပိုးဇာချိုချိုကြီးတွေက ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ တအားလှနေကြသည် ။ မင်းသား နို့သီးလေးတွေကို လက်ဖ၀ါးနဲ့ ထိကြည့်လိုက်သည် ။
သူချွတ်ထားတဲ့ သူ့ဘောင်းဘီမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဟန်းဖုန်း မြည်လာသည် ။
ဟာ..ဘယ်သူလဲ ...ဖုန်းကို ယူကြည့်လိုက်သည် ။
ဖိုးထောင် ...။ ဖိုးထောင် ခေါ်တာ ...။
“ ဆရာ...ကောင်မလေး ထွက်ပြေးလို့ ....”
“ ဘာ .....”
“ ဟုတ်တယ်ဆရာ..ခုဘဲ ...ကျနော်တို့ အလစ်မှာ ပြေးပြီ ....”
“ မလိုက်ကြဘူးလား ..“
“ လိုက်တယ် ဆရာ..တိုးနီ နဲ့လှသန်းရွှေ လိုက်နေတယ် ...”
“ အေး..ငါခု လာခဲ့မယ် ....”
သူဖမ်းထားတဲ့ ကောင်မလေး လွတ်ပြေးတာ ..။ ကောင်မလေး က သူ့မျက်နှာအစစ်ကို တွေ့ဖူးထားပြီ ။ ဒီကောင်တွေ အရမ်းပေါ့ဆတာဘဲ ။ မင်းသား ဘောင်းဘီကောက်စွပ်ပြီး အမြန်
လိုက်သွားသည် ။ ရှပ်အင်္ကျီပြန်မ၀တ်တော့ ..။ ပိုးဇာ ကို အပြင်က တံခါးသော့ခတ်လိုက်ပြီး တပည့်တယောက်ကို စောင့်ခိုင်းထားသည် ။
စွပ်ကျယ်လက်ပြတ် ၀တ်ထားလို့ ညာလက်မောင်းက နဂါးတက်တူးစိမ်းကြီးက ထင်းနေသည် ။ ကားကို အမြန်မောင်းပြီး ကောင်မလေးထွက်ပြေးတဲ့ သူ့စခန်းဖက်ကို လိုက်သည် ။
ကားဒက်ရှဘုတ်ထဲက သူ့သေနတ်ကို ထုတ်ယူလိုက်သည် ။
ကောင်မလေးကို ပြနဖမ်းခေါ်လာလို့ မရရင်..မလွယ်ရင်..နေရာမှာတင် နုတ်ပိတ်လိုက်ရမည် ။ သူ့မျက်နှာကို သိသွားတဲ့ ဒီကောင်လေးကို အရှင်မထားနိုင်ဘူး ..။
ဖိုးထောင်...ဖိုးထောင် ...တော်တော် ပေါ့ဆတဲ့ကောင် ..။ အင်း..ဒီဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ သူတောင်းစားကို တခုခု အပြစ်ဒါဏ်ပေးရမယ် ....ခွေးမသား ..။
စစ်ငြိမ်းမေ ဇေယျာ သူမဆီကို ဖုန်းခေါ်အလာကို မစောင့်နိုင်တော့ ..။ သူမကဘဲ သူ့ကိုခေါ်လိုက်သည် ။
“ ဇေယျာ ....”
“ မမ ..”
“ ဇေယျာ ..ဘာလုပ်နေလဲဟင် ...”
“ ကျနော်လား..မမကို လွမ်းနေတယ် ...”
“ ခိခိ..ပိုပြီ..ကိုပို ...”
“ မမကော ကျနော့်ကို လွမ်းနေလား ..လွမ်းလို့ ခေါ်လိုက်တာလား ...”
“ အင်းပါ...အရမ်းကြမ်းတဲ့ လူကြမ်းလေး ..ခါထဲ..သူများ ..တအား နာနေတယ်..သိလား ...ဟင်း...”
“ ကျနော် လဲ အရူးအမဲသားကျွေးမိသလို ဖြစ်နေရပြီ ...မမ ရယ် ...တချိန်လုံး..ကျနော့်စိတ်ထဲ မမ..မမ..နဲ့ မမကိုဘဲ တမ်းတနေတယ် ...”
“ ကဲ..ဒါတို ခု တွေ့မလား ...”
“ အို..မမ တွေ့ချင်နေလား..တွေ့မှာပေါ့..ဘာသွားစားကြမလဲ ....”
“ နိုး..ဟင့်အင်း ....ဘာမှသွားမစားချင်ဘူး ...မမ ယူနဲ့ တနေရာမှာ တွေ့ချင်တယ် ...ကန်တော်ကြီးစောင်း ဖြစ်ဖြစ် ...”
“ တွေ့လေ ..မမ လာခေါ်ရမလား ...”
“ဟင့်အင်း ..တနေရာမှာ ဆုံမယ် ...”
သူ့လက်အောက်က ရဲမေတွေကို အရေးကြီးရင် ဖုန်းခေါ်လိုက်ဖို့ ပြောပြီး ဇေယျာကျော် နဲ့တွေ့ဖို့ ကားနဲ့ထွက်ခဲ့သည် .။ စိတ်ထဲ ဘ၀င်မကျတဲ့ တနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို ချက်ချင်းဘဲ
အဖြေရှာမလို့ ..။ ဇေယျာကျော့်ကို မင်းသား ထင်နေတဲ့ ကိစ္စကို ခုဘဲ သွားပြီး စစ်ကြည့်မလို့ ..။
ဇေယျာကျော့် လိင်တန်ထိပ်မှာ မင်းသားရဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ မှဲ့နက် ရှိမရှိ စစိငြိမ်းမေ အရမ်းသိချင်နေသည် ..။ သူမ ချစ်သူဟာ မင်းသားလား ဆိုတာ သိချင်နေသည် ။
ငါ့ဘဲဟာ မုဒိန်းကျင့်နေတဲ့ လူယုတ်မာတယောက်များလား ...။
ဇေယျာကျော်နဲ့တွေ့ပြီး သူ့လိင်တန်ကို စစ်မည်ကြည့်မည် ...။
ကားမောင်းနေတုံး...ဟန်းဖုန်းက တတစ်တစ် မြည်လာသည် ။
အိုး..။ ထင်ထက်ထွန်း ခေါ်နေတာ ..။
“ ပြော..ထင်ထက်ထွန်း ...ဘာထူးလဲ ....”
“ ထူးတယ် ရဲမှူး..အရမ်းထူးနေတယ် ....”
“ ကျနော် စောစောကဘဲ ညာလက်မောင်းမှာ နဂါးတက်တူးကြီးနဲ့ လူတယောက်ကို တွေ့လိုက်လို့ အနောက်က လိုက်နေတယ်..ရဲမှူး ...ကျနော်တို့ လိုက်နေတဲ့ မင်းသား ဆိုတဲ့ကောင် ဖြစ်နိုင်တယ် ...”
“ ဟား..အေးအေး...ခု လိုက်တုံးဘဲလား ...ခု မင်း ဘယ်မှာလဲ ...”
“ ကျနော် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းလမ်းပေါ်မှာ ...ကျနော် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ...လိုက်နေတာ...”
“အေး..ငါလာမယ် ..ဟိုတက်တူးကောင်ကရော..ဘာကားနဲ့လဲ ...”
“ ဆာ့ဖ် နဲ့..”
“ ဟေ....ဘာ..ဘာ...ဘာအရောင်လဲ ....”
“ အနက် ...”
စစ်ငြိမ်းမေ စိတ်ထဲ ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် ..။
ဇေယျာလဲ စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ တွေ့ဖို့ ထွက်လာနေသည် ။ ဇေယျာ့ကားကလည်း ဆာ့ဖ် အနက်ဘဲလေ ..။ ဇေယျာ သည် မင်းသားများလား.....။
စိုးရိမ်စိတ်တွေ များနေသည် ။
ဇေယျာ ဟာ မင်းသား လို့ စစ်ငြိမ်းမေ ထင်နေသည် ..။
ထင်ထက်ထွန်း ..ဘလူး တူ့သ်နားကျပ် နဲ့ ပြောနေသည် ။
“ ရှေ့က ကား အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ ...”
“ တအားမောင်းနေတယ် ရဲမှူး ....”
“ မျက်ခြေ မပြတ်စေနဲ့ ..ယူနစ်ကို ကော အကူခေါ်ပြီးပလား ...”
“ ဟုတ် ..သူတို့ကိုလဲ ရှေ့ကနေ ပိတ်ခိုင်းထားတယ် ...”
စစ်ငြိမ်းမေ ကားကို တအားမောင်းကာထင်ထက်ထွန်း ပြောတဲ့ဖက်ကို ဦးတည်သွားနေသည် .။ ရှေ့က လမ်းဆုံက ယဉ်ထိန်းရဲ က စစ်ငြိမ်းမေ အရမ်းမောင်းလာလို့ ၀ီစီမှုတ်ခါ တားနေသည် ။ စစ်ငြိမ်းမေ က သူမကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့မို့ ..။ စစ်ငြိမ်းမေ သူ့ပေါင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ လမ်းလျောက်စကားပြောစက်( ဝေါ်ကီတော်ကီ ) ကို ထောင်ပြလိုက်သည် .။
ယဉ်ထိန်းရဲ နားလည်သဘောပေါက်မည် ထင်တာဘဲ..။ဒီလို ဝေါ်ကီတော်ကီ က ရဲစုံထောက်တွေဘဲ ကိုင်လေ့ရှိသည် ..။
ဟော ...။ တွေ့ပြီ ..။ ထင်ထက်ထွန်း ကိုတွေ့ပြီ ..။ ဆိုင်ကယ် နဲ့ ..။ ထင်ထက်ထွန်းကလဲ စစ်ငြိမ်းမေကို တွေ့သွားသည် ..။
“ ရဲမှူး..ဟိုရှေ့က ကားဘဲ ...”
“ အေး ..တွေ့ပြီ ...”
ဆာ့ဖ် အနက်ရောင် သည် ညာဘက်ကို ကွေ့ချသွားသည် ..။ ဟာ....။ ရပ်ပြီ ...။ စစ်ငြိမ်းမေလဲ ညာဖက်ကပ်ပြီး ရပ်လိုက်သည် ။ သေနတ်ပါတဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ကို ဆွဲယူလိုက်သည် ။
နောက်ကြည့်မှန်ထဲ ထင်ထက်ထွန်းလဲ ဆိုင်ကယ် ရပ်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ လမ်းလျှောက်စကားပြောစက် နဲ့ သူ့ယူနစ်က လူတွေကို ခေါ်ကြည့်သည် ။ သူတို့ ရောက်နေတဲ့
နေ၇ာကို ပြောပြလိုက်သည် ..။ အမြန်ဆုံး လိုက်ခဲ့ဖို့ ..ပြောသည် ။
ဟန်းဖုန်း မြည်လာပြန်သည် ..။ ဟာ...ဇေယျာကျော် ...။ဇေယျာကျော် ခေါ်နေတာ ...။
“ ဟလို..မမ ...”
“ ဇေယျာ..မမ သေရေးရှင်ရေး ဖြစ်နေလို့ကွာ..နောက်မှ ....”
“ ဟုတ် ..မမ..ကျနော်..လိုက်ခဲ့ရမလား ....”
“ ရတယ်..ဇေယျာ...မလိုက်နဲ့..မမ နောက်မှ ပြန်ခေါ်မယ် ....”
စစ်ငြိမ်းမေ ဖုန်းပိတ်လိုက်သည် ။ လက်ကိုင်အိတ်ကို ဆွဲကာ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်သည် ။
ဆာ့ဖ်အနက်ထဲက လူ ဆင်းလာသည် ..။ စွပ်ကျယ်အဖြူလက်ပြတ်..ဂျင်းဘောင်းဘီ အပြာနဲ့ ...။
ညာဘက်လက်မောင်းမှာ တက်တူးကြီး ကို ထင်းထင်းလင်းလင်း တွေ့လိုက်ရသည် ..။
သူတို့ အထက်လူကြီး ဒုရဲမှူးကြီး ရဲ့ သား .....သိုးဖြူ ...ဘဲ ....။
သိုးဖြူ ....ကို စစ်ငြိမ်းမေ ကောင်းကောင်းသိသည်..။ ခင်သည် ..။ သိုးဖြူသည် ဂေး ( အခြောက် ) ဖြစ်သည် ..။သူ..ဆံပင်ညှပ်သည် ..။ မျက်နှာပေါင်းတင် ..လက်သဲ..မိတ်ကပ် လုပ်သည် ။ စစ်ငြိမ်မေကို ခဏခဏ ဆံပင်ပြင်ပေးဘူးသည် ...။ဆံပင်ညှပ်ဖူးသည် ..။
ဗလကောင်းကောင်း အရပ်မြင့်မြင့် နဲ့ မိန်းမရှာ ဖြစ်နေလို့ စစ်ငြိမ်းမေ ဟိုးတုံးထဲက အံ့သြနေတာ...။
သိုးဖြူသည် အခုကျတော့ ခါတိုင်းလို မနွဲ့တော့ပါလား ..။ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး လမ်းတဖက်ကို ဖြတ်ကူးသွားသည် ..။ တစုံတယောက် ကို လိုက်နေသလိုဘဲ ..။ ဟော..တွေ့ပြီ ..။
ရဲအရာရှိမျကိစိမို့ ကျီးကန်းတကောင်လိုဘဲ လျင်သည် ။ သိုးဖြူ လိုက်နေတာ ကောင်မလေးတယောက် ...။ ဆံပင်တိုတိုလေး နဲ့ ..။
ကောင်မလေး ခပ်သုတ်သုတ် ပြေးနေသည် ။ အ၀တ်အစားတွေ က စုတ်ပြဲပေါက်ပြဲနေသည် ..။ ဖိနပ် မပါ ...။
သိုးဖြူက ကောင်မလေးကို လှမ်းအော်သည် ။
“ဟေ့ ..ချိုနွယ်ဦး ....ရပ်လိုက် ..မပြေးနဲ့ ......”
သိုးဖြူအသံက ခုလိုဆိုတော့ တကယ့်ယောက်ျားကြီးတယောက် ရဲ့ အသံ ..။
ခါတိုင်းလို ညှောင်နာနာ မဟုတ်ဘူး ..။
သိုးဖြူသည် မင်းသား....လား....။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား .. ။ မင်းသားသည် မုဒိန်းကျင့်နေတဲ့ ဧရာမ လိင်တန်ကြီး နဲ့ တကယ့်ဖိုက်တာ ကောင် ...။
ချိုနွယ်ဦး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက သိုးဖြူ အော်လိုက်ခါမှ ပိုမြန်မြန် ပြေးပြီ ..။ သိုးဖြူ ခါးကြားထဲက သေနတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ..။ သိုးဖြူ လက်ထဲမှာ မဲနက်သော ပြောင်းတို ပစ္စတိုသေနတ် ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ စစ်ငြိမ်းမေရော ထင်ထက်ထွန်းရော သူတို့ သေနတ်တွေကို အသီးသီး ထုတ်ကိုင်လိုက်ကြသည် ..။
သိုးဖြူက ချိုနွယ်ဦး ကို သေနတ်နဲ့ ချိန်လိုက်သောအခါ ..စစ်ငြိမ်းမေ သိုးဖြူကို သေနတ်နဲ့ချိန်ရွယ်ကာ ...” သိုးဖြူ..လက်ထဲက သေနတ်ချလိုက် ...”လို့ အော်ပြောလိုက်သည် ..။
သိုးဖြူလဲ သူ့ကို နံမည်တပ် ခေါ်လိုက်လို့ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး နောက်လှည့်ကြည့်သည် ..။
“ ဟင်..စစ်ငြိမ်းမေ . . .”
“ သေနတ်ချလိုက် ..သိုးဖြူ ....”
ထင်ထက်ထွန်းလဲ သေနတ်ကို သိုးဖြူကို တန်းမတ်စွာ ချိန်ရွယ်ထားရင်း ရှေ့တိုးလာသည် ။
သိုးဖြူ သေနတ်ကို ကိုင်ထားဆဲ..။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ..အကြံအိုက်နေပုံ နဲ့ ...။
“ သေနတ်ချလိုက် ...မမ မင်းကို မပစ်ချင်ဘူး ..”
“ဘယ်ကနေဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ..စစ်ငြိမ်းမေ ...ခင်ဗျား တော်တော် ခြေသွက်နေပါလား....ခင်ဗျားတပည့်မ ရဲမေ ပိုးဇာကို အားရပါးရ ဗျင်းပြီး အင်တာနက်ပေါ် တင်တော့မလို့...
ဒီ ချိုနွယ်ဦး ဆိုတဲ့ ကောင်မ ထွက်ပြေးလို့ လိုက်လာတာ ...ပိုးဇာပြီးရင် ခင်ဗျားကိုလဲ ကျုပ် ဖမ်းပြီး ကျင့်မှာဘဲ ...”
“ မင်း...မင်း....မင်း..ဂေးမဟုတ်ဘူးလား .....”
“ မဟုတ်ဘူး .....ဂေး ဟန်ဆောင်နေတာ ...ဒါမှ မိန်းမတွေကို ဆံပင်ညှပ်ပေး..မိတ်ကပ်ပြင်ပေးရင်း...သူတို့ကို ချဉ်းကပ်လို့ရတာပေါ့ ...ဟားဟားဟား....”
ထင်ထက်ထွန်း သည် သိုးဖြူ စစ်ငြိမ်းမေကို စကားပြောနေခိုက် တဖြေးဖြေးနဲ့ ရှေ့တိုးလာနေသည် ..။
သိုးဖြူက တွေ့သွားသည် ..။
“ဟိတ်..ဟိုကောင်...ရှေ့တိုးမလာနဲ့..သေချင်လို့လား . . .” လို့ အော်ရင်း သေနတ်နဲ့ ချိန်သည် ။
စစ်ငြိမ်းမေ လည်း သိုးဖြူကို သေနတ်နဲ့ ချိန်ရွယ်ထားရင်း ...“ သိုးဖြူ သေနတ်ချလိုက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အဖမ်းခံလိုက်ပါ ...” လို့ ပြောသည် ။
သိုးဖြူ မိုက်မိုက်မဲမဲ လုပ်ပြီ ..။
စစ်ငြိမ်းမေ ဖက်ကို ချိန်ကာ ပစ်ထည့်လိုက်သည် ..။
သိုးဖြူ ပစ်တာနဲ့ ထင်ထက်ထွန်းရော စစ်ငြိမ်းမေရော ပစ်ခတ်ကြသည် ။
သိုးဖြူ ပစ်ချိန် စစ်ငြိမ်းမေ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်လို့ သိုးဖြူ ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံက သူမကို မထိ ..။ စစ်ငြိမ်းမေ ပြန်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံက သိုးဖြူ လက်မောင်းကို ထိမှန်သွားသည် ။ ထင်ထက်ထွန်း ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံက သိုးဖြူ ရဲ့ ပေါင်တဖက်ကို ထိမှန်သည် ..။ သိုးဖြူ ခွေယိုင်ကာ လဲကျသွားသည် ။
သေနတ်ကို ကိုင်ဆုတ်ထားဆဲ ...။
ထင်ထက်ထွန်း သေနတ်ကို သိုးဖြူကို ချိန်ထားရင်းနဲ့ ရှေ့ကို တက်သွားသည် ..။
“ ထင်ထက်..သတိထား..သူ့လက်ထဲမှာ သေနတ် ရှိနေတုံးဘဲ ...”
စစ်ငြိမ်းမေ က အော်ပြော သည် ။ သိုးဖြူ ဒူးထောက်ရက် ကနေ ပြန်ထဖို့ ကြိုးစားသည် ..။
ထင်ထက်ထွန်းက အော်ပြောသည် ။
“ သိုးဖြူ..သေနတ် ချလိုက် ....”
ထိုအခိုက် ကားတစီး တအားမောင်းလာပြီး သိုးဖြူအနားကို ထိုးဆိုက်လာသည် ။
ကားပေါ်က လူနှစ်ယောက်က စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်းတို့ဖက်ကို သေနတ်များနဲ့ ပစ်ခတ်သည် ..
စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်းတို့ အနီးက သစ်ပင်အကွယ်ကို ၀င်ခိုလိုက်ရချိန်ဒီလူတွေက သိုးဖြူကို တွဲကာ ကားပေါ်ကို ဆွဲတင်သည် ။
“ဟေ့ ...ရပ်လိုက် ..”
သူတို့ တုံ့ပြန်တာက သေနမင်းတမန် ကျည်ဆန်များ ...။
စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်းတို့ဆီကို အချက်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက် ပစ်ခတ်ကြသည် ..။
သစ်ပင်တွေ အနောက် အကာအကွယ်ယူလိုက်ကြရသည် ..။ သူတို့အနားက သစ်ကိုင်းတွေကို တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ကျည်ဆံတွေ ထိမှန်သည် ။
ကားကို အမြန်မောင်းထွက်သွားသည် ..။
ထင်ထက်ထွန်း နဲ့ စစ်ငြိမ်းမေ လဲ မောင်းထွက်သွားတဲ့ကား အနောက်ကို စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ကားနဲ့ လိုက်သည် ။ သူတို့အနောက်မှာ သူတို့ယူနစ်က ရဲတံဆိပ်အမှတ်အသားနဲ့ အထက်ဖြူ ကိုယ်ထည်အနက် ရဲကားနှစ်စီး ပါလာတာ တွေ့လိုက်ကြရသည် ..။
လမ်းမကြီးပေါ်မှာ သိုးဖြူတို့ကား သည် အရှိန်ပြင်းပြင်း ပြေးနေသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ကားနဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာ မီးနီတန်း ဖွင့်ထားပြီး တဝေါ့ဝေါ့ ဥသြဆွဲလာတဲ့ ရဲကားနှစ်စီး က ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်နေသည် ..။
မြို့အပြင်ဖက်ကို ရောက်လာသည် ။
သိုးဖြူတို့ကား သည် ရုတ်တရက် လမ်းမကြီးကနေ လမ်းသေးတခုကို ကွေ့ချလိုက်သည် ။ စစ်ငြိမ်းမေတို့ အရှိန်မသပ်နိုင်ဘဲ လွန်မောင်းသွားကြသည် ..။
“ ပြန်လည့်..ပြန်လှည့် .....ညာဖက်ထဲ ကွေ့ဝင်သွားပြီ .....”
သိုးဖြူတို့ကား သစ်ပင်စုတွေ ကြားထဲက မြေနီ လမ်းကလေးထဲ ချိုးကွေ့ဝင်သွားသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေတို့ ပြန်လှည့်ပြီး လမ်းချိုးထဲ ၀င်ကာ ထပ်ချပ်မကွာ အနောက်က လိုက်သည် ..။
သစ်ပင်များ နောက်ကွယ်မှာ နေရာယူထားတဲ့ သိုးဖြူတို့လူတွေက စတင် ပစ်ခတ်ပြီ ...။
စစ်ငြိမ်းမေတို့ ကားတွေကို ဆက်မမောင်းဘဲ ရပ်လိုက်ကြပြီး ကားပေါ်က ဆင်းကာ အကာအကွယ်ယူကာ ပြန်လှန် ပစ်ခတ်ကြသည် ..။
သေနတ်သံတွေ ဆူညံသွားသည် ။
အနောက်က ရဲကားထဲက သူတို့လူတွေလဲ ပူးပေါင်းကာ ပစ်ခတ်ကြသည် ..။ ထင်ထက်ထွန်း ..ရဲကွန်မန်ဒိုSWAT အဖွဲ့ လွှတ်ပေးဖို့ စစ်ကူခေါ်သည် ..။ ကျည်ဆံများ ပိတုန်းကောင်တွေလို တ၀ီးဝီးနဲ့ သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်း သစ်ပင်တွေ ကို အကာအကွယ်ယူပြီး ဘေးကနေ ပန်းဝိုက်ပြီး ရှေ့တိုးနေသည် ..။ သူတို့ ပစ်ခတ်နေတဲ့နေရာကို နောက်ထပ် ရဲကားတွေ ထပ်ရောက်လာသည် ..။ ရဲတွေဖက်က ပစ်အား လူအား များလာတာကြောင့် သိုးဖြူတို့ဖက်က ဆုတ်ကုန်သည် ..။ သေနတ်သံတွေ လျော့လာသည် . ။ရဲတွေ ရှေ့တိုး လာကြသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်းတို့လဲ သစ်သားအိမ်လေး ကို တွေ့နေရပြီ ..။ ကျည်ဆံတွေ ဗလပွ မှန်ထားတဲ့ သိုးဖြူရဲ့ကားကို အိမ်ရှေ့မှာ တွေ့လိုက်ရသည် ..။ ကားစက်ခန်းထဲက မီးခိုးငွေ့တွေ ထွက်နေသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ နဲ့ ထင်ထက်ထွန်း သေနတ်တွေ ဆန့်တန်းချိ်န်ရွယ်ရင်း အိမ်ကလေးနားကို တိုးကပ်သွားကြသည် ..။
ရန်သူ တကောင်တမြည်းမှ မတွေ့တော့ ..။ သူတို့ အိမ်လေးထဲ ရောက်သွားသောအခါ ကိုယ်တုံးလုံး သတိမေ့နေသော ရဲမေပိုးဇာကို တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ ပိုးဇာသည် ပက်လက် ပေါင်ကားထားကာ သတိမေ့ နေသည် ။ ရင်ထွားထွားတွေက ပိုးစိုးပက်စက် မြင်နေရသလို ပေါင်တန်ဖြူဖြူတွေ ကြားက မို့ဖေါင်းခုံးထနေတဲ့ ပိုးဇာရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို ထင်းထငးလင်းလင်းကြီး တွေ့မြင်လိုက်ကြရသောအခါ ပိုးဇာနဲ့ နေ့စဉ် တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့သော ထင်ထက်ထွန်းသည် တအံ့တသြ ငေးမောကြည့်ရှုနေသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေလဲ ပိုးဇာကိုယ်ပေါ်ကို စောင်တထည် လွှမ်းခြုံပေးလိုက်သည် ..။
“ သိုးဖြူ ...ဘယ်ရောက်သွားလဲ ....”
ရဲကွန်မန်ဒိုများ ပိုက်စိပ်တိုက် သိုးဖြူကို ရှာဖွေနေကြသည် ..။ အနံ့ခံကောင်းသော ရဲခွေးများ လဲ သစ်ပင်ခြုံနွယ်တွေကြားထဲ ပါ လိုက်၇ှာနေသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေ လဲ ပိုးဇာကို အမြန်ဆုံး ဆေးရုံပို့ဖို့ လုပ်နေသည် ..။
သိုးဖြူ ရဲ့ စခန်း နဲ့ နီးတဲ့ လမ်းတွေ အားလုံး က သွားလာနေကြတဲ့ ကားတွေ ကို ရပ်တန့်ခိုင်းပြီး ရှာဖွေ ကြသည် ..။
“ ရဲမှူး.....တွေ့ပြီ ....သိုးဖြူကို တွေ့ပြီ ...အမြန်လာပါ ...”
ရဲအုပ်တယောက် ဝေါ်ကီတော်ကီ ကနေ သတင်းပို့သည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေနဲ့ ထင်ထက်ထွန်း အမြန်ဆုံး လိုက်သွားကြသည် ..။ ကားတစီးထဲ သေနတ်ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ သွေးလွန် သတိမေ့နေတဲ့ သိုးဖြူ ကို ရမိလိုက်ကြသည် ..။ ပထမဆုံး စစ်ငြိမ်းမေ
လုပ်တာက သိုးဖြူ ရဲ့ ညာလက်မောင်းက နဂါးရုပ်ကြီးကို စစ်ကြည့်ပြီး သိုးဖြူ ရဲ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီး သူ့ ပေါင်ကြားက လိင်တန်ကို ဆွဲထုတ်ခါ ကြည့်လိုက်တာပါဘဲ ..။
အိုး ...သူ...သူ မင်းသား ဘဲ ....။
လိင်တန်ထိပ်က မှဲ့နက်ကို စစ်ငြိမ်းမေ တွေ့လိုက်ရပါပြီ ...။
အင်း ...သိုးဖြူ ရဲ့ အိမ်နံရံ မှာ စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ ပုံတွေကိုပါ တွေ့ရတာကြောင့် သိုးဖြူရဲ့ ပစ်မှတ်ထဲမှာ စစ်ငြိမ်းမေ ပါ ပါဝင်နေကြောင်း သိလိုက်ကြရသည် ..။
ဂေးတယောက်လို နွဲ့နွဲ့လေး အနေပြပြီး မုဒိန်းတွေ ကျင့်နေသော မင်းသားသည် လူကုန်ကူးဂိုဏ်းကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင် အကြီးဆုံး ဖြစ်နေတာ ဖေါ်ထုတ် သိရှိကြရပြီ ..။
စစ်ငြိမ်းမေ နဲ့ ဇေယျာကျော် ဇေယျာကျော်ရဲ့ ရုံးခန်းကို ညဖက်ကြီး ရောက်လာကြသည် ..။
ဒီတခါတော့ ဇေယျာကျော်သည် တိုက်ခန်းထဲကို ၀င်ဝင်ချင်းကထဲက လေအေးစက် အဲကွန်းကို ဖွင့်လိုက်သည် ..။ မီးကိုတော့ မဖွင့်ဘူး ..။
အရင်တခါလိုဘဲ သူ့ ကျွန်းစားပွဲကြီးပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ကြသည် ။ ဇေယျာကျော် နမ်းပြီ ..။ မမစစ်ငြိမ်းမေ ရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးတွေကို အငမ်းမရဘဲ နမ်းစုတ်ပြီ ...။
မမစစ်ငြိမ်းမေကလဲ အငမ်းမရဘဲ ပြန် နမ်းစုတ်သည် ..။ နှစ်ယောက်စလုံး အသက်ရှုသံတွေ မြန်ဆန်နေသည် ..။ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို အမြန် ချွတပစ်နေသည် ..။ ကိုယ်တုံးလုံး
မောင်နှံ သည် စားပွကြီးပေါ်မှာ တသားထဲ ပူးကပ်လုံးထွေးနေသည် ..။ တယောက် နဲ့တယောက် ကိုင်တွယ်ဆုတ်ညှစ်နေသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေရဲ့ လက်ချောင်းတွေက ဇေယျာကျော်ရဲ့ သံမဏိချောင်းကြီး လို မာတောင်နေတဲ့ လိင်တန်တုတ်ကြီးကို ဆုတ်နယ်နေသည် ..။
“ ဇေယျာ ...”
“ အင်..မမ ...”
“ မီးဖွင့်လိုက်ကွယ် ...”
” ဗျာ ....”
ဇေယျာကျော် အံ့သြသွားသည် ..။ ခါတိုင်း ရှက်တတ်လို့ မီးမဖွင့်ဖို့ တဖွဖွ ပြောခဲ့သော မမ သည် ထူးထူးဆန်းဆန်း မီးဖွင့်ခိုင်းနေလို့ ..။
မမအလိုကျ မီးဖွင့်လိုက်သည် ..။
လင်းထိန်သော မျက်နှာကျက်က မီးရောင်ဖွေးဖွေးအောက်မှာ ကိုယ်လုံးတီး စုံတွဲ စားပွဲကြီးပေါ်မှာ ရှိနေသည် ..။ စစ်ငြိမ်းမေသည် ညိုတုတ်သော လိင်တန်ကြီးရဲ့ ထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်နေသည် ..။
စစ်ငြိမ်းမေ ပြုံးကာ...“ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး...ဇေယျာ ...ယူ့ပစ္စည်းကြီးက အောင်မြင်လွန်းလို့ မမ သဘောကျလို့ပါကွယ် ....”လို့ ပြောရင်း ငုံကာ စုတ်လိုက်ပါသည် ..။
ဇေယျာကျော် ရဲ့ ထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးမှာ ဘာမှဲ့မှ မရှိ ...။
Posted by okkala net at 3:58 AM
Sexcercise ( 2015 _ Thai Love Movie ) 18 +
လူပျိုလှည့်တေး Version2(Lu Pyo Hlet Tay Version 2) Official MV
လူပျိုရည်ပျက်ချင်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှာတွေ့ခဲ့သော ညမွှေးပန်းလေးတစ်ပွင့်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ကျွန်တော့်နာမည် အောင်သော် ပါ။ အသက်က ၁၇နှစ် သူငယ်ချင်းတွေက လူပျိုရည်မပျက်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဂိုဏ်းဝင်သွားအောင် မင်္ဂလာဈေး JJ အောက်မှာ …...